Today is: Tuesday, August 3, 2021
(No. 32, June 5, 2020)
၁။ အစိုးရတပ်နှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ် ပူးပေါင်း၊ RCSS/SSA စခန်းကို ပစ်ခတ်
၂။ ဆီဆိုင်တွင် တောင်သူများ ထွန်တုံးတိုက်ပွဲ ပြုလုပ်
၃။ တပ်မတော်၏ လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဒေသခံရွာသား ၂ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ
၄။ လက်နက်ကိုင်အန္တရာယ်ကြောင့် ပလက်ဝမှာ ရိက္ခာပြတ်
၅။ တပ်ဖွဲ့ဝင် သုံးဦးကို AA ဖမ်းသွားတယ်လို့ ALP စွပ်စွဲ
၆။ ရီမုမိုင်းဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံရသဖြင့် ပုဏ္ဏားကျွန်းအဝင်တွင် တပ်မတော်သားတချို့ ကျဆုံး
၇။ ကချင်တစ်ကျော့ပြန်စစ်ပွဲ ၉ နှစ်ပြည့်နေ့ စစ်ရှောင်စခန်းများတွင် ကျောက်တိုင်စိုက်ထူမည်
၈။ ကျောင်းအပ်ချိန် တိုင်းရင်းသားအမည် ထည့်သွင်းရေးအကြောင်းကြားစာ ပြည်နယ် ကရင်စာ/ ယဉ်မှ လက်ခံရရှိခြင်း မရှိသေး
၉။ AA ဖမ်းဆီးခဲ့သည့် ချင်းအမျိုးသမီး သေဆုံးမှု လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များထံ တင်ပြမည်
၁၀။ KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်ရှိ Covid -19 ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးဂိတ်တစ်ခု ဖျက်ဆီးခံရ
၁၁။ ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာလအတွင်းကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး COVID-19 ရောဂါကြောင့် မဲဆွယ်စည်း ရုံးမှုနှင့်ပတ် သက်၍ စည်းကမ်းချက်အသစ်များရှိလာမည်ဟု ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ပြောကြား
၁၂။ ဘိန်းစာပင်များ မဖျက်ဆီးဘဲထားရှိပါက မူးယစ်ဥပဒေဖြင့် အရေးယူမည်ဟု KNPF စာထုတ်
၁၃။ မြေပုံကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှစ်ဦး အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ တရားစွဲခံထားရ
၁၄။ မြဝတီ သစ်တောပိုင်မြေကို ခြံကွက်ရိုက် ရောင်းချနေသူများအား ဖော်ထုတ်အရေးယူမည်ဟု သစ်တောဌာနပြော
၁၅။ နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်အတွက် COVID-19 ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးချဟု ရှေ့ပြေးအသံအဖွဲ့အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်
၁၆။ နာဂ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဒုံဟီးမြို့နယ်အတွင်းရှိ ပြောင်းခင်းများ ပိုးကျမှုကြောင့်ပျက်စီးမှုရှိ၍ ဒေသအတွင်း လာမည့်နှစ် စားနပ်ရိက္ခာအတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်နိုင်ဟုဆို
၁၇။ ပြောင်းစိုက်ခင်းများတွင် ငမြှောင်တောင်ပိုး ဖျက်ဆီးမှုနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရ
၁၈။ မဟာဓာတ်အားလိုင်းသွယ်သည့် လုပ်သားကား ချောက်ထဲကျ ၂ ဦးသေ
၁၉။ တောင်ကုတ်မြို့နယ် ပန်းတင် (ငမောက်ချောင်း) တိုက်နယ်ဆေးရုံတွင် တာဝန်ကျဝန်ထမ်း လတ်တလော မရှိသဖြင့် ပိတ်ထား
ရပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံများ စိုးရိမ်
၂၀။ ခိုလမ်တွင် ကျွန်းတင် ကား(၁၃)စီး နှင့် အတူ ယာဉ်မောင်း တဦး ဖမ်းဆီးရ
၂၁။ မေခမြစ်ပေါ်ရေကာတာ ၆ ခု၏ အချက်အလက်မသိရသဖြင့် ဧရာဝတီမြစ်ရေအတက်အကျခန့်မှန်းရန် ခက်ခဲနေဟုဆို
၂၂။ COVID-19 လူနာသစ် Case-231 သည် မူဆယ်မြို့နယ် မုံးပေါ်တိုက်နယ် ကျန်းမာရေးမှူးဖြစ်ပြီး မူဆယ်ရှိ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း များကို COVID -19 ပိုးရှိ မရှိ စစ်ဆေးရာမှ ပိုးတွေ့ ခြင်းဖြစ်
၂၃။ သျှမ်းပြည်တွင်း ၂ လ ကျော် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးရေးဂိတ်များ ပိတ်သိမ်း
၂၄။ တောင်ကြီးမြို့နယ် တွင် ထိုင်းပြည်တော်ပြန် ၆၀ဝ ကျော် ရှိ
ကိုဗစ်ကာလကြား သျှမ်းပြည် အရှေ့ပိုင်း ပုံပါကျင်မြို့နယ်တွင် အစိုးရတပ်နှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်တို့ ပူးပေါင်းပြီး RCSS/SSA တို့ ယနေ့ မနက်ပိုင်းက ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွါးခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။
ဇွန် ၃ ရက် ယနေ့မနက်ပိုင်းက မိုင်းဆတ်ခရိုင် ပုံပါကျင်မြို့နယ်အတွင်း အမှတ် ၆၅ ခြေလျင်တပ်ရင်း နှင့် အမှတ် ၁၀ဝ၇ နယ်ခြားစောင့်တပ်တို့ ပူးပေါင်းပြီး သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ၊သျှမ်းပြည်တပ်တော်( RCSS/SSA) ယာယီတပ် စခန်းကို လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း RCSS ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူး ခမ်းစံ က သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။“တိုက်ပွဲကတော့ မနက် ၈ နာရီ ကနေ ၁၀ နာရီထိဖြစ်သွားတယ်။ တပ်နဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ် ပူးပေါင်းပြီး ကျနော်တို့ တပ်စခန်း ရှိတဲ့နေရာကို ပစ်တာပါ။ လူထိခိုက်မှုတော့မရှိဘူး” ဟု ဗိုလ်မှူး ခမ်းစံ ကဆိုသည်။
အစိုးရတပ်နှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်တို့ ပူးပေါင်းပြီး စစ်အင်အား ၁၀ဝ တို့သည် မော်တာ ၆၀ မမ၊ M 79 ၊တို့ဖြင့် RCSS/SSA ၏ ယာယီတပ်စခန်းကို ပစ်ခတ်ကြောင်းသိရသည်။ လက်ရှိမှာ အစိုးရတပ်မတော်နှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်တို့သည် စစ်အင်အား များ ဖြည့်နေမှုကြောင့် တိုက်ပွဲများဆက်လက် ဖြစ်ပွားမည်ကို ဒေသခံများက စိုးရိမ်နေကြသည်။ ဧပြီလကလည်း RCSS/SSA နှင့် အစိုးရတပ်မတော်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တိုက်ပွဲများထပ်မံ မဖြစ်ပွားအောင် ၂ ဖက် ထိန်းသိမ်းနေထိုင်သွားမည်ဟုလည်း နှုတ်ကတိများ အပြန်အလှန်ပေးခဲ့ပြီး ကိုဗစ်-၁၉ ကာလ အတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လည်း ပြောဆိုထားကြသည်။
ထို့ပြင် အစိုးရတပ်မတော် ဘက်မှလည်း အကြမ်းဖက်ဟု ကြေညာထားသည့် အဖွဲ့အစည်းရှိသည့်နေရာမှ အပ ကျန် နယ်မြေ များတွင် မေ ၁၀ ရက်မှ သြဂုတ် ၃၁ ရက်ထိ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ် ထိန်းချုပ်သည့် ကာလအနေဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲ ထားကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့သေးသည်။ RCSS/SSA သည် တနိုင်ငံလုံး အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ တခုဖြစ်သည်။ https://burmese.shannews.org/archiv es/16919
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဆီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်း အစိုးရတပ်သည် တောင်သူများ၏ မြေယာ များ၊ လယ်ထွန်စက်များကို သိမ်းဆည်းသွားသဖြင့် တောင်သူများက ထွန်တုံးတိုက်ပွဲ ပြုလုပ်သည်။ မေလ နှောင်းပိုင်းက အစိုးရတပ်နှင့် ဆီဆိုင်မြို့နယ် ကျေးရွာ ၅ ရွာမှ တောင်သူများ မြေယာအငြင်းပွားမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် အစိုးရတပ်မှ ဒေသခံ တောင်သူ ၇၀ ကို တရားစွဲခဲ့ကြပြီး ၎င်းတို့၏ လယ်ထွန်စက် ၂၉ စီး ပါသိမ်းဆည်းခြင်းခံရကြောင်း ဆီဆိုင်မြို့နယ် ဒေသခံများ ပြောပြချက်အရသိရသည်။“စစ်တပ်က တောင်သူတွေရဲ့ လယ်ထွန်စက်ကိုသိမ်းထားတော့ တောင်သူတွေက ကျွဲ ၊ နွားတွေ မရှိတော့ အရင်ကလို လူတွေ နဲ့ ပြန်လုပ်နေရတယ်။ စိုက်ပျိုးဖို့ အရမ်းအခက်ခဲ ဖြစ်နေကြတယ် ” ဟု ဆီဆိုင်မြို့ အောင်ချမ်း သာ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစံဝင်းမောင် က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကိုပြောသည်။
ဆီဆိုင်မြို့ အခြေစိုက် အမှတ် (၄၂၃) ခြေလျင်တပ်ရင်း နှင့် (၄၂၄) ခြေလျင်တပ်ရင်းများက မေလ ၃၀ ရက် တွင် မြေဧက ၉၀ဝ ကို သိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသိရသည်။“ဒီပြသနာက ဒီကနေ့ထိပဲ မပြီးသေးဘူး။ သူတို့ သိမ်းထားတဲ့ မြေတွေက ဘိုးဘွား ပိုင်မြေဖြစ်တယ်။ ပြည်ထဲရေးမှာလည်း အမည်ပေါက်ဖြစ်ထားတယ်။ အခု တောင်သူတွေ အရမ်းဒုက္ခရောက်နေတယ်။ မိုး ရာသီလည်းရောက်ပြီ ပြောင်းတွေ စပါး တွေ စိုက်ပျိုးချိန်ရောက်ပြီလေ”ဟု ဦးစံဝင်းမောင် ကပြောသည်။ လက်ရှိမှာ စစ်တပ် မှ တောင်သူ ၇၀ ဦး ကို ဆီဆိုင်မြို့မ ရဲစခန်းတွင် ပုဒ်မ ၄၄၇ နှင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
ဆီဆိုင်မြို့နယ် ကျေးရွာ ၅ ရွာမှ ဒေသခံများသည် မြေအငြင်းပွားမှုကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးကောင်းကောင်းမွန်မွန် မလုပ်နိုင်သလို တဖက်တွင်လည်း မြေယာအမှုကိုဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရဦးမည်ဖြစ်သဖြင့် ခက်အခဲများရင်ဆိုင်နေရကြောင်းလည်း ဆီဆိုင် မြို့နယ် ဒေသခံတောင်သူများကဆိုသည်။“ကျနော်တို့ ဒီမြေယာမှာ စိုက်ပျိုးလာတာကြာပြီ၊ ဒီလယ်မလုပ်ရင် ကျနော်တို့ ဘာသွားလုပ်ရမှာလဲ။ တဖက်ကလည်း ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်တော့ နိုင်ငံခြားသွားလည်းမရဘူး။ တပ်က မတရားသိမ်းတာ၊ လုပ်နေ တာ” ဟု ဆီဆိုင်မြို့နယ် တောင်ယာလုပ်ကိုင်သူတဦး က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကို ပြောသည်။ စစ်တပ်မှ သိမ်းဆည်း သည့် မြေယာများသည် ပအိုဝ်း တောင်သူများပိုင်ဆိုင်သည့် မြေယာများဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုဗစ်ကာလအတွင်း တောင်သူများ စားဝတ် နေရေးအတွက် လယ်ယာကောင်းမွန်စွာစိုက်ပျိုးနိုင်ရန်အတွက် အစိုးရတပ်အနေဖြင့် ကူညီပေးသင့်ကြောင်းလည်း ၎င်း တောင်သူက ပြောသည်။မေ ၃၀ ရက်တွင် တောင်သူများသည် မိမိပိုင်မြေယာပေါ် ထွန်ယက် စိုက်ပျိုးနေစဉ် တပ်မှ ဝင်ရောက်ကာ အမိန့်အာဏာ ပေး ခြင်း၊ လယ်ထွန်နေသည့် စက်များကို ဆီဆိုင်ရဲစခန်းသို့ ပို့ဆောင်လိုက်သည့် ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာတွင် တွေ့ရသည်။ ထို့ပြင် စစ်တပ် မြေယာသိမ်းခြင်းခံရသည့် တောင်သူများ၊အမှုဖွင့်ခံရသည့် အသက်အရွယ်ကြီးသည့် အမျိုးသမီး များ ငိုကြွေးသည့် ရုပ်သံလည်း လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် ပျံ့နှံ့ခဲ့သည်။ အစိုးရ တပ်၏ မြေယာသိမ်းမှုသည် ယခုရက်ပိုင်း သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းသာမက သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် သိမ်းဆည်းမှုများရှိနေသဖြင့် သျှမ်းပြည်သူများလည်း စိုးရိမ်ပူပန်မှု ဖြစ်ပွားနေကြသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/16897
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖာပွန်ဒေသတွင် မြန်မာ့တပ်မတော် လက်အောက်ခံတပ်ရင်းမှ ဒေသခံကျေးရွာများထဲသို့ လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ယမန်နေ့ ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့က ဒေသခံရွာသား (၂) ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး နီးစပ်ရာ ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင် ခဲ့ရကြောင်း ဒေသတွင်း သတင်းအရင်းအမြစ်များထံမှ သိရသည်။
မူတရော်(ဖာပွန်)ခရိုင်၊ ဒွယ်လိုးမြို့နယ်၊ မောလော်ကလိုးကျေးရွာအနီးတွင် ယမန်နေ့က တပ်မတော်နှင့် KNLA တပ်ဖွဲ့တို့ အ ကြား ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရာတွင် မောလော်ကလိုး ကျေးရွာအနောက်ဘက်ရှိ ဝါးကလိုး ထကျေးရွာသို့ တပ်မတော် အမှတ်(၈) စစ်ဆင်ရေး ကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ ခြေမြန်တပ်ရင်း(ခမရ-၄၁၀) စခန်းမှ လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဝါးကလိုးထကျေးရွာ ဒေသခံ သားအဖနှစ်ဦးကို ထိမှန်ခဲ့ကြောင်း အမည်မဖော်လိုသူ ဒေသခံတစ်ဦးက ယခုလိုပြောသည်။ “မနေ့က ၂ နာရီကျော်လောက်မှာ KNLA နဲ့ ပစ်ကြတာ။ အဲ့ဒါ သူတို့ (စစ်တပ်) ဘက်က လက်နက်ကြီး ၂ လုံး ပစ်လိုက်တာ ရွာထဲကို ကျပြီး ရွာထဲက သားအဖနှစ်ဦးကို သွားထိတာပဲ။ သူတို့ကို ကမမောင်းဆေးရုံကို ပို့လိုက်တယ်” ဟု ၎င်းဒေသခံက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါ လက်နက်ကြီးထိမှန်သူ သားအဖနှစ်ဦးမှာ အသက် (၅၂) နှစ်အရွယ် စောဖားပိုကေးနှင့် ၎င်း၏ သမီး ဖြစ်သူ အသက် (၁၆)နှစ်အရွယ် နော်မေရီတို့ ဖြစ်ကြသည်ဟုလည်း အဆိုပါ ဒေသခံက ဆက်ပြောသည်။ ယင်း ဒေသခံ ကျေးရွာသားနှစ်ဦး လက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီး ကမမောင်း ဆေးရုံသို့ လာရောက်ပို့ဆောင်ကုသခဲ့ ကြောင်း ကမမောင်းဆေးရုံတွင် တာဝန်ကျနေ သည့် အမည်မဖော်လိုသူ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကလည်း ကေအိုင်စီသို့ အတည်ပြုပြောဆိုသည်။ ၎င်းက “မိုင်း အစထိ တာ။ ရွာသားပဲ၊ သူ့အဖေနဲ့ သမီးနဲ့။ သူ့အဖေက ခြေထောက်မှာထိတာ၊ သူ့သမီးက လက်မှာထိတာ။ သိပ်တော့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး မဖြစ်ဘူး။ ဒီနေ့မနက် ဆေးရုံကတောင် ဆင်းသွားပြီး။ ရေပူရွာက လို့တော့ ပြောတယ်။ ကလေးမလေးက ၁၃ နှစ်ပဲရှိသေး တယ်”ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ ပစ်ခတ်မှုနှင့် ဒေသခံ ထိခိုက်ခံရမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး-KNU တပ်မဟာ (၅)၊ မူတရော် (ဖာပွန်)ခရိုင်မှ မြေပြင်သတင်းမတက်လာသေးသောကြောင့် တစုံတရာမသိရှိရသေးကြောင်းပြောဆိုသလို တပ်မတော် တာဝန်ရှိ သူဘက်ကိုလည်း ဆက်သွယ်မေးမြန်း၍ မရရှိပေ။ လတ်တလောကာလတွင်လည်း KNU တပ်မဟာ (၅) လက် အောက်ခံ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များနှင့် မြန်မာတပ်မတော် လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတို့အကြား ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု မကြာခဏ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီး ပြီးခဲ့သည့် လ တွင်လည်း အရပ်သားထိခိုက်မှု ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရမှုရှိခဲ့ကြောင်း ဒေသတွင်း သတင်းအရင်း အမြစ်များထံမှ သိရသည်။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80%90%e1%80%95%e1%80% b9%e1%80%99%e1%80%b1%e1%
ပလက်ဝမြို့နယ်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ဒေသခံအများစုဟာ တောင်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ်နဲ့ ဆက်သွယ်ထားတဲ့ ကုလားတန်ရေလမ်းကြောင်းကို အသုံးပြုကာ ကုန်ပစ္စည်းတွေ ဖလှယ်ပြီး စားဝတ်နေရေးတွေကို ဖြေရှင်းနေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ ကျောက်တော်မြို့နယ်ကို သွားတဲ့ရေလမ်းကြောင်းမှာ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေက ခေါ်ယူစစ်ဆေးတာတွေ ပစ်ခတ်တာတွေ ရှိနေတာကြောင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှုမရှိဘဲ ပလက်ဝမြို့ပေါ်မှာ စာနပ်ရိက္ခာတွေ ပြတ်လပ်နေတယ်လို့ ပလက်ဝ ဒေသခံ ဆလိုင်းခင်မောင်က ပြောပါတယ်။ “ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်လောက်ကတည်းက မသွားရတာဗျ။ မသွားရ ဘူးဆိုတာကလည်း ဘယ်သူမှတားမြစ်ထားတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ သွားရင် ကျောက်တော်မြို့နယ် တင်းမရွာ နား လောက် မြန်မာ့တပ်မတော်သားတွေက ပစ်ခတ်တာတွေရှိတယ်။ လှေပေါ်က လူတွေကိုခေါ်တယ် မေးမြန်းတယ်၊ သတ်ဖြတ် တယ်။ ပစ်ခတ်တာတွေရှိတယ် တချို့ဆိုရင် ဒဏ်ရာ ရသွားတာတွေရှိတယ်။ ဟိုတစ်လောကဆိုရင် သေသွားတဲ့ သူတွေ တောင်ရှိတယ်။ ကျနော်တို့မှာ လမ်းကြောင်းက ဒီရေလမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲ ရှိတာပေါ့နော်။ ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ ဆက်သွယ်ထား တာပေါ့။ အခုက ကားလမ်းကတော့ ပေါက်နေပြီ သွားလို့မရဘူး။ ကုန်းလမ်းကသွားရင်လည်း ပစ်တယ်၊ ရေလမ်းကသွားရင် လည်းပစ်တယ် ဘယ်ကမှ သွားလို့မရဘူးအခုက။” လက်ရှိအချိန်ထိ ပလက်ဝမြို့ဘက်မှာ စားနပ်ရိက္ခာတွေ ရှားပါးနေသလို ကုန်းဈေးနှုန်းတွေလည်း ဆက်လက်မြင့်တက်နေတယ်လို့ သူကဆက်ပြောပါတယ်။
ပလက်ဝဒေသခံတွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ စားနပ်ရိက္ခာပြတ်လပ်တာတွေကို သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာတွေကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ တင်ပြထားပေမဲ့ လက်ရှိအချိန်ထိ ဒေသခံတွေ စားနပ်ရိက္ခာပြတ်လပ်တာတွေကို ရင်ဆိုင်နေရတုန်းပဲလို့ ချင်းပြည်နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ် ဆလိုင်မျိုးထိုက်က ပြောပါတယ်။ “အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတာက မြို့ပေါ်မှာနေတဲ့ သူတွေရော ပြီးတော့အနီးအနားကျေးရွာတွေမှာ နေတဲ့သူတွေရော ကျေးရွာတွေမှာ တိုက်ပွဲရှောင်တဲ့အနေနဲ့ နေတဲ့ တချို့ မြို့ပြင်ပ ကျေးရွာတွေမှာ ရှိတယ်လေ။ သူတို့မှာ စားဖို့မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ ကျနော့်ကိုလှမ်းပြီးတော့ ဖုန်းနဲ့ အကြောင်းကြားတာ တွေ ရှိတယ်။ ကုန်ဈေးနှုန်းက ရိက္ခာပြတ်တယ်ဆိုတော့ တက်မှာပဲလေ။ ကျနော်ကတော့ သိပ်ပြောစရာ မရှိဘူး။ ကျနော်ကတော့ သက်ဆိုင်ရာ တွေကို အကြောင်းကြားပေးတယ်။ လူထုတွေ လှမ်းပြီးတော့ အကူအညီတောင်းတာတွေကို ချင်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ကိုရောက် အချိန်နဲ့ တပြေးညီအကြောင်းကြားပေးပါတယ်။”
ပြီးခဲ့လပိုင်းလောက်ကလည်း ပလက်ဝနယ်ကို စားနပ်ရိက္ခာတွေ ထောက်ပံ့ပေးဖို့ သွားတဲ့ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ WFP ယာဉ်တန်းက လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက ပစ်ခတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်ထိလည်း ပလက်ဝမြို့နယ်တွေမှာ ကြိုကြားကြိုကြား ပစ်ခတ်မှုတွေ ဆက်လက်ရှိနေသေးလို့ ပလက်ဝဒေသခံတွေက ပြောဆိုကြပါတယ်။ https://burmese .voanews.com/a/chin-pa-lat-wa/5447344.html
တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ/ ရခိုင် လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (ALP/ALA) ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးကြီးခိုင်စိုးမြက သူတို့အဖွဲ့ဝင်တချို့ကို ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA က ဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၃၁ ရက်နေ့က တောင်ကုတ်မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ ခိုင်ဝင်းလှိုင်ကို AA အဖွဲ့က ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ ဗိုလ်မှူး ကြီး ခိုင်စိုးမြက ပြောပါတယ်။“ကျွန်တော်တို့ ဖမ်းသွားတဲ့ဟာကတော့ AA အဖွဲ့ကလို့တစ်ထစ်ချပြောနိုင်တယ်။ သူ့ကို မဖမ်း ခင် သုံးရက်လောက်က ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခု AA ကလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ကို အကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ လေ့လာကြည့်တော့ AA ကဖမ်းသွားတယ်လို့ သိရတယ်။ ဖမ်းသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာ တောင်ကုတ်မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာ အမျိုး သားလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဆိုပြီး သူတို့က ခေါင်းရောင်း၊ ခေါင်းဝယ်နဲ့ သတ်ပစ်လိုက်ပြီလို့ ထုတ်ပြန်ချက်စာတမ်း ထွက်ပေါ်လာတာ တွေ့ရတယ်”ပေါက်တော့မြို့နယ် ဗရက်ချိုင်ကျေးရွာက ရဲဘော်ခိုင်မောင်ခင်ဝင်းနဲ့ ခိုင်မောင်လုံးတို့ကို မေလ ၂၃ ရက်နေ့က AA အဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦးလောက်က လာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာကြောင့် AA အဖွဲ့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ကြားခံတာဝန်ရှိသူတွေက တဆင့် အကြိမ်ကြိမ် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းခဲ့ပေမယ့် လက်ရှိအချိန်အထိ အောင်မြင်မှုရခဲ့ဘူးလို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့ တောင်ကုတ်မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသားလုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်းက ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်မှာတော့ အများအကျိုးကို နစ်နာဆုံးရှုံးစေရန် ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ခိုင်ဝင်းလှိုင်ကို အဲဒီ နေ့ညနေပိုင်း ခေါင်းရောင်း၊ ခေါင်းဝယ် စနစ်နဲ့ သုတ်သင်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ AA တို့ ဘယ်လို ပတ်သက်နေလဲဆိုတာ အဖြေရှာနေဆဲဖြစ်ပြီး ခိုင်ဝင်းလှိုင်ကို သတ်လိုက်တာဟာ ဘယ်သူ့လက်ချက်လဲဆိုတာ လေ့လာနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ ဗိုလ်မှူး ကြီး ခိုင်စိုးမြက ပြောပါတယ်။ AA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ခိုင်သုခကတော့ ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီဝင်တွေ သတ်ဖြတ် ခံရတာဟာ AA အဖွဲ့နဲ့ သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိအကြောင်း ငြင်းဆိုပါတယ်။AA အဖွဲ့နဲ့ ALP ကြား ပြဿနာဟာ အခုမှစတဲ့ ပြဿနာမဟုတ်သလို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကြား သဘောထားမတူ ကွဲပြားလာတဲ့အခါ တစ်ချို့ပြဿနာတွေမှာ အင်အားသုံး ဖြေရှင်းတာတွေ တွေ့ရပြီး ပြည်တွင်းစစ်အတွင်း မှာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြား တွေ့ရတဲ့ ပြဿနာဖြစ်တာကြောင့် သိပ်ထူးဆန်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်တော့ မဟုတ်ဘူးလို့ နိုင်ငံရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသားအရေး လေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးမောင်မောင်စိုးက ပြောပါတယ်။ တောင်ကုတ်မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသားလုံခြုံ ရေးအဖွဲ့လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ အဖွဲ့က ဘယ်သူတွေနဲ့ ဆက်နွယ်သလည်းဆိုတာ ခန့်မှန်းဖို့ မလွယ်ဘူးလို့ ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နာမည်ကျော် မြောက်ဦးစစ်တမ်း စာအုပ်ကိုလည်း ရေးသားပြုစုထားတဲ့ ဦးမောင်မောင်စိုးက ပြောပါတယ်။
“ALP ကို ၁၉၆၇ ခုနှစ်မှာ တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက် တနိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်မှာ ပါဝင်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ AA အဖွဲ့ကတော့ ၂၀ဝ၈ ခုနှစ်မှာ ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့ ဒီနှစ်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အစိုးရတပ်မတော်နဲ့ အဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရှိနေတဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/aa-alp-06032020200944.html
ရန်ကုန် – စစ်တွေ ကားလမ်းမပေါ် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့အဝင် ကင်းချောင်းတံတားထိပ်သို့ လမ်းလုံခြုံရေး ကင်းလှည့်သည့် တပ်မ တော် စစ်ကြောင်းတခု ရောက်ရှိလာစဉ် ရီမုမိုင်း ၂ လုံး ပေါက်ကွဲသဖြင့် တပ်မတော်သားတချို့ ကျဆုံးပြီး ဒဏ်ရာ ရရှိများ လည်းရှိကြောင်း တပ်မတော်မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောသည်။ ယင်းပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်စဉ် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ ဘက်မှ စစ်တွေဘက်သို့ ဆိုင်ကယ် စီးနင်းလာသူ အရပ်သား ၂ ဦးကိုလည်း ထိခိုက်မိပြီး ၁ ဦး သေဆုံးသွား ခဲ့သည်။ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက“တပ်မတော်က ရန်ကုန်-စစ်တွေ လမ်းမကြီး လုံခြုံရေးအတွက် ကင်းလှည့်လည်ဖို့ အတွက် လမ်းလျှောက်သွားနေတာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ အရပ်သား ၂ ဦးကလည်း ဆိုင်ကယ်နဲ့ ဖြတ်မောင်းလာတယ်။ အဲဒီမှာ ဖြစ်တာ”ဟု ရှင်းပြသည်။
ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်တွင် မိုင်းပေါက်ကွဲသည့် ဖြစ်စဉ်များမှာ မြို့ပေါ်တွင် ဖြစ်လေ့နည်းပြီး နယ်ဘက်တွင်သာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိ ကြောင်း၊ ယခုအခါ မြို့အဝင်အထိ ရောက်ရှိလာသဖြင့် ယခုလို မဖြစ်ပွားစေချင်ကြောင်း ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် ပြည်နည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သန်းတင်က ပြောသည်။“မိုင်းဖြစ်စဉ်ကတော့မှန်တယ်။ အရပ်သားတယောက် ဒဏ်ရာ ရတယ်။ တယောက်က ဆုံးသွားပြီ။ တပ်မတော်သားတွေ ကျ၊ မကျတော့ မသိဘူး။ ဒဏ်ရာရတဲ့ အရပ်သား တယောက်ကို တော့ စစ်တွေကို ခေါ်သွားပြီ။ မိုင်းကတော့ ဘယ်က ထောင်မှန်းလည်း မသိဘူး။ ဘယ်က လုပ်လိုက်မှန်း မသိဘူး”ဟု ဦးအောင်သန်းတင်က ပြောသည်။
တပ်မတော်ကမူ ရက္ခိုင့် တပ်မတော် (AA) အဖွဲ့၏ လက်ချက်ဟု စွပ်စွဲထားပြီး ယခုနောက်ပိုင်းတွင် ကြီးမားသည့် မိုင်းအမျိုး အစားများကို တင်ဆင် အသုံးပြုလာ၍ လူ၊ ယာဉ်များကိုပါ ထိခိုက်ပျက်စီးမှု ကြီးမားလာကြောင်း ပြောသည်။“သူတို့ အရင် ကတည်းက ရခိုင်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ ယာဉ်တန်းကို ရီမုနဲ့ တိုက်ခိုက်ဖူးပါတယ်။ အခု နောက်ပိုင်းမှာ အိန္ဒိယ တပ်မတော်က ဒီဘက် ကို သတင်းပေးတဲ့အခါမှာ အိန္ဒိယ သတင်းစာတချို့မှာလည်း ရေးခဲ့တာ ရှိတယ်။ AA အနေနဲ့ ရီမု နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော့ကျ နည်းပညာမြင့်တဲ့ဆီက အထောက်အပံ့ ရရှိထားတယ်”ဟု ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်း က ပြောသည်။ယခု ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ AA အဖွဲ့ထံမှ လွတ်လပ်သည့် သဘောထား ရရှိနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။ သို့သော် ယခင် မိုင်းဖြစ်စဉ် များတွင် AA က ၎င်းတို့အဖွဲ့၏ လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံပြောဆိုလေ့ ရှိသည်။ မိုင်းအန္တရာယ် အသိပညာပေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ၏ စာရင်းပြုစုချက်များအရ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် မိုင်းနင်းမိသည့် အရပ်သား ၅၈ ဦး ရှိပြီး ထိုအထဲမှ ၁၉ ဦးမှာ အသက်သေဆုံးခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ထဲတွင် မိုင်းနင်း မိသူ မည်မျှရှိကြောင်း မသိရှိရသေးပါ။ လက်ရှိ အချိန်အထိ အစိုးရနှင့် AA တို့ကြားတွင်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် သဘောတူညီမှု တစုံတရာမရရှိသည့် အပြင် AA ကို အစိုးရက အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်သဖြင့် ရခိုင်မြောက်ပိုင်းတွင် တိုက်ပွဲများ ပိုမိုပြင်းထန်လျက်ရှိသလို အရပ်သား သေဆုံး ထိခိုက်မှုများမှာလည်း နေ့စဉ် ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားနေသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news /2020/06/03/223941.html
မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့၏ ကချင်ဒေသတစ်ကျော့ပြန် တိုက်ပွဲ ၉ နှစ်ပြည့် ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့တွင် အထိမ်းအမှတ်ကျောက်တိုင်များကို စစ်ရှောင်စခန်းများတွင် စိုက်ထူသွားမည်ဟု သိရသည်။ ‘ANHTE GALOI N MALAP NA GA AI’ (ကျွနိုပ်တို့ ဘယ်တော့မှ မေ့မည်မဟုတ်) ဆိုသည့် စာတမ်းထိုး ကျောက်တိုင်ကို မြစ်ကြီးနားမြို့တွင်း တပ်ကုန်း (COC) စခန်း၊ ဂျန်မိုင်ကောင် (RC) နှင့် လယ်ကုန်း (ဗက်လင်) စစ်ရှောင်စခန်း စသည့် ၃ နေရာတွင် စိုက်ထူ မည်ဖြစ်သည်။
“တကယ်တမ်းတော့ ဦးဆုံးရောက်တဲ့ စခန်းနဲ့ နောက်ဆုံးရောက်တဲ့ စခန်းတွေမှာ အရင်စိုက်ထူဖို့ စီစဉ်ထားတာ။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့စခန်းတွေမှာက နေရာအခက်အခဲရှိနေတယ်။ အဲကြောင့် ဒီ ၃ နေရာတွင်မှာ သာပြုလုပ်နိုင်သေးတာပေါ့။ အခုလိုလုပ် ဆောင်တာကလည်း ရှင်းရှင်းလေးဘဲ။ စစ်ရှောင်စခန်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ နေရာတွေကို ဘယ်တော့မှမမေ့ဖို့ အမြဲတမ်းအမှတ်ရနေဖို့ ဖြစ်တယ်။ ကျန်တဲ့စခန်းတွေမှာလဲနောက်နောင်ပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်”ဟုကချင်လူငယ်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး မဆွတ်ဆိုင်းထွယ် က ပြောသည်။ နေရာအခက်အခဲကြောင့် စစ်ရှောင်စခန်းတချို့တွင် ယခုနှစ်ကျောက်တိုင် စိုက်ထူနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့သော်လည်း လာမည့်နှစ်များတွင် ဆက်လက်စိုက်ထူသွားမည်ဟု သိရသည်။ ထို့အပြင် စစ်ရှောင်များ၏ ခံစားချက်များနှင့် စစ်ရှောင်များ၏ အခြေအနေကို ဆွေးနွေးမည့်အစီစဉ်ကိုလည်း ကချင်လူငယ်များဦးဆောင်ကာ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့မှ ၈ ရက်နေ့အထိ အွန်လိုင်း မှတဆင့် ၃ ရက်သာ ထုတ်လွင့်သွားမည်ဟု ပြောသည်။
“လူငယ်တွေက စစ်ရှောင် ၉ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားကို ၃ ရက်ပြုလုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်။ အဲ့မှာက စစ်ရှောင်တွေနဲ့ ပတ်သက် ပြီး စကားဝိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်။ အဓိကတော့ စစ်ရှောင်တွေက သူတို့ရဲ့ ၉ နှစ်တာဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အတွေ့ အကြုံတွေ ပြောပြမယ်။ ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကို ဆွေးနွေးမယ်” ဟု ပြောသည်။ အဆိုပါ ၃ ရက် စကားဝိုင်းတွင် စစ်ရှောင်များ၏ ၉ နှစ်တာကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် အခက်အခဲများ၊ အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်များနှင့် အစိုးရ၏ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်ပတ်သက်သော ဆောင်ရွက်မှုများကို စကားဝိုင်းအဖြစ် ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါဆွေးနွေးမှုတွင် ကချင်ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး အပါအဝင် Kachin Humanitarian Concern Committee KHCC တာဝန်ရှိသူများနှင့် စစ်ရှောင်ပြည်သူမျာက အဓိက ပါဝင်ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ကချင်တစ်ကျော့ပြန် တိုက်ပွဲ ၉ နှစ်ပြည့်သည့် ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့တွင် ကချင်အမျိုးသားအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ WMR မှလည်း ဝတ်ပြုအစီစဉ်များကို အွန်လိုင်းမှတဆင့် ထုတ်လွင့်သွားမည်ဟု ပြောသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/06/03/%e1%80% 80%e1%80%81%e1%80%bb%e1
June 3, 2020ပ
ညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနက ညွှန်ကြားထားသည့် ကျောင်းအပ်ချိန်၌ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၏ အမည် များထည့်သွင်းလက်ခံပေးနိုင်ရေး အကြောင်းကြားစာကို ကရင်ပြည်နယ် စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုတိုး တက်ပြန့်ပွားရေး အသင်း အနေဖြင့် လက်ခံရရှိခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မွန်ပြည်နယ်ရှိ ကရင်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီများထံသို့ အဆိုပါ အကြောင်းကြား စာများ လက်ခံရရှိပြီဖြစ်သော်လည်း မိမိတို့အနေဖြင့် လက်ခံရရှိခြင်းမရှိသေးကြောင်း ကရင်ပြည်နယ်၊ စာ/ယဉ်အသင်း အတွင်းရေး မှူး နန်းမြင့်တင်က ယခုလိုပြောသည်။ “ အကြောင်းကြားစာတွေရောက်လာတာတော့ တစ်ခုမှ မရှိပါဘူး။ တရားဝင်မှုအနေနဲ့ စာထုတ်ရင် ပို တော့ကောင်းတာ ပေါ့နော်။ မွန်ပြည်နယ်ဆို လဝကလည်းထုတ်တယ်။ အောင်မြင့်ခိုင်(ကရင်ရေးရာဝန်ကြီး) လည်းထုတ်တယ်လေ။”ဟု ယနေ့(ဇွန် ၃ ရက်)တွင် ကေအိုင်စီသို့ပြောသည်။ အဆိုပါ တိုင်းရင်းသားအမည် ကိစ္စကို ကရင် ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကရင်၊ မွန်၊ ပအိုဝ်း၊ ရှမ်း စသည့် စာ/ယဉ် ကော်မတီ အသင်းအဖွဲ့များထံသို့ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ဌာန၊ ကရင်ပြည်နယ် ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးအနေဖြင့် အကြောင်းကြားစာများ ပေးပို့ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ကြား ရေးမှူးရုံး တာဝန်ရှိသူများက ကေအိုင်စီသို့ ယနေ့တွင်ပြောသည်။
၂၀၂၀-၂၁ ပညာသင်နှစ်မှစတင်၍ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနက ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှစတင်ကာ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ၏ အမည်ရှေ့တွင် ၎င်းတို့ကိုကိုယ်စားပြုသည့် အမှတ်သင်္ကေတ စကားလုံးများ ထည့်သွင်း လက်ခံပေးနိုင်ရေး ညွှန်ကြားထား မှုများ ရှိခဲ့သည်ဟုလည်း သိရသည်။ အဆိုပါညွှန်ကြားမှုအတိုင်း ကရင်ပြည်နယ်၊ ပညာရေးမှူးရုံးမှ ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့စွဲဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်ပညာ ရေးမှူးရုံးအသီးသီးထံသို့ စာထုတ်ပေးပို့ခဲ့ပြီး ကျောင်းအဆင့်အထိစာများ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံး ဒုတိယ ညွန်ကြားရေးမှူး ဦးစိုးဝင်းက ပြောသည်။ “ကျောင်းသွားအပ်တဲ့အခါ မိဘ အုပ်ထိန်းသူတွေအနေနဲ့ ကရင်လူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် စောထည့် ပေးပါ၊ နန်း ထည့်ပေးပါ။ နော် ထည့်ပေးပါလို့ ပြောရ မယ်ပေါ့။ ဆရာမတွေကလည်း ကျောင်းသား လက်ခံတဲ့အခါ မေးရမယ်ပေါ့။ အဲလို နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပြောကြပါ။ ဒါက အရေးကြီး တာကိုး။ ဒီနှစ် ကတော့ တရားဝင်စာထုတ်တော့ မှန်မှန်ကန်ကန်လေးဖြစ်လာ တယ်ပေါ့။” ဟု ပြောသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ကရင်လူမျိုးများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ကလေးများကို ကျောင်းအပ်ချိန်တွင် နာမည်အစ၌ ကရင် အမည်များဖြစ်သည့် (စော၊ စ၊ နန့်၊ နော်) များထည့်သွင်းရန် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကရင်စာနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီက မေ ၁၈ ရက်နေ့တွင် မြို့နယ်စာယဉ် အသီးသီးသို့ စာထုတ်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ အလားတူ မွန်ပြည်နယ်အတွင်း နေထိုင်ကြသည့် ကရင်တိုင်းရင်းသားများအနေဖြင့် လာမည့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ် တွင် စော၊ နန်း၊ နော် တို့ကို ထည့် သွင်း အပ်နှံသွားကြရေး မွန်ပြည်နယ် ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး စောအောင်မြင့်ခိုင်က မေလ ၂၆ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ကရင် စာ/ယဉ် ကော်မတီအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာသို့ အကြောင်းကြား စာပေးပို့ကာ တိုက်တွန်းခဲ့သေးသည်။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80%b1%e1%80%80%e1%8 0%ba%e1%80%ac%e1%80%84%e1%8
၉။ AA ဖမ်းဆီးခဲ့သည့် ချင်းအမျိုးသမီး သေဆုံးမှု လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များထံ တင်ပြမည်
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မင်းပြားမြို့နယ်တွင် ရက္ခိုင်စစ်တပ် (AA) ၏ ဖမ်းဆီးမှုခံခဲ့ရပြီး ပြန်လွတ်လာသည့်နောက် သေဆုံး သွားသည့် အမျိုးသမီး၏ ဖြစ်စဉ်ကို လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များထံ စာပို့ အကြောင်းကြားသွားမည်ဟု ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ချင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား/သူများအဖွဲ့ (CUSR) က ပြောသည်။
သေဆုံးသွားသည့် အမျိုးသမီးမှာ အသက် ၄၈ နှစ်အရွယ် ဒေါ်စိန်မဦး ဖြစ်ပြီး မင်းပြားမြို့နယ် သိုင်းကျပ်ကျေးရွာမှ ချင်း အမျိုးသမီးတဦး ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မေ ၃ ရက်က အခြားအမျိုးသား ၃ ဦးနှင့် အတူ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး ဇွန် ၁ ရက်တွင် ပြန် လွှတ်ပေးလိုက်သဖြင့် လွတ်မြောက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ လွတ်လာပြီးနောက် စိတ်ကယောင်ခြောက်ခြား ဖြစ်ခြင်း၊ ကြောက် လန့် ခြင်းများ၊ အသက်ရှုမဝခြင်းများ ဖြစ်နေသဖြင့် မင်းပြားမြို့နယ် ဆေးရုံသို့ မိသားစုဝင်များက ပို့ဆောင်ပြီး ဇွန် ၂ ရက် မနက်ပိုင်း၌ သေဆုံးသွားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ CUSR ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဆလိုင်းထွန်းလှကျော်က “အဓိက ကတော့ အခု ဖြစ်နေတာ သူတယောက်တည်း မဟုတ်ဘူး။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုဖြစ်တဲ့ ကျနော်တို့ ချင်းတွေ လူ့အခွင့် အရေး ချိုးဖောက်ခံရတာ အများကြီးရှိပါတယ်။ ပြန်လွတ်လာတယ်၊ မပြောရဲဘူး။ တချို့လုံးဝကို ပျောက်သွားတယ်။ ဒါကို ကျနော်တို့က ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက ချင်းတွေ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရပါတယ်ဆိုတာကို တင်ပြမယ်လို့ စီစဉ်ထားပါ တယ်” ဟု ပြောသည်။
ချင်းလူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့သည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်က စတင်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ကာ အမေရိကန်နှင့် ကနေဒါတွင် တရားဝင် မှတ်ပုံ တင်ထားပြီး အစိုးရ မဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ချင်းလူမျိုးများ၏ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ များကို စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ မှတ်တမ်းပြုလုပ်ခြင်းများအပြင် ဒေသတွင်း အခြေအနေများကိုလည်း နိုင်ငံတကာ လူ့ အခွင့်အရေး အဖွဲ့များသို့ ပေးပို့ကာ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့ ဖြစ်သည်။
ဆလိုင်း ထွန်းလှကျော်က သေဆုံးသွားသည့် ဒေါ်စိန်မဦးမှာလည်း အဖမ်းမခံရခင်က ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်သူဖြစ်ပြီး ၁ လကြာ ဖမ်းခံရပြီး ပြန်လွတ်လာသည့်အချိန်တွင် စိတ်ကယောင်ခြောက်ခြားဖြစ်ကာ ကြောက်လန့်နေသဖြင့် ဖမ်းခံရစဉ် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံခဲ့ရကြောင်း သံသယရှိပါသည်ဟု ဆိုသည်။
ဒေါ်စိန်မဦးနှင့်အတူ ပြန်လွတ်လာသူများကလည်း AA နှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများကို ဖြေဆိုရန် ငြင်းဆိုပြီး ရှောင်တိမ်းနေကြသည်ဟု ဆလိုင်းထွန်းလှကျော်က ပြော သည်။ ချင်း လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ (CHRO) မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဆလိုင်းလျန်က “ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံက တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု လုံးဝမရှိတော့ ဒီစနစ်ကြီးမှာ ပြောင်းလဲမှုမရှိသရွှေ့တော့ တရားမျှတမှု ရဖို့ကတော့ မလွယ်ပါဘူး။ ပထမဆုံး လိုအပ် တာကတော့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးရှိဖို့ လိုပါတယ်။ သူ့အတွက် ဟိုအတွက် Justice ကို တဦးတယောက်ချင်းစီ အတွက် လုပ်ပေးနိုင်တာ မရှိပါဘူး”ဟု ပြောသည်။ သို့သော် မြေပြင်မှ စုဆောင်းထားသည့် အချက်အလက်များ၊ လူ့အခွင့်အရေး မှတ်တမ်းများက တချိန်ချိန်တွင် တရားမျှတမှု ရနိုင်ရေးအတွက် အသုံးဝင်လာမည်ကို ယုံကြည်ပါသည်ဟု ဆလိုင်းလျန်က ဆိုသည်။
တပ်မတော်ဘက်မှလည်း ပဋိပက္ခကာလအတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် အရပ်သား ၂၀ဝ နှင့် အထက်ကို ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးခြင်း၊ ရိုက်နှက်ခြင်းများ ပြုလုပ်သဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ ကျူးလွန်ကြောင်း ရခိုင်နိုင်ငံရေး အသိုင်း အဝိုင်းတွင် ဝေဖန်ခံနေရသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/06/03/223950.html
KNU-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ထိန်းချုပ်နယ်မြေ ညောင်လေးပင်ခရိုင် (တပ်မဟာ ၃) ဆောထီး(ရွှေကျင်) မြို့နယ် ခလိန်-ချောင်းဝလမ်းဆုံရှိ ဆောက်လုပ်ပြီးခါစ KNU ၏ Covid-19 ကာကွယ်ရေးဂိတ်တစ်ခု ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့က ဖျက်ဆီးခံ လိုက်ရကြောင်း KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်တာဝန်ရှိသူများထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါ ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးရေးဂိတ်ကို Covid -19 ကာလ တောင်ပေါ်ဒေသရှိ လူဝင်ထွက်သွား လာမှုများ စစ်ဆေးနိုင်ရန် ဒေသအတွင်းရှိ ရောဂါ ကာကွယ်ရေးကော်မတီမှ ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းတွင် စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး နောက် ညနေပိုင်းတွင် ထိုသို့ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု KNU ညောင်လေး ပင်ခရိုင် Covid -19 ရောဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးကော်မတီ ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံ ပဒိုစောကလယ်မူထူးက ပြောသည်။ “သူတို့က ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ ညွှန်ကြားချက်မရှိဘူးတဲ့။ ကျနော်တို့ကလည်း ရောဂါအတွက် မဖြစ်မနေ လုပ်ဖို့လိုတယ် ပြောတော့ ပထမတော့ ဈေးဆိုင်ထဲ မှာသွားလုပ်ပါ။ အဲမှာသွားလုပ်ရင် သူတို့ သွားကူနေပေး မယ်ပြောတယ်။ သူများဆိုင်ထဲမှာ ကျနော်တို့က သွားလုပ်လို့အဆင် မပြေဘူးလေ။ ကျနော်တို့ဆောက်မှာက ဂိတ်တစ်လုံးဘဲ မနက် ၁၁နာရီလောက်မှာ ဂိတ်ဆောက်ပြီးတယ်။ ထမင်းပြန်စားတဲ့ အချိန် နေ့လည် ၂ နာရီ လောက်တော့ တပ်မတော်ဘက်က ကျနော်တို့ဂိတ်ကို လာဖျက်လိုက်တယ်” ဟု ကေအိုင်စီသို့ပြော သည်။
အဆိုပါ KNU ဆောက်လက်စ Covid -19 ရောဂါကာကွယ်ရေးဂိတ်ကို အထက်က ညွှန်ကြားချက် မရရှိသည့် အကြောင်းပြ ချက်ဖြင့် ဒေသအတွင်းရှိ တပ်မတော် ခမရ ၂၀ တပ်ရင်းမှ တပ်ရင်းမှူး ၁ ဦး အပါအဝင်အင်အား ၅ဦးမှ သွားရောက်ဖျက် လိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်ဟုလည်း KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်တာဝန်ရှိသူများ၏ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းဂိတ်ကို လက်ရှိနေရာမှ နောက်ဆုတ်ပြီး ဆောက်လုပ်ပေးရန် ဒေသတွင်းအခြေစိုက်သည့် တပ်မတော်ဘက်က ပြောဆိုမှု များရှိခဲ့သလို လတ်တလောဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အဆိုပါကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်ပြီး KNU ဗဟို နှင့် ကော်သူးလေ ကျန်းမာရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးဌာန – KDHW ထံသို့ တင်ပြထားပြီးဖြစ်သည်ဟု လည်း ပဒို စောကလယ်မူထူးက ဖြည့်စွက်ပြောသည်။
KNU တပ်မဟာ ၃ ညောင်လေးပင်ခရိုင်တွင် ဒေသတွင်းဝင်ထွက်သွားလာမှုများကို စစ်ဆေးနိုင်ရန်နှင့် Covid-19 ကာကွယ် ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးရည်ရွယ်ကာ ယခုဖျက်ဆီးခံလိုက်ရသည့်ဂိတ်အပါအဝင် ဂိတ်ပေါင်း ၁၄ ဂိတ်ဖွင့် လှစ်ထားရှိကြောင်းသိရပြီး ယခုဂိတ်မှာ KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်း ပထမဦးဆုံး ဖျက်ဆီးခံရသည် ဂိတ်ဖြစ်သည်ဟု လည်းသိရသည်။http://kicnews.org/2020/06/ knu%e1%80%b1%e1%80%8a%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1
၁၁။ ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာလအတွင်းကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး COVID-19 ရောဂါကြောင့် မဲဆွယ်စည်းရုံး မှုနှင့်
ပတ်သက်၍ စည်းကမ်းချက် အသစ်များ ရှိလာမည်ဟု ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ပြောကြား
၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး COVID-19 ရောဂါကြောင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်အသစ်များ ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်နိုင်က ပြောကြားသည်။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ရုံးတွင် ဇွန် ၄ ရက်က ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲ၌ သတင်းထောက်များ၏မေးမြန်းမှုကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်နိုင်က အထက်ပါကဲ့ သို့ ထည့် သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ရွေးကောက်ပွဲရက်ကတော့ အရင်တုန်းက ပထမတုန်းက နှစ်လနဲ့ ၂၄ ရက်။ နောက်တစ်ခါမှာ လေးလကြိုကြေညာတယ်။ အဲဒီအတိုင်းပဲမပြောင်းလဲပါဘူး။ နဂိုကျင်းပတဲ့အတိုင်း နိုဝင်ဘာလထဲမှာပဲ ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်မှာပါ။ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့ ကျင်းပတော့ လေးလအလိုအကြိုကြေညာတာပေါ့။ နှစ် လ နဲ့ ၂၄ ရက် အလိုကြေညာတာရှိတာပေါ့။ ဘယ်နေ့သင့်တော် သလဲ။ အများအတွက် သင့်တော်မယ့်။ ကောင်းမယ့်ရက်ကိုယူပြီး ကြေညာမှာပေါ့။ ပါတီအများအတွက် စည်းရုံးနိုင်မယ့် အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေမယ့်ရက် ကို ရွေးပြီး ကြေညာမှာပါ။ ဒါဆိုခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်” ဟု ဦးမြင့်နိုင်က ပြောကြားသည်။
COVID-19 ရောဂါကြောင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးနှင့် မဲပေးသည့်လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအတွက် ယခင် ရွေး ကောက် များကဲ့သို့ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်မတူဘဲ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန အပါအဝင် ဌာနအဖွဲ့ရှစ်ဖွဲ့ဖြင့် သီးသန့် ဖွဲ့စည်းသွားရန်ရှိကြောင်းသိရသည်။“မဲဆွယ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ စည်းကမ်းချက်တွေရှိလာနိုင်သလားဆိုတော့ ရှိလာ နိုင်တာပေါ့။ အဲဒါကြောင့် ဘယ်လို ကျင်းပမလဲ။ ဘယ်လိုမဲဆွယ်ခွင့်လုပ်မလဲ။ COVID ကာလလည်း ရှိနေတယ်ဆိုတော့ ဒါကိုအဆင်ပြေချောမောအောင် ရှစ်ဖွဲ့လောက်နဲ့ သပ်သပ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့မယ်။ ဖွဲ့ပြီးတော့မှ ဘယ်လိုအခြေအနေဆိုရင် ဘယ်လို ဘယ်လို စည်းကမ်းချက်တွေ လိုက်နာမလဲ။ အဓိက တော့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ရှိမှာပေါ့။ သူတို့ စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ ချမှတ်ပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးမဲဆန္ဒရှင်တွေ အကုန်အသိပေးမှာပေါ့။ စည်းကမ်းချက် အသစ်တွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်”ဟု ဦးမြင့်နိုင်က ပြောကြားသည်။
COVID-19 ရောဂါကြောင့် ပြည်ပမှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား မဲပေးခွင့်ရှိ မရှိအပေါ် စိစစ် ဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင်နေပြီး မဲစာရင်းတွင် အားလုံးပါဝင်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ဦးမြင့်နိုင်က ပြောကြား သည်။ https://news-eleven.com/article/176906
ကရင်ပြည်နယ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်ရှိ KNU- ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဝင်းရေးမြို့နယ်အတွင်း စိုက်ပျိုးထားသည့် ဘိန်းစာပင်များကို တပတ်အတွင်း ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းမှုမရှိပါက ကော်သူးလေ မူးယစ်ဥပဒေဖြင့် အရေးယူမည်ဟု မေလ ၃၁ ရက် နေ့တွင် ကရင်အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့က စာထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဘိန်းစာပင်စိုက်ပျိုးခြင်းကို KNU အဖွဲ့အနေဖြင့် လုံးဝခွင့်ပြု မည်မဟုတ်ဘဲ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာအတွင်း စိုက်ပျိုးထားမှုရှိခဲ့လျှင်လည်း ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့ နောက် ဆုံးထား၍ ဖျက်ဆီးရမည်ဟု KNFP ၏ ထုတ်ပြန်စာထဲတွင် ဖော်ပြထား သည်။
KNPF ဝင်းရေးမြို့နယ် အမှတ်(၄) စခန်းမှူးစောငြိမ်းချမ်းက “ မူးယစ်ဆေးပြားအစား ဘိန်းစာရွက်တွေကို အစားထိုးသုံးစွဲလာ ကြတယ်။ ဒေသအတွင်းမှာ ဆက်ရှိနေမယ်ဆိုရင် အနာဂတ်လူငယ်တွေ မူးယစ်သားကောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ တိုင်းပြည် အရေးအရာ အမျိုးသားအရေးအရာတွေမှာ လုပ်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူထုတွေလည်း ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ကြဖို့ တိုက် တွန်းချင်တယ်” ဟု ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့က ကေအိုင်စီ သို့ပြောသည်။
မေလ ၂ဝ ရက်နှင့် ၂၄ ရက်နေ့တွင် ဝင်းရေးမြို့နယ်အတွင်း ဘိန်းစာပင် ၆,၅ဝဝ ကျော်ကို KNU နှင့် အစိုးရတို့ ပူးပေါင်းကာ မီးရှို့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြပြီး စိုက်ပျိုးသူများကိုလည်း ကော်သူးလေ မူးယစ်အထူးအက်ဥပဒေအရ အရေးယူမည်ဖြစ်သလို ကျန်ရှိ မည့် အပင်များကိုလည်း ဖျက်ဆီးမှုမပြုလုပ်လျှင် ဒေသတည်ငြိမ်ရေးနှင့်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအက်ဥပဒေအရ အရေးယူမည်ဟု လည်း ကရင်အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများထံမှသိရသည်။ “ဈေးကောင်းရတယ်ဆိုပြီးသူများစိုက်ကြတော့ ရွာမှာလိုက် စိုက်ကြတယ်။ ဆိုးကျိုးတွေ ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေ ဥပဒေတွေ သူတို့ နားမလည်ကြဘူး။ ကိုကာကိုလာအချိုရည်၊ ချောင်းဆိုး ပျောက်ဆေးတွေနဲ့ ရောသောက်တယ်။ ကြာရင်စွဲတာပါပဲ။ ဘိန်းစာပင် မရှိရင်ကောင်းတယ်။ လူငယ်တွေ အနာဂတ် မထိ ခိုက်ဘူးပေါ့နော်”ဟု ဝင်းရေးမြို့နယ် ဒေသခံ စောထွန့်ဖောင်က ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် ဘိန်းစာပင်စိုက်ပျိုးမှုအများဆုံးရှိပြီး စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေ သော မူးယစ်ဆေးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ နိုင်ငံတော်အစိုးရက ဥပဒေအရ တားမြစ်ထားလျက်ရှိသည်။ KNU အနေဖြင့် လည်း ၁/၂ဝ၁၄ ကော်သူးလေ မူးယစ်ဆေးဝါးများ အထူးအက်ဥပဒေအရ တားမြစ်ထားသည်ဟု ကရင်အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့ တာဝန်ရှိ သူများထံမှ သိရသည်။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%94%e1% 80%b9%e1%80%b8%e1%8
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ မြေပုံမြို့နယ်က ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှစ်ယောက်ကို ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA နဲ့ ပတ်သက်မှု ရှိတယ်ဆိုပြီး အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ နဲ့ အာဏာပိုင်တွေက တရားစွဲဆို ဆိုထားပါတယ်။ မြေပုံမြို့နယ် အငူသစ် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမောင်ဇော်၊ ရွာသစ်ကေကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်မြင့်တို့ကို တပ်မတော်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့က မေလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ အစည်းအဝေးရှိတယ်လို့ ခေါ်ယူသွားရာကနေ ပြန်မလွှတ်ပေးဘဲ အခုလို တရားစွဲခံရတာဖြစ်တယ်လို့ မိသားစုဝင်တွေက ပြောပါတယ်။ ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှစ်ယောက်ကို AA အဖွဲ့နဲ့ ဆက်သွယ်တယ်ဆိုတဲ့ သံသယနဲ့ အကြမ်းဖက် မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (ခ) စတဲ့ပုဒ်မတွေနဲ့ အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ မြေပုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် ဦးဖေသန်းက RFA ကို ပြောပါတယ်။
သူတို့ကို မြေပုံမြို့မရဲစခန်းမှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီး မနေ့တုန်းကတော့ ရဲက ဆက်ပြီးဖမ်းထားဖို့အတွက် တရားရုံးခွင့်ပြု ချက် ယူခဲ့ကြောင်း၊ နေအိမ်တွေကိုလည်း ရဲနဲ့ စစ်သားတွေက ဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ကြောင်း မိသားစုဝင်တွေက ပြောပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဖမ်းတယ်ဆိုတာ မသိရသေးဘူးလို့ ရွာသစ်ကေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်မြင့်ဇနီး ဒေါ်လှသိန်းကြည်က ပြောပါ တယ်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှစ်ဦး ဖမ်းဆီးထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြေပုံမြို့မရဲစခန်းမှူး ဒုရဲမှူး အောင်သန်းဇော်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါ စခန်းမှူး အပြင်သွားတယ်ဆိုပြီး ဆက်သွယ်လို့ မရခဲ့ပါဘူး။ မြေပုံမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဇာနည်ကျော် ကိုလည်း RFA က ဖုန်းနဲ့ အကြိမ်ကြိမ် ဆက်သွယ်မေးမြန်းပေမယ့် လက်ခံဖြေကြားမှု မရှိခဲ့ပါဘူး။ မြေပုံမြို့ နယ်မှာ အရင်က တပ်မတော်က တပ်စွဲတာမရှိပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်လလောက်က စလို့ မြေပုံမြို့မရဲစခန်းမှာ တပ်မတော်က စခန်းချပြီး ရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေ လုပ်နေတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ လက်ရှိ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီး တရားစွဲဆိုတာကြောင့် အခြားအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေဟာလည်း စိုးရိမ်ပြီး နုတ်ထွက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေသူ တချို့လည်း ရှိပါတယ်။ အမည်မဖော်လိုတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တစ်ဦးကတော့ ခုရက်ပိုင်းအတွင်း နုတ်ထွက်စာတင်သွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေဆိုတာ နှစ်ဘက်ကြားမှာ ကြားညပ်တတ်တာကြောင့် အစိုးရနဲ့တပ်မတော်အနေနဲ့ နားလည်ပေးသင့်တယ် လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖေသန်းက ပြောပါတယ်။ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်း ကတော့ လက်ရှိတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှစ်ဦးကို စစ်ဆေးချက်တွေအရ AA နဲ့ ပတ်သက်မှု ရှိတယ်ဆိုတာကို တွေ့ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အကြမ်းဖက်ဥပဒေပုဒ်မနဲ့ တရားစွဲဆိုတာကတော့ စစ်ဆေးတွေ့ ရှိချက်အပေါ်မှာ အစိုးရ ရှေ့နေတွေက ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်လို့ RFA ကို ပြောဆိုပါတယ်။
AA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ခိုင်သုခကတော့ ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှစ်ဦးဟာ AA နဲ့ လုံးဝ ပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ RFA ကို ပြောပါ တယ်။ သူတို့ဟာ သာမန်ဒေသခံပြည်သူတွေသာဖြစ်ပြီး၊ အရင်က မြန်မာစစ်တပ်ကနေ တောက်လျှောက် အသုံးပြုလာတဲ့ ဒီရွာလူကြီးတွေကို အခုလို အကြမ်းဖက်ဥပဒေပုဒ်မတွေနဲ့ တရားစွဲတာဟာ မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စလို့လည်း ခိုင်သုခက ပြောပါ တယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တပ်မတော်နဲ့ AA တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေဟာ ဖမ်းဆီးခံရတာတွေ ရှိတာကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်း ကျောက်တော်၊ ရသေ့တောင်၊ မြောက်ဦးနဲ့ မင်းပြားမြို့နယ်တွေမှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တာဝန် တွေကနေ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုဖို့ စာတင်တာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/myaypon-two-villa ge-administrators-being-sued-06032020085107.html
ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့ အမှတ် ၄ ရပ်ကွက် မြေနီကုန်းရပ် အနောက်ဘက် မြဝတီသစ်တောကြိုးဝိုင်း ကြိုးပြင် ကာကွယ် တော အတွင်းရှိမြေကို ခြံကွက်များရိုက်၍ ရောင်းချ ရောင်းချနေသူများအား စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီး ဥပဒေကြောင်းအရ အရေး ယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြဝတီမြို့နယ်သစ်တောဦးစီးဌာနမှဦးစီးအရာရှိ ဦးကျော်မျိုးသူက ပြောသည်။
မြဝတီသစ်တောကြိုးဝိုင်း ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအတွင်းရှိ မြေဧက ၅၀ ခန့်အား ခြံကွက်များ ရိုက်၍ ရောင်းချမှုများရှိ ကြောင်း သတင်းအရ ဇွန်လ ၁ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီအချိန်က မြဝတီမြို့နယ် သစ်တောဦး စီးဌာနမှ တာဝန် ရှိသူများ၊ အမှတ် ၄ ရပ်ကွက်ရှိ ဆယ်အိမ်မှူး ရာအိမ်မှူးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများက ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုများပြု လုပ်ခဲ့စဉ် မြို့နယ် သစ်တော ဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးကျော်မျိုးသူက ယခုလို ပြောသည်။ “သစ်တောပိုင်မြေထဲမှာ ခြံကွက်တွေရိုက်ပြီး ရောင်းချနေ ကြောင်းသိရလို့ ကျနော်တို့ မြို့နယ် သစ်တောဦး စီးဌာနအနေဖြင့် လာရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာမှာ အမှန်တကယ်ပဲ ခြံကွက်တွေရိုက်ထားတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒီခြံကွက်တွေကို ဘယ်သူတွေက ရိုက်ပြီး တရားမဝင်အရောင်းအဝယ် လုပ်နေ သလဲဆိုတာ စုံစမ်းဖော်ထုတ် ရပါ မယ်။ ယခုလို သစ်တောပိုင်မြေပေါ်မှာ ကျူးကျော်ပြီး ခြံကွက်ရိုက်တဲ့သူတွေကို သိရရင် တော့ ၂ဝ၁၈ သစ် တော ဥပဒေပုဒ်မ ၄ဝ နဲ့ မြဝတီမြို့မရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်အရေးယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦးကျော်မျိုးသူက ပြောသည်။
မြဝတီမြို့နေ ပြည်သူတစ်ဦးက “မြဝတီမြို့မှာက ယခုလို သစ်တောမြေ (သို့မဟုတ်)အစိုးရ စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရ မြေပေါ်မှာ တရား ဝင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မဟုတ်ဘဲ တရားမဝင် ခြံကွက်ရိုက်ကာ မြေအရောင်းအဝယ်များ ပြုလုပ်လျက်ရှိနေပါတယ်။ ဒါတွေ ကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများအနေဖြင့် အချိန်မှီတားဆီးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တရားမ ဝင်ခြံကွက်ရိုက်ပြီး တရားဝင်သဖွယ် လိမ်လည် ရောင်းချနေသူများ၏ စကားကိုယုံ၍ ရှိစုမဲ့စုချွေးနည်းစာများဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့သူတွေလည်း များစွာရှိနေပြီး နောက်ပိုင်း လူနေအိမ် တွေဖြစ်လာမှ ထိုးဖြိုဖယ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်နေခြင်းဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ အိုးအိမ်စည်စိမ်တွေကို များစွာထိခိုက်စေသလို အစိုးရဲ့ ပုံရိပ်လည်း ကျဆင်းစေတယ်”ဟု ပြောသည်။
၎င်းအပြင် မြဝတီမြို့ တိုးချဲ့ ရပ်ကွက်၆/၇ မြေနေရာ၌ ယခင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလများက တရားမဝင် မြေကွက်ရိုက် ရောင်းချသူများထံမှ ပြည်သူများဝယ်ယူ၍ အိမ်ဆောက်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ယခုအခါ ထိုနေရာအား အစိုးရစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရ မြေဟုသတ်မှတ်ပြီးနောက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှစ၍ ယနေ့ ၂၀၂၀ခုနှစ် ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့ထိ တိုင် အောင်နေအိမ်များအား ဖယ်ရှား ရှင်းလင်းမှုများပြုလုပ်နေပြီး မြေကွက်ဝယ်ယူထားသော ပြည်သူများအနေဖြင့် ဆုံးရှုံးမှုများစွာကြုံနေရကြောင်း ပြောဆိုကြ သည်။ http://kicnews.org/2020/06/% e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%9d%e1%80%90%e1%80%ae
၁၅။ နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်အတွက် COVID-19 ကို လက်နက်အဖြစ်အသုံးချဟု ရှေ့ပြေးအသံအဖွဲ့ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်
မြန်မာစစ်တပ်သည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(NLD) ပါတီဦးဆောင်သည့် အစိုးရ၏ ထောက်ခံအားပေးမှု ဖြင့် နိုင်ငံရေး အကျိုးအမြတ်အတွက် လက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေသည့် COVID-19 ကပ်ရောဂါကို လက်နက်သဖွယ် အသုံးချနေ ကြောင်း အရှေ့ပြေးအသံ(Progressive Voice) အဖွဲ့က ယနေ့ ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့တွင် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ပြော ဆိုလိုက်သည်။ “နောက်ကျကျန်ခဲ့သော တိုင်းပြည်- မြန်မာနိုင်ငံမှ COVID-19 ကို လက်နက်အဖြစ်အသုံးချခြင်း ” အမည်ဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့် ၎င်းအစီရင်ခံစာတွင် မြန်မာစစ်တပ်နှင့် အစိုးရတို့သည် တိုင်းရင်းသားလူထုအသိုင်းအဝိုင်းများ၊ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်သူများနှင့် သတင်းမီဒီယာသမား များအပေါ် ဖိနှိပ်မှုများ တိုးမြှင့်လုပ် ဆောင်ရန်နှင့် နိုင်ငံရေး အကျိုးအမြတ် အတွက် ကပ်ရောဂါကို လက်နက်သဖွယ် အသုံးပြုနေကြောင်း ဖော်ပြ ထားသည်။
ရှေ့ပြေး အသံအဖွဲ့၏ အကြံပေး ဘုတ်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ခင်ဥမ္မာက “အစိုးရရဲ့ “မည်သူမျှ ဖယ်ချန်မထားရေး” ဆိုတဲ့ မူကို မြန်မာ စစ်တပ်က ပျက်ရယ်ပြုလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ သူတို့က တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ ရာနဲ့ချီပြီး နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်တာကို ခံနေရတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်က လူထုတွေအပေး ဆက်လက်ကျူးလွန်းနေတဲ့ စစ်ရာ ဇဝတ်မှုနဲ့ လူသားမျိုးနွယ်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေကို ဖုံးကွယ်ဖို့အတွက် COVID-19 ကို အကာအကွယ်အနေနဲ့ သုံးနေတယ်”ဟု အစီရင်ခံစာ၏ သတင်းထုတ် ပြန်ချက်၌ ပြောဆိုထားသည်။ အဆိုပါ အစီရင်ခံစာသည် သတင်းမီဒီယာများ၏ သတင်းတင်ပြမှုများ၊ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့မှ မေလ ၁၀ ရက်အထိ အစိုးရ၊ အရပ်ဖက်နှင့်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ (EAOs) စသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ထုတ်ပြန်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ပြန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ပြီး ကပ်ရောဂါ ကာလတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြသည့် အစီရင်ခံစားဖြစ်သည်ဟု အဆိုပါ အဖွဲ့က ဆိုသည်။
ထိုအစီရင်ခံစာ၌ ကပ်ရောဂါ ကာလအတွင်း ရခိုင်နှင့်ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် မြန်မာစစ်တပ်၏ ထိုးစစ်ဆင်မှုများ ပိုမိုလုပ်ဆောင် လာခြင်းနှင့်အတူ အစိုးရ၏ အင်တာနက် ဖြတ်တောက်မှုကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ အကြမ်းဖက် လုပ်ဆောင်မှုများကို တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်နေခြင်းကြောင့် ဒေသခံအရပ်သားပြည်သူများမှာ ၎င်းအကြမ်းဖက်မှုကို အဓိက ခံစားနေရကြောင်း ဖော်ပြထား သည်။ ထို့အပြင် COVID-19 ကပ်ရောဂါအပေါ် အစိုးရ နှင့် EAOs အဖွဲ့များ၏ တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် သုံးသပ်ထား သလို မြန်မာစစ်တပ်မှ အပစ်ရပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး-KNU၊ သျှမ်းပြည် ပြန်လည် ထူထောင်ရေးကော်စီ -RCSS တို့လို အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကပ်ရောဂါ တုန့်ပြန်တားဆီးဆောင်ရွက်မှုအပေါ် မြန်မာ စစ်တပ်၏ နှောင့်ယှက်ဟန့်တားမှုများကိုပါ ဖော်ပြထားပြီး တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများအား ကပ်ရောဂါ ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားမည့်အပေါ် မြန်မာစစ်တပ်အနေဖြင့် ဂရုမစိုက်ကြောင်းပြသနေ သည်ဟု ဆန်းစစ်ဝေဖန်ထားသည်။
“NLD အစိုးရက ဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားမှု ကာကွယ်ရေးအတွက် EAO တွေနဲ့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ဖို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ တစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပေမဲ့ လက်တွေ့မှာ တိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုတွေက ဖယ်ကျဉ်ခံထားရပြီး တမင်သက်သက် ဖျက်ဆီးတာကို ခံနေရတယ်။ ဒေသခံ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု ပေးသူတွေအပေါ် ဘာကန့်သတ်ချက်မှ မထားဖို့နဲ့ သူတို့ဆီကို လူသားချင်း စာနာထောက်ထားတဲ့ အကူအညီတွေ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိဖို့က အရမ်းအရေးကြီးတယ်”ဟု ခင်ဥမ္မာက အစီရင်ခံစာ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၌ ပြောဆိုထားသည်။
ရှေ့ပြေး အသံ (Progressive Voice) သည် မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး နှင့် ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် စည်းရုံး လှုံ့ဆော်ရေး လုပ်ဆောင် နေသည့် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသတွင်းမှ အဖွဲ့များဖြင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ကွန်ရက်အဖြစ် ချိတ်ဆက် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် မြန်မာ့အရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့ (Burma Partnership) မှ အခြေခံ ပေါက်ဖွားလာသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ http:/ /kicnews.org/2020/06/% e1%82%8f%e1%80%af%e1%80%ad%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80
ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး နာဂ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဒုံဟီးမြို့နယ်အတွင်းရှိ တောင်ယာများတွင် စိုက်ပျိုးထားသော ပြောင်းခင်းများ ပိုးကျမှုကြောင့် ပျက်စီးမှုရှိနေပြီး ဒေသခံများအနေနှင့် လာမည့်နှစ် စားနပ်ရိက္ခာအတွက် အခက်အခဲများ ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိမ်းမောင်၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။“ပြောင်းက အထူးသဖြင့် ဒုံဟီးမြို့နယ်အတွင်းမှာ တောင်ယာအနေနဲ့ စိုက်ပျိုးကြတာ များပါတယ်။ သူတို့က တောင်ယာကို အလေ့ကျ စိုက်ပျိုးတဲ့စနစ်နဲ့ စိုက်တယ်။ သူတို့ရဲ့ အဓိက အစားအစာကလည်း ပြောင်းပဲ။ ပြောင်းက အခြေခံအစားအစာ ဖြစ်တယ်။ ပြောင်း၊ ဖွဲမီး၊ လူး၊ ဆပ်၊ ပီလောပီနံတို့ကို စိုက်ပြီး အသက်မွေးကြတယ်။ ပြောင်းတွေမှာ ပိုးကျတော့ တောင်ယာတွေမှာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကွင်းဆင်းကြည့်တယ်။ ကွင်းဆင်းကြည့်တော့ အရွက်နုထွက်တော့ ရွက်နုက ကန်တော့ပုံရှိတယ်။ အဲဒီ ထဲက ဝင်ပြီးတော့အညွန့်တွေပါ စားတယ်။ ပိုးတွေကတော့ စိမ်းနုရောင်လေးတွေ။ ပြောင်းပင်ရဲ့ အဆစ်ရောက်ရင် ဆက်စား လို့ မရတော့ဘူး။ ဆက်မစားတော့ပေမယ့် ပြောင်းပင်က သေသွားပြီ။ အခု အနေအထားက ပြောင်းပင်တစ်ပင်နဲ့ တစ်ပင်ကူး စက်မှုက တကယ်မြန်တယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်နေတော့ စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်နဲ့ မေးကြည့်တော့ ဒီပိုးက မျိုးဆက်သစ်ပိုးတွေ ဖြစ် တယ်။ မျိုးဟောင်းမဟုတ်ဘူး။ ဒီဟာကို ဘယ်လိုသတ်လို့ရသလဲ နည်းလမ်းတွေ ရှာကြည့်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း တစ်ပတ်ဆို တစ်ပတ်အတွင်းမှာ မကယ်နိုင်တော့ ကြာလာရင် ပြောင်းပင်တွေက ထွားမလာဘဲ သေသွားတယ်။ ဒီလိုပိုးကျ တာက ဒုံဟီးနယ်တစ်နယ်လုံးက ပြောင်းစိုက်တာဆိုတော့ ဒုံဟီးမြို့နယ်အတွင်းမှာ အကုန်ဖြစ်တယ်။ နန်းယွန်းဘက်က ပြောင်းက သိပ်မစိုက်ဘူး။ ပိုးလည်းမကျဘူး။ အခြေခံအစားအစာ မဟုတ်ဘူး။ အဓိက ဒုံဟီးနယ်မှာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီဘက်က တောင်ယာအကုန်က ပြောင်းတွေပဲများတယ်” ဟု ဦးစိမ်းမောင်က ပြောကြားသည်။
နာဂ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဒုံဟီးမြို့တွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း မိုးရာသီ အစေ့ထုတ်ပြောင်းစိုက်ဧက ၆၈၄ ဧက စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီး ငမြှောင်တောင်ပိုး ကျရောက်သဖြင့် စိုက်ဧက ၂၀ဝ ကျော် ထိခိုက်ခဲ့သည်ဟု နန်းယွန်းမြို့ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ၏ မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။ ပိုးကျရောက်ခဲ့သည့် ပြောင်းခင်းများသို့ စိုက်ပျိုးရေးဌာနမှ ပိုးသတ်ဆေးများကို ဆေးဖျန်းပုံး များဖြင့် နှိမ်နင်းပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ပြောင်းက သူတို့ နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ ဘယ်လောက်ရသလဲ။ ဒီနှစ် ဘယ်လောက်ထွက်သလဲ ဆိုတာကိုရမှ ရာခိုင်နှုန်းကို တွက် ချက်လို့ရမှာ။ ဒီအချိန်မှာ စားနပ်ရိက္ခာ ဘယ်လောက် လိုအပ်တယ်မလိုအပ်ဘူးတော့ ပြောမရသေးဘူး။ ပြောင်းကတော့ သူတို့ အခြေခံ အစားအစာဆိုတော့ အခုလို အခြေအနေမျိုးဆိုရင် သူတို့ရဲ့ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်။ အစားအစာပြတ်လပ်မှု ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက် သေချာပါတယ်။ လာမယ့်နှစ်မှာ စားနပ်ရိက္ခာထူထောင်ရေးမှာ လျော့သွားမယ်။ ပျက်စီးသွားတဲ့ဟာကို စိုက်ပျိုးရေးဌာနက ထောက်ပံ့မှုပေးမယ်ဆိုရင်လည်း အလုပ်မဖြစ်ဘူးဗျ။ အခုဟာက ပိုးကျတာကို ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းလို့ ရသလောက် ဖျန်းမယ်။ ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ ဘယ်လောက်ပျက်သလဲ သုံးသပ်မယ်။ ချင့်ချိန်ပြီး အချိုးကျ တွက်ချက်ပြီး ဘယ်နှလစာလောက်တော့ စားနပ်ရိက္ခာ ပြတ်နိုင်တယ်ဆိုတာ တွက်ချက်ပြီး အစိုးရကို တင်ပြမယ်” ဟု ဦးစိမ်းမောင်က ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ https://news-eleven.com/article/176669
ကယားပြည်နယ်အတွင်း စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ပြောင်းစိုက်ခင်းတွေမှာ ငမြှောင်တောင်ပိုးကျရောက်နေပြီး ဖျက်ဆီးထားမှုကိုလည်း ပြောင်းစိုက်တောင်သူတွေ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဒီမော့ဆိုမြို့နယ် သေးဆူလဲကျေးရွာအုပ်စုမှာလည်း ပြောင်းစိုက်ခင်းတွေမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကစပြီး ငမြှောင်တောင်ပိုး အများအပြားကျရောက်ခဲ့ပြီး အထွက်နှုန်းကျဆင်း မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသလို ဒီနှစ်မှာလည်း စိုက်ခင်းမှာ ပိုးကျရောက်မှုကို ဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ပြောင်းစိုက်ဧက ၅၀ဝ ကျော်မှာ ပိုးကျနေတာကြောင့် ပိုး သတ်ဆေးကို ဖြန်းနေရသလို ပိုးသတ်ဆေးလည်း ဈေးများတာကြောင့် မတတ်နိုင်ဘူးလို့ သေးဆူလဲကျေးရွာမှ တောင်သူ ဖြစ်တဲ့ ညားရယ်ကပြောပါတယ်။“တချို့ခင်းတွေတောင်မှ ဆေးမနိုင်တော့ဘူး။ ဆေးနိုင်တဲ့တောင်သူတွေကျတော့ ဆေးနိုင် တယ် သုံးလေးခေါက်ဖြန်းရတာပေါ့နော။ အဲဒါကုန်ကျစရိတ်များသွားတယ်။ မတတ်နိုင်တဲ့သူတွေကျတော့ အရှုံးခံတဲ့သဘော ပေါ့ အထွက်ကတော့ တစ်ဝက်လောက်ကျတယ်”လို့ သူက ပြောပါတယ်။ ပိုးကျနေတဲ့အပြင် မိုးခေါင်တာကြောင့် သီးနှံကို နှစ်ခါပြန်စိုက်နေရတယ်လို့ ၎င်းက ဆက်ပြောပါတယ်။
ပိုးမကျမှီနှစ်တွေက ပြောင်းတစ်ဧကမှာ ၂၅ ပိဿာဆန့်တဲ့ အိတ် ၈၀ နဲ့ ၁၂၀ ကြားရရှိပြီး ပိုးကျတဲ့အခါမှာတော့ အိတ် ၈၀ အောက်သာ ထွက်ရှိတော့တာကြောင့် ပြောင်းစိုက်တောင်သူတွေ အရှုံးပေါ်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တောင်သူတွေကို ပိုးကျရောက်မှုသက်သာအောင် အသိပညာပေးမှုတွေဆောင်ရွက်နေပြီး လက်ရှိမှာလည်း COVID-19 ကြောင့် လူစုလူဝေး မလုပ်ရတာကြောင့် အသိပညာပေးမှုကို မလုပ်ရသေးဘူးလို့ ဒီမော့ဆိုမြို့နယ် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက်ဦးစီးမှူး ဒေါ်ရို့စ်ထူးဒေးမြာက ဆိုပါတယ်။“ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာကတော့ တောင်သူပညာပေးတို့ ဘာတို့ရှိတာပေါ့နော။ ဒါပေမယ့် အခု COVID ကြောင့်ပေါ့နော အခု လူစုလူဝေးမလုပ်ရဘူးဆိုတော့ အခုတောင်သူပညာပေးတော့ မလုပ်ဖြစ်သေး ဘူးပေါ့။ လုပ်ဖို့ကတော့ အစီအစဉ်ရှိပြီနော ရှိထားပြီးသား ဒါပေမယ့် လူစုလူဝေးမလုပ်ရဘူးဆိုတော့လေ”လို့ ၎င်းက ပြောပါတယ်။ ပိုးသတ်ဆေးကလည်း ဈေးများတာကြောင့် ငွေကြေးမတတ်နိုင်တဲ့တောင်သူတွေအနေနဲ့ ပိုးကျမှုသက်သာ အောင် သဘာဝနည်းလမ်း ပိုးသတ်ဆေးကို အသိပညာပေးနေတယ်လို့ ဒေါ်ရိုစ့်ထူးဒေးမြာက ပြောပါတယ်။“အရင်နှစ်က သေးဆူ လဲအုပ်စု ကုန်းသာကျေးရွာမှာလုပ်တာပေါ့နော သူတို့ကို ဘယ်လိုနည်းစနစ်ပေးလဲဆိုရင် ဂျင်းရယ် ကြက်သွန်ရယ် ငရုပ်သီးရယ် အဲဒါကိုဖျော်စပ်ပြီးတော့မှ ရေနဲ့လေးဆတစ်ဆ အဲလိုဖျော်ပြီးမှ ဖြန်းခိုင်းတယ် သူ့ကိုထိထိမိမိဖြန်းခိုင်းတယ်။ ပိုးကို အမြတ်ပြတ်အောင်တော့မဟုတ်ဘူး သူတို့ကိုခြေကျိုးလက်ကျိုးဖြစ်သွားအောင် အဲလိုပဲလုပ်ရတာပေါ့။”လို့ ဒေါ်ရိုစ့်ထူး ဒေးမြာ က ဆက်ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကတည်းက ဖယ်ခုံမြို့နယ်အတွင်းက ပြောင်းစိုက်ခင်းတွေမှာ ငမြှောင်တောင်ပိုးကျရောက်ခဲ့ပြီး စိုက်ခင်း အများအပြားကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ရသလို လက်ရှိ ကယားပြည်နယ်မှာလည်း ငမြှောင်တောင်ပိုးကျရောက် ဖျက်ဆီးမှုကို ခံနေရ တယ်လို့ တောင်သူတွေက ပြောကြပါတယ်။ ငမြှောင်တောင်ပိုးကျတာက တစ်ပြည်နယ်လုံးဖြစ်နေပြီး ပြောင်းနဲ့ အခြားသီးနှံ တွေဖြစ်တဲ့ စပါး၊ မြေပဲ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အပါအဝင် သီးနှံအမျိုးပေါင်း (၈၀)ကျော်ကို စားသောက်ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့အပြင် တစ် ညအတွင်းကီလိုမီတာ(၁၀ဝ)အထိ ပျံသန်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဖျက်ပိုးဖြစ်ပါတယ်။ https://www.bnionline.net/mm/news73200
သျှမ်းပြည် အရှေ့ပိုင်း ကျိုင်းတုံမြို့နယ် တုံတာမြို့ အနီးရှိ ချောက်ထဲသို့ မဟာဓာတ်အားလိုင်းသွယ်တန်းသည့် အလုပ်သမား ၃၀ ဦး စီးလာသည့် ဒိုင်းနာကားသည် ချောက်ထဲသို့ကျကာ ၂ ဦးသေဆုံသွားကြောင်း ရှိသည်။ မနက် ၁၁ နာရီခွဲတွင် မဟာ ဓာတ် အားလိုင်း သွယ်တန်းသည့် လုပ်သား ၃၀ စီးလာသည့် ဒိုင်နာကားသည် တုံတာမြို့အဝင် ပေ ၅၀ ရှိသည့် ချောက်ထဲ သို့ ကျကာ ၂ ဦးသေဆုံးပြီး၊ လက်ရှိ ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်သည့် သူ ၈ ဦးကို ကျိုင်းတုံ ဆေးရုံသို့ ပို့ ဆောင်ထားကြောင်း လူမှုကူ ညီရေးအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူ တဦးက ပြောသည်။
“ ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်တဲ့ သူ ၁၀ ဦးကိုတော့ ကျိုင်းတုံ ဆေးရုံပို့လိုက်တယ်။ အဲ့ထဲမှာ ၂ ဦးဆုံးသွားတယ်။ ကျန်တဲ့ သူတွေ ကတော့ အနည်းငယ်ပဲထိတယ်။ မိုင်းပျဉ်း ဆေးရုံမှာ တက်နေတယ်”ဟု ၎င်း ကပြောသည်။ အဆိုပါ ကား ချောက်ထဲကျရ ခြင်းသည် ကားဘရိတ်ပေါက်မှုကြောင့် ဖြစ်သွားသည်ဟုလည်း စုံစမ်းသိရသည်။ ထိုကား ချောက်ထဲသို့ ကျသွားသူများကို တုံတာ လူမှုကူညီရေး အသင်း နှင့် တပ်မတော်တို့က သွားရောက် ကယ်ထုတ်ခဲ့ကြောင်းသိ ရသည်။
လွန်ခဲ့သည့် မေ ၁၂ ရက် တွင်လည်း မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်အတွင်း ခရီးသည်ယာဉ် အသေးတစီးသည် ချောက်ထဲကျကာ ခရီး သည် ၅ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ https://burmese.shannews.org/archives/16951
ရခိုင်ပြည်နယ် သံတွဲခရိုင် တောင်ကုတ်မြို့နယ် ပန်းတင် (ငမောက်ချောင်း) တိုက်နယ်ဆေးရုံတွင် လတ်တလော၌ တာဝန် ကျ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း တစ်ယောက်မှမရှိနေဘဲ ပိတ်ထားရသည့်အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောကြားသည်။ ထိုသို့ ပိတ်ထားရခြင်းအကြောင်းအရင်းမှာ တာဝန်ခံဆရာဝန်မှာ အထူးကုတက်ရောက်ရန် ထွက်ခွာသွားခဲ့ရပြီး ကျန်ရှိသည့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများဖြင့် ဒေသနေပြည်သူများအား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆောင် ရွက်နေစဉ် သားဖွားဆရာမနှစ်ဦးမှာလည်း ကျောက်ဖြူမြို့နယ်သို့ ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ကြောင်းနှင့် (၃၀. ၅. ၂၀၂၀) ရက်တွင် ကျန်ရှိသည့် အထက်တန်းသူနာပြုနှစ်ဦးစလုံးကို မြို့နယ်ဆရာဝန်က လိုအပ်ချက်အရဟုဆိုကာ ခေါ်ယူသွားခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု အဆိုပါ တိုက်နယ်ဆေးရုံ၏ ဒေသခံ ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌထံမှ သိရသည်။
ဒေသခံ ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြု ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးချစ်ကျော်က “ကျွန်တော်က ဆေးရုံရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်း ထဲထဲဝင်ဝင် ကူညီဖြည့်စွက်ထားတဲ့အတွက် ဝန်ထမ်းကိစ္စတွေကလွဲရင် တခြားကိစ္စတချို့ကို သိနေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘက်က ဆေးရုံမှာ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေ ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလည်းအများကြီး လုပ်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုက ဝန်ထမ်း တွေကို တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ပြောင်းတာတွေလုပ်တော့ ပိတ်ထားရတဲ့အဆင့် ရှိပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း တစ် ယောက်မှမရှိတဲ့အတွက် တိုက်နယ်ဆေးရုံကို ပိတ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် သက်ဆိုင်သူတွေကို ပြောချင်တာကတော့ ပြန် လည်ဖွင့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုချင်တယ်။ ဒေသခံတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ကျွန်တော်တို့ စိုးရိမ်မိပါတယ်။ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် မြို့ပေါ်ကိုသွားဖို့က ရေမိုင် ၁၃ မိုင်ကျောက်လောက်ကို စက်လှေနဲ့သွားရတဲ့ ခရီးမို့လိုပါ။ ပြန်လည်ဖွင့်ပေးစေချင်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ ပြည်နယ်မှူး ဒေါက်တာစိုင်းဝင်းဇော်လှိုင်က “ဆေးရုံမှာ လူမရှိတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ လူနည်းနေတာ၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဝန်ထမ်းနည်းနေတာ။ အခုက တောင်ကုတ်မှာ COVID Positive တစ်ယောက်တွေ့ထားလို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနက တရားဝင်ခွင့်ပြုထားလို့ လိုအပ်တဲ့လူအင်အား ကို ကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီး အလှည့်ကျသုံးနေတာ။ ဆေးရုံပိတ်ထားတာ မဟုတ်ဘူး။ သူနာပြုရော ဆရာဝန်ရော လိုအပ်တဲ့ အင်အားထက် နည်းနေတယ်။ ဆေးရုံပိတ်ထားတာ မဟုတ်ဘူး၊ ခြံတံခါးပိတ်ထားတာက လူနာမရှိလို့ ပိတ်ထားတာ။ အဲဒီ ဆေးရုံမှာက ဆရာဝန်မရှိတာ ကြာနေပြီ၊ ပြန်ဖြည့်လို့ မရသေးဘူး။ ရခိုင်တစ်ပြည်နယ်လုံးမှာ ဆရာဝန်တွေ အများကြီးက လစ်လပ်နေတာ” ဟု ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ တိုက်နယ်ဆေးရုံအား ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ (၂၈. ၃. ၂၀၁၅) ရက်စွဲပါ စာအမှတ် ကမဘ/ဃ ၁၃၇၂/၄၆ ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး (၂၃. ၃. ၂၀၁၆) ရက်တွင် အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးကာ (၂၅. ၅. ၂၀၁၉) ရက်တွင် တာဝန်ခံ ဆရာဝန်တစ်ဦး၊ အထက်တန်း သူနာပြုနှစ်ဦး၊ သားဖွားဆရာမနှစ်ဦးနှင့် အထွေထွေလုပ်သား လေးဦး၊ စုစုပေါင်းကိုးဦး ခန့်ထားပေးပြီး ဆေးရုံလုပ်ငန်းနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု စတင်လည်ပတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ https://ne ws-eleven.com/article/176672
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ခိုလမ်မြို့နယ်အတွင်း ကျွန်းသစ် တင်ဆောင်သည့် မော်တော်ယာဉ် (၁၃) စီး ဖမ်းဆီးမိရာ၊ တရားခံ တဦးသာ ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။
လွိုင်လင်မြို့နယ် ခိုလမ်မြို့နယ်အတွင်း ခိုလမ်- ကွန်ဟိန်း ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်တွင် ဇွန် ၁ရက် နေ့လည် ၁၁ နာရီ ၌ ရပ်တန့်ထားသည့် စူပါကာစတန် အမျိုးအစား ယာဉ်ငယ် ၁၃ စီးကို စစ်ဆေးရာ ကျွန်းခွဲသားပေါင်း (၈၃၇)ချောင်း (၁၅)တန် ကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သော်လည်း ထိုထဲတွင် ကားသမား တဦးသာ ဖမ်းဆီးရမိပြီး ကျန် ၁၂ ဦး မှာ ထွက်ပြေးလွှတ်မြောက် နေ ကြောင်း လွိုင်လင်မြို့နယ် သစ်တော ဦးစီးအရာရှိ ဦးပြည့်ဟိန်း က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကို ပြောသည်။“ယာဉ် ၁၃ စီးမှာ တစ်စီးက တရားခံ မိတယ်။ ၁၂ စီးက ပိုင်ရှင် မတွေ့ရှိရပဲ ဖမ်းဆီး ရမိတယ်” ဟု လွိုင်လင်မြို့နယ် သစ်တော ဦးစီးအရာရှိ ဦးပြည့်ဟိန်း က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကိုပြောသည်။
တရားခံကို ဆက်လက်ရှာဖွေနေပြီး၊ လက်ရှိ ဖမ်းဆီးရမိသူကို ခိုလမ်ရဲစခန်းတွင် သစ်တော ဥပဒေ ပုဒ်မ (၄၃) (က) နှင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ဦးပြည့်ဟိန်း က ဆိုသည်။ ထိုနည်းတူ သျှမ်းပြည် တောင်ပိုင်း ကျိုင်းတောင်းမြို့နယ်တွင် ဇွန် ၂ ရက် မနက် ၁၁ နာရီ ၌ တရားမဝင် ပိတောက်သစ်ခွဲသားဆိုဒ်စုံ ၁၀တန် နှင့် ကျွန်းသစ်ခွဲသားဆိုဒ် စုံ ၂၀ တန် နှင့် အတူ လိုင်စင်မဲ့ ယာဉ် ၅ စီး ကို သိမ်းဆည်းရမိကြောင်းသိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/16923
၂၁။ မေခမြစ်ပေါ်ကရေကာတာ ၆ ခု၏အချက်အလက်မသိရသဖြင့် ဧရာဝတီမြစ်ရေအတက်အကျခန့်မှန်းရန်ခက်ခဲနေဟုဆို
မေခ မြစ်ပေါ်ရှိ ရေကာတာ ၆ ခု၏ ရေစီးဆင်းမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်လက်မရရှိသေးသရွှေ့ ဧရာဝတီမြစ်ရေအတက် အကျအခြေအနေကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်ခက်ခဲနေသည်ဟု သိရသည်။
မလိခအထက်ပိုင်း ရေကာတာ ၂ ခု၏ ရေစီးဆင်းမှုအချက်အလက်ကို လွယ်ကူစွာရရှိနိုင်သော်လည်း မေခမြစ်ပေါ်ရှိ ရေ ကာတာ ၆ ခု ၏ ရေစီးဆင်းမှုအချက်အလက်ကိုရရှိရန် မဖြစ်နိုင်သည့်အတွက် ဧရာဝတီမြစ်ရေအတက်ကျ ကြိုခန့်မှန်းရန် အခက်ခဲရှိနေကြောင်း ကချင်ပြည်နယ်မိုးလေဝသနဲ့ ဇလဗေသဦးစီးအရာရှိ ဦးနိုင်လင်းထွေး က ပြောသည်။ “အဓိကသည် မြစ်ကြီးနား အတွက်ဆိုရင် မြစ်နှစ်သွယ်ဖြစ်တဲ့ အပေါ်က မေခနဲ့ မလိခပေါင်းပြီးမှ Focus လုပ်ရတာ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ မေခဘက်က Information မရှိဘူး။ အချက်လက်ရယူဖို့တွက် အားနည်းတယ်။ အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ တရုတ်က လုပ်ထားတဲ့ရေကာတာ ၆ ခုက ကျနော်တို့ ပိုင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက် အဲဒီကနေရေလွှတ်ခြင်း မလွှတ်ခြင်းကို မသိနိုင်တဲ့ တွက် မေခမြစ်ပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ရေကို ကျနော်တို့ကမသိနိုင်ဘူး။ အဲကြောင့် အဲကနေဆင်းလာတဲ့ ရေအခြေနေပေါ်မှာဘဲ မူတည်ပြီးတော့ အချက်လက်တွေ ထုတ်ပြန်နိုင်ပါသေးတယ်။” ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိ မလိခမြစ်ပေါ်တွင် မချမ်းဘောရေအားလျှပ်စစ်နှင့်ဆွမ်ပရာဘွမ်ရေအားလျှပ်စစ် ၂ ခုရှိနေပြီး မေခမြစ်ပေါ်တွင်မူ ချီဖွေ ငယ်ရေကာတာအပါအဝင် တရုတ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းမှ ရေကာတာ ၆ ခု ရှိကြောင်း ၎င်းကဆက်ပြောသည်။ “ဥပမာ ချီဖွေငယ် ရေကာတာဆိုလို့ရှိရင် ဘယ်ချိန်မှာရေကာတာဆေးမယ်၊ ဘယ်ချိန်မှာတော့ရေလွှတ်မယ်ဘယ်နေ့ထိတော့ ရေကာတာဆေး မယ်၊ ရေကိုဘယ်ချိန်မှလွှတ်မယ်၊ အဲလိုအချက်လက်တွေထုတ်ပြန်ပေးရင်တော့ကျနော်တို့က ကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့ရမယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ရေဘယ်လောက်တက်လာနိုင်တယ်၊ ရုတ်တရက်တက်လာတာမျိုးဆိုရင် ဒီ Dam ကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ကျနော်တို့ကတစ်ခါတည်းတန်းတွက်လို့ရတယ်။” ဟု ကချင်ပြည်နယ်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေသဦးစီးအရာရှိ ဦးနိုင်လင်းထွေးက ပြောသည်။
သမိုင်းတစ်လျှောက် ကချင်ပြည်နယ် ဧရာဝတီမြစ်ရေ၏ စိုးရိမ်ရေအမှတ်သည် ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် (၁၄၁၄) ၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် (၁၄၀၈) နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် (၁၂၂၉) အထိရှိခဲ့သည်။
မိုးလေဝသနဲ့ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်လက်များအား စောလျှင်စွာပြည်သူများထံ သတင်းပေးပို့နိုင်ရန်တွက်လည်း သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာ၊ ရပ်ကွက်မှူးများ၏ ဖုန်းနံပါတ်များ တောင်းဆိုထားပြီး သတင်းချက်လက်မြန်ဆန်စွာ ပေးပို့ နိုင်ရန် Viber Group ဖွဲ့ထားမည့်အစီစဉ် စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆက်ပြောသည်။ မိုးလေဝသနှင့် သက်ဆိုင်သည့်သတင်းများကို နေ့စဉ်မနက် ၇နာရီ နေ့လည် ၂နာရီ ည ၇နာရီ ပုံမှန်ထုတ်ပြန်ပေးနေကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/06/02/%e1%80%99%e1%80%b1%e1%80%81% e1%80%99%e1
COVID-19 လူနာသစ် Case-231 သည် မူဆယ်မြို့နယ် မုံးပေါ်တိုက်နယ်ကျန်းမာရေးဌာနမှ အသက် ၃၀ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးမှူးဖြစ်ပြီး မူဆယ်ဆေးရုံကြီးတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကို COVID -19 ပိုးရှိ မရှိစစ်ဆေးရာမှ ပိုးတွေ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဇွန် ၂ ရက် ညပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ Case-231 လူနာသည် COVID-19 အတည်ပြုလူနာနှင့် ထိတွေ့မှုမရှိ၊ ပြည်ပသို့ ခရီးသွားရာဇဝင်မရှိနှင့် အသွားအလာ ကန့်သတ်ခံထားရခြင်း မရှိသူဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ Case-231 သည် မူဆယ်ဆေးရုံသို့ လပတ်အစည်းအဝေးနှင့် လစာထုတ်ရက်များသာ လာရောက် တက်သူဖြစ်ကာ မူဆယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများအား COVID-19 ရောဂါပိုးစစ်ဆေးရန် မေ ၂၉ က ဓါတ်ခွဲနမူနာများ ရယူခဲ့ပြီး ဓါတ်ခွဲအဖြေအရ ပိုးတွေ့ရှိခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိတွင် Case-231 နှင့် ၎င်း၏ ခင်ပွန်းအား မူဆယ်ခရိုင် ပြည်သူ့ဆေးရုံသစ်ကြီးသို့ ပို့ဆောင်ကာ ဆေးဝါးကုသ ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ပြည်သူများအနေဖြင့် ကျန်းမာရေးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ချက်များကို အဓိကလိုက်နာနေထိုင်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးမှူး ဒေါက်တာတင်မောင်ညွန့်က တိုက်တွန်းပြောကြားသည်။“Social Distancing ကို ခရိုင် COVID-19 ကာကွယ်ကုသ ထိန်ချုပ်ရေးကော်မတီက ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားပါမယ်။ ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဌာန အနေနဲ့ကတော့ သူနဲ့ထိတွေ့တဲ့ contact ရှိသူတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Contact Treating တွေလိုက်ပြီးလုပ်နေတယ်၊ Positive လူနာကိုလည်း ကုသဖို့လည်း လုပ်နေပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဌာနက ဖြေလျှော့တာတွေကလွှဲလို့ ကျန်တာတွေ Social Distancing ကော၊ Mask တက်တာတွေကော၊ စားသောက်ဆိုင်တွေကအစ ကျွန်တော်တို့ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာနက သက်မှတ်ထားတဲ့ ပုံစံအတိုင်း နေထိုင်ဖို့သတ်မှတ်ထားပြီးသား။ ဒါကြောင့် အဓိကကတော့ ထုတ်ပြန်ချက်တွေ ကို ပြည်သူတွေက လိုက်နာဖို့ဘဲ အရေးကြီးပါတယ်”ဟု ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးမှူး ဒေါက်တာတင်‌မောင်ညွန့်က ပြောကြား သည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း Social Distancing အတွက် ကန့်သတ်မှုများ ဖြေလျှော့ပေးနေချိန် မူဆယ်မြို့တွင် ပြည်သူများ သတိရှိ ပြီး ပေါ့ဆရန်မသင့်ကြောင်း၊ ကျန်းမာရေး အသိရှိပြီး အပြင်ထွက်တိုင်း Mask တပ်ကာ လူခွဲနေရန် လိုအပ်ကြောင်း ကရုဏာ လူမှုကူညီရေး အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးသောင်းထွန်းက ပြောကြားသည်။ https://news-eleven.com/article/176761
သျှမ်းပြည်အတွင်းရှိ Covid-19 ကူးစက်ရောဂါ စစ်ဆေးဂိတ်များအားလုံး ပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့က လေဆိပ်ဂိတ် ၅ ခု နှင့် နယ်စပ် ဝင်/ထွက် ဂိတ်များမှ အပ ကျန်ရှိသည့် သျှမ်းပြည်တွင်းရှိ ဂိတ်များ အားလုံး ပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ “အခုလက်ရှိမှာတော့ လေဆိပ် နဲ့ နယ်စပ် ဂိတ်တွေမှာပဲ စစ်ဆေးရေး ဂိတ်ထားတော့ တယ်။ အကုန်လုံး နီးပါး ပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီ” ဟု လူမှုရေး ဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း ကပြောသည်။
လေဆိပ်ဂိတ် ၅ ခု ဖြစ်သော ဟဲဟိုးလေဆိပ်၊ လားရှိုးလေဆိပ်၊ ကျိုင်းတုံလေဆိပ်၊တာချီလိတ်လေဆိပ်နှင့် မိုင်းဆတ် လေဆိပ်တို့ ဆက်လက် စစ်ဆေးထားကြောင်း သိရသည်။“မနေ့က စပြီး ပိတ်လိုက်တယ်။ တောင်ကြီးက ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးတဲ့ ဂိတ် ၄ ဂိတ် စလုံး ပိတ်လိုက်ပြီ။”ဟု တောင်ကြီး စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာ စစ်ဆေးနေသည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း တစ်ဦး ကပြောသည်။ နယ်စပ် ဝင်ထွက် ဂိတ်များဖြစ်သည့် နမ့်ခမ်း၊ မူဆယ်၊ လောက်ကိုင်၊ ချင်းရွှေဟော်၊ တာချီလိတ်၊ မိုင်းယု၊ ဝမ်ပုံ ရှိ ဂိတ်များတွင် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများ ဆက်လက် ပြုလုပ်ထားကြောင်း သိရသည်။ Covid-19 ကူးစက် ရောဂါ မပြန့်ပွားရေးအတွက် သျှမ်းပြည်တွင်းရှိ မြို့အဝင်အထွက်တိုင်းမှာ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးဂိတ်များ ကို မေလ ၂၄ ရက် ဝန်းကျင်မှ စပြီးဖွင့်လှစ်ကာ ဖြတ်သန်းသွားလားသူများကို ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ https://burmese.s hannews.org/archives/16895
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း တောင်ကြီးမြို့တွင် ထိုင်းပြည်တော်ပြန် ၆၀ဝ ကျော် Quarantine ပြုလုပ်ထားကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရ သည်။ ထိုင်း – မြန်မာ နယ်စပ် ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီ အမှတ်(၂) ချစ်ကြည်ရေး တံတားမှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူဖြစ်ပြီး သျှမ်းပြည်သို့ပြန်လာမည့် ပြည်တော်ပြန်များကို တောင်ကြီးခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များကို Quarantine ထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။
“သူတို့ကို ပိုးစစ်ပြီးမှ ဘယ်နှရက် ထားမယ်ဆိုတာ ပြောလို့ရပါ့မယ်။ လောလောဆယ်တော့ ၁၀ ရက်လောက် ထားမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။”ဟု စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကိုဝင်းနိုင်စိုး ကပြောသည်။ မေလ ၂၇ ရက်မှ ဇွန် ၃ ရက်နေ့ထိ ပြည်တော်ပြန် ၆၀ဝ ကျော် ရောက်ရှိထားကြောင်း သိရသည်။“Quarantine ဝင်တဲ့သူ အားလုံးကို ဓါတ်ခွဲနမူနာ စစ်မယ်။ တစ်ချို့ တစ်ဝက် စစ်ပြီးတာလဲ ရှိပါတယ်။ နေ့စဉ် ဝင်ရောက်နေပါတယ်။ ၂၀ဝ၀ ကျော် ဝင်လာမယ်လို့ သိရပါတယ်”ဟု ကိုဝင်းနိုင်စိုး ကပြော သည်။
ထိုင်းပြည်တော်ပြန်များသည် တောင်ကြီးမြို့နယ်ရှိ မိုးကုတ်ဝိပဿနာ ရိပ်သာ၊ ညောင်ရွှေ တည်းခိုရေး စခန်း၊ ပင်းတယမြို့ရှိ မိုးကုတ်ဝိပဿနာ၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ် သက်မွေး သင်တန်းကျောင်း၊ ညောင်ရွှေမြို့ရှိ ခေတ်ဆန်းယဉ်၊ ကလောမြို့နယ် ဟဲဟိုးမြို့စိုက် သိပ္ပံကျောင်း၊ တောင်ကြီး ကွန်ဗျူတာ တက္ကသိုလ်တို့မှာ ထိုင်းပြည်တော်ပြန်များ ထားရှိကြောင်း သိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/16927
၁။ အစိုးရတပျနှငျ့ နယျခွားစောငျ့တပျ ပူးပေါငျး၊ RCSS/SSA စခနျးကို ပဈခတျ
၂။ ဆီဆိုငျတှငျ တောငျသူမြား ထှနျတုံးတိုကျပှဲ ပွုလုပျ
၃။ တပျမတျော၏ လကျနကျကွီး ပဈခတျမှုကွောငျ့ ဒသေခံရှာသား ၂ ဦး ထိခိုကျဒဏျရာရရှိ
၄။ လကျနကျကိုငျအန်တရာယျကွောငျ့ ပလကျဝမှာ ရိက်ခာပွတျ
၅။ တပျဖှဲ့ဝငျ သုံးဦးကို AA ဖမျးသှားတယျလို့ ALP စှပျစှဲ
၆။ ရီမုမိုငျးဖွငျ့ တိုကျခိုကျခံရသဖွငျ့ ပုဏ်ဏားကြှနျးအဝငျတှငျ တပျမတျောသားတခြို့ ကဆြုံး
၇။ ကခငျြတဈကြော့ပွနျစဈပှဲ ၉ နှဈပွညျ့နေ့ စဈရှောငျစခနျးမြားတှငျ ကြောကျတိုငျစိုကျထူမညျ
၈။ ကြောငျးအပျခြိနျ တိုငျးရငျးသားအမညျ ထညျ့သှငျးရေးအကွောငျးကွားစာ ပွညျနယျ ကရငျစာ/ ယဉျမှ လကျခံရရှိခွငျး မရှိသေး
၉။ AA ဖမျးဆီးခဲ့သညျ့ ခငျြးအမြိုးသမီး သဆေုံးမှု လူ့အခှငျ့အရေးအဖှဲ့မြားထံ တငျပွမညျ
၁၀။ KNU ညောငျလေးပငျခရိုငျရှိ Covid -19 ထိနျးခြုပျကာကှယျရေးဂိတျတဈခု ဖကျြဆီးခံရ
၁၁။ ၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲကို နိုဝငျဘာလအတှငျးကငျြးပမညျဖွဈပွီး COVID-19 ရောဂါကွောငျ့ မဲဆှယျစညျး ရုံးမှုနှ ငျ့ပတျသကျ၍ စညျးကမျးခကျြအသဈမြားရှိလာမညျဟု ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ဝငျပွောကွား
၁၂။ ဘိနျးစာပငျမြား မဖကျြဆီးဘဲထားရှိပါက မူးယဈဥပဒဖွေငျ့ အရေးယူမညျဟု KNPF စာထုတျ
၁၃။ မွပေုံကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူးနှဈဦး အကွမျးဖကျမှုတိုကျဖကျြရေးဥပဒနေဲ့ တရားစှဲခံထားရ
၁၄။ မွဝတီ သဈတောပိုငျမွကေို ခွံကှကျရိုကျ ရောငျးခနြသေူမြားအား ဖျောထုတျအရေးယူမညျဟု သဈတောဌာနပွော
၁၅။ နိုငျငံရေးအကြိုးအမွတျအတှကျ COVID-19 ကိုလကျနကျအဖွဈအသုံးခဟြု ရှပွေ့ေးအသံအဖှဲ့အစီရငျခံစာထုတျပွနျ
၁၆။ နာဂ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေ ဒုံဟီးမွို့နယျအတှငျးရှိ ပွောငျးခငျးမြား ပိုးကမြှုကွောငျ့ပကျြစီးမှုရှိ၍ ဒသေအတှငျး လာမညျ့နှဈ စားနပျရိက်ခာအတှကျ အခကျအခဲ ဖွဈနိုငျဟုဆို
၁၇။ ပွောငျးစိုကျခငျးမြားတှငျ ငမွှောငျတောငျပိုး ဖကျြဆီးမှုနဲ့ ရငျဆိုငျနရေ
၁၈။ မဟာဓာတျအားလိုငျးသှယျသညျ့ လုပျသားကား ခြောကျထဲကြ ၂ ဦးသေ
၁၉။ တောငျကုတျမွို့နယျ ပနျးတငျ (ငမောကျခြောငျး) တိုကျနယျဆေးရုံတှငျ တာဝနျကဝြနျထမျး လတျတလော မရှိသဖွငျ့ ပိတျ ထား ရပွီး ကနျြးမာရေးနှငျ့ ပတျသကျ၍ ဒသေခံမြား စိုးရိမျ
၂၀။ ခိုလမျတှငျ ကြှနျးတငျ ကား(၁၃)စီး နှငျ့ အတူ ယာဉျမောငျး တဦး ဖမျးဆီးရ
၂၁။ မခေမွဈပျေါရကောတာ ၆ ခု၏ အခကျြအလကျမသိရသဖွငျ့ ဧရာဝတီမွဈရအေတကျအကခြနျ့မှနျးရနျ ခကျခဲနဟေုဆို
၂၂။ COVID-19 လူနာသဈ Case-231 သညျ မူဆယျမွို့နယျ မုံးပျေါတိုကျနယျ ကနျြးမာရေးမှူးဖွဈပွီး မူဆယျရှိ ကနျြးမာရေး ဝနျထမျးမြားကို COVID -19 ပိုးရှိ မရှိ စဈဆေးရာမှ ပိုးတှေ့ ခွငျးဖွဈ
၂၃။ သြှမျးပွညျတှငျး ၂ လ ကြျော ဖှငျ့လှဈခဲ့သညျ ကနျြးမာရေး စဈဆေးရေးဂိတျမြား ပိတျသိမျး
၂၄။ တောငျကွီးမွို့နယျ တှငျ ထိုငျးပွညျတျောပွနျ ၆၀ဝ ကြျော ရှိ
ကိုဗဈကာလကွား သြှမျးပွညျ အရှပေို့ငျး ပုံပါကငျြမွို့နယျတှငျ အစိုးရတပျနှငျ့ နယျခွားစောငျ့တပျတို့ ပူးပေါငျးပွီး RCSS/SSA တို့ ယနေ့ မနကျပိုငျးက ပဈခတျမှုဖွဈပှါးခဲ့ကွောငျး စုံစမျးသိရသညျ။
ဇှနျ ၃ ရကျ ယနမေ့နကျပိုငျးက မိုငျးဆတျခရိုငျ ပုံပါကငျြမွို့နယျအတှငျး အမှတျ ၆၅ ခွလေငျြတပျရငျး နှငျ့ အမှတျ ၁၀ဝ၇ နယျခွားစောငျ့တပျတို့ ပူးပေါငျးပွီး သြှမျးပွညျပွနျလညျထူထောငျရေးကောငျစီ၊သြှမျးပွညျတပျတျော( RCSS/SSA) ယာယီတပျ စခနျးကို လကျနကျကွီးဖွငျ့ ပဈခတျမှု ဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး RCSS ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗိုလျမှူး ခမျးစံ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ကို ပွောသညျ။“တိုကျပှဲကတော့ မနကျ ၈ နာရီ ကနေ ၁၀ နာရီထိဖွဈသှားတယျ။ တပျနဲ့ နယျခွားစောငျ့တပျ ပူးပေါငျးပွီး ကနြျောတို့ တပျစခနျး ရှိတဲ့နရောကို ပဈတာပါ။ လူထိခိုကျမှုတော့မရှိဘူး” ဟု ဗိုလျမှူး ခမျးစံ ကဆိုသညျ။
အစိုးရတပျနှငျ့ နယျခွားစောငျ့တပျတို့ ပူးပေါငျးပွီး စဈအငျအား ၁၀ဝ တို့သညျ မျောတာ ၆၀ မမ၊ M 79 ၊တို့ဖွငျ့ RCSS/SSA ၏ ယာယီတပျစခနျးကို ပဈခတျကွောငျးသိရသညျ။ လကျရှိမှာ အစိုးရတပျမတျောနှငျ့ နယျခွားစောငျ့တပျတို့သညျ စဈအငျအား မြား ဖွညျ့နမှေုကွောငျ့ တိုကျပှဲမြားဆကျလကျ ဖွဈပှားမညျကို ဒသေခံမြားက စိုးရိမျနကွေသညျ။ ဧပွီလကလညျး RCSS/SSA နှငျ့ အစိုးရတပျမတျောတို့ တိုကျပှဲဖွဈပှားခဲ့ပွီး တိုကျပှဲမြားထပျမံ မဖွဈပှားအောငျ ၂ ဖကျ ထိနျးသိမျးနထေိုငျသှားမညျဟုလညျး နှုတျကတိမြား အပွနျအလှနျပေးခဲ့ပွီး ကိုဗဈ-၁၉ ကာလ အတှငျး ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရနျလညျး ပွောဆိုထားကွသညျ။
ထို့ပွငျ အစိုးရတပျမတျော ဘကျမှလညျး အကွမျးဖကျဟု ကွညောထားသညျ့ အဖှဲ့အစညျးရှိသညျ့နရောမှ အပ ကနျြ နယျမွေ မြားတှငျ မေ ၁၀ ရကျမှ သွဂုတျ ၃၁ ရကျထိ ကိုဗဈ-၁၉ ကာကှယျ ထိနျးခြုပျသညျ့ ကာလအနဖွေငျ့ ပဈခတျတိုကျခိုကျမှု ရပျစဲ ထားကွောငျး ကွညောခကျြထုတျခဲ့သေးသညျ။ RCSS/SSA သညျ တနိုငျငံလုံး အပဈခတျရပျစဲရေး သဘောတူစာခြုပျ (NCA) လကျမှတျရေးထိုးထားသညျ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ တပျဖှဲ့ တခုဖွဈသညျ။ https://burmese.shannews.org/archiv es/16919
သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး ပအိုဝျးကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေ ဆီဆိုငျမွို့နယျအတှငျး အစိုးရတပျသညျ တောငျသူမြား၏ မွယော မြား၊ လယျထှနျစကျမြားကို သိမျးဆညျးသှားသဖွငျ့ တောငျသူမြားက ထှနျတုံးတိုကျပှဲ ပွုလုပျသညျ။ မလေ နှောငျးပိုငျးက အစိုးရတပျနှငျ့ ဆီဆိုငျမွို့နယျ ကြေးရှာ ၅ ရှာမှ တောငျသူမြား မွယောအငွငျးပှားမှု ဖွဈပှားခဲ့ပွီးနောကျ အစိုးရတပျမှ ဒသေခံ တောငျသူ ၇၀ ကို တရားစှဲခဲ့ကွပွီး ၎င်းငျးတို့၏ လယျထှနျစကျ ၂၉ စီး ပါသိမျးဆညျးခွငျးခံရကွောငျး ဆီဆိုငျမွို့နယျ ဒသေခံမြား ပွောပွခကျြအရသိရသညျ။“စဈတပျက တောငျသူတှရေဲ့ လယျထှနျစကျကိုသိမျးထားတော့ တောငျသူတှကေ ကြှဲ ၊ နှားတှေ မရှိတော့ အရငျကလို လူတှေ နဲ့ ပွနျလုပျနရေတယျ။ စိုကျပြိုးဖို့ အရမျးအခကျခဲ ဖွဈနကွေတယျ ” ဟု ဆီဆိုငျမွို့ အောငျခမျြး သာ ရပျကှကျ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးစံဝငျးမောငျ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကိုပွောသညျ။
ဆီဆိုငျမွို့ အခွစေိုကျ အမှတျ (၄၂၃) ခွလေငျြတပျရငျး နှငျ့ (၄၂၄) ခွလေငျြတပျရငျးမြားက မလေ ၃၀ ရကျ တှငျ မွဧေက ၉၀ဝ ကို သိမျးယူခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။“ဒီပွသနာက ဒီကနထေိ့ပဲ မပွီးသေးဘူး။ သူတို့ သိမျးထားတဲ့ မွတှေကေ ဘိုးဘှား ပိုငျမွဖွေဈတယျ။ ပွညျထဲရေးမှာလညျး အမညျပေါကျဖွဈထားတယျ။ အခု တောငျသူတှေ အရမျးဒုက်ခရောကျနတေယျ။ မိုး ရာသီလညျးရောကျပွီ ပွောငျးတှေ စပါး တှေ စိုကျပြိုးခြိနျရောကျပွီလေ”ဟု ဦးစံဝငျးမောငျ ကပွောသညျ။ လကျရှိမှာ စဈတပျ မှ တောငျသူ ၇၀ ဦး ကို ဆီဆိုငျမွို့မ ရဲစခနျးတှငျ ပုဒျမ ၄၄၇ နှငျ့ အမှုဖှငျ့ထားကွောငျး သိရသညျ။
ဆီဆိုငျမွို့နယျ ကြေးရှာ ၅ ရှာမှ ဒသေခံမြားသညျ မွအေငွငျးပှားမှုကွောငျ့ စိုကျပြိုးရေးကောငျးကောငျးမှနျမှနျ မလုပျနိုငျသလို တဖကျတှငျလညျး မွယောအမှုကိုဆကျလကျရငျဆိုငျသှားရဦးမညျဖွဈသဖွငျ့ ခကျအခဲမြားရငျဆိုငျနရေကွောငျးလညျး ဆီဆိုငျ မွို့နယျ ဒသေခံတောငျသူမြားကဆိုသညျ။“ကနြျောတို့ ဒီမွယောမှာ စိုကျပြိုးလာတာကွာပွီ၊ ဒီလယျမလုပျရငျ ကနြျောတို့ ဘာသှားလုပျရမှာလဲ။ တဖကျကလညျး ကိုဗဈ-၁၉ ဖွဈတော့ နိုငျငံခွားသှားလညျးမရဘူး။ တပျက မတရားသိမျးတာ၊ လုပျနေ တာ” ဟု ဆီဆိုငျမွို့နယျ တောငျယာလုပျကိုငျသူတဦး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကို ပွောသညျ။ စဈတပျမှ သိမျးဆညျး သညျ့ မွယောမြားသညျ ပအိုဝျး တောငျသူမြားပိုငျဆိုငျသညျ့ မွယောမြားဖွဈကွောငျး၊ ကိုဗဈကာလအတှငျး တောငျသူမြား စားဝတျ နရေေးအတှကျ လယျယာကောငျးမှနျစှာစိုကျပြိုးနိုငျရနျအတှကျ အစိုးရတပျအနဖွေငျ့ ကူညီပေးသငျ့ကွောငျးလညျး ၎င်းငျး တောငျသူက ပွောသညျ။မေ ၃၀ ရကျတှငျ တောငျသူမြားသညျ မိမိပိုငျမွယောပျေါ ထှနျယကျ စိုကျပြိုးနစေဉျ တပျမှ ဝငျရောကျကာ အမိနျ့အာဏာ ပေး ခွငျး၊ လယျထှနျနသေညျ့ စကျမြားကို ဆီဆိုငျရဲစခနျးသို့ ပို့ဆောငျလိုကျသညျ့ ဗှီဒီယိုဖိုငျသညျ လူမှုကှနျယကျ စာမကျြနှာတှငျ တှရေ့သညျ။ ထို့ပွငျ စဈတပျ မွယောသိမျးခွငျးခံရသညျ့ တောငျသူမြား၊အမှုဖှငျ့ခံရသညျ့ အသကျအရှယျကွီးသညျ့ အမြိုးသမီး မြား ငိုကွှေးသညျ့ ရုပျသံလညျး လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာတှငျ ပြံ့နှံ့ခဲ့သညျ။ အစိုးရ တပျ၏ မွယောသိမျးမှုသညျ ယခုရကျပိုငျး သြှမျးပွညျတောငျပိုငျးသာမက သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျးတှငျ သိမျးဆညျးမှုမြားရှိနသေဖွငျ့ သြှမျးပွညျသူမြားလညျး စိုးရိမျပူပနျမှု ဖွဈပှားနကွေသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/16897
ကရငျပွညျနယျ၊ ဖာပှနျဒသေတှငျ မွနျမာ့တပျမတျော လကျအောကျခံတပျရငျးမှ ဒသေခံကြေးရှာမြားထဲသို့ လကျနကျကွီး ပဈခတျမှုကွောငျ့ ယမနျနေ့ ဇှနျလ ၂ ရကျနကေ့ ဒသေခံရှာသား (၂) ဦး ထိခိုကျဒဏျရာရရှိခဲ့ပွီး နီးစပျရာ ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောငျ ခဲ့ရကွောငျး ဒသေတှငျး သတငျးအရငျးအမွဈမြားထံမှ သိရသညျ။
မူတရျော(ဖာပှနျ)ခရိုငျ၊ ဒှယျလိုးမွို့နယျ၊ မောလျောကလိုးကြေးရှာအနီးတှငျ ယမနျနကေ့ တပျမတျောနှငျ့ KNLA တပျဖှဲ့တို့ အ ကွား ပဈခတျမှုဖွဈပှားရာတှငျ မောလျောကလိုး ကြေးရှာအနောကျဘကျရှိ ဝါးကလိုး ထကြေးရှာသို့ တပျမတျော အမှတျ(၈) စဈဆငျရေး ကှပျကဲမှုဌာနခြုပျ လကျအောကျခံ ခွမွေနျတပျရငျး(ခမရ-၄၁၀) စခနျးမှ လကျနကျကွီးဖွငျ့ ပဈခတျမှုကွောငျ့ ဝါးကလိုးထကြေးရှာ ဒသေခံ သားအဖနှဈဦးကို ထိမှနျခဲ့ကွောငျး အမညျမဖျောလိုသူ ဒသေခံတဈဦးက ယခုလိုပွောသညျ။ “မနကေ့ ၂ နာရီကြျောလောကျမှာ KNLA နဲ့ ပဈကွတာ။ အဲ့ဒါ သူတို့ (စဈတပျ) ဘကျက လကျနကျကွီး ၂ လုံး ပဈလိုကျတာ ရှာထဲကို ကပြွီး ရှာထဲက သားအဖနှဈဦးကို သှားထိတာပဲ။ သူတို့ကို ကမမောငျးဆေးရုံကို ပို့လိုကျတယျ” ဟု ၎င်းငျးဒသေခံက ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
အဆိုပါ လကျနကျကွီးထိမှနျသူ သားအဖနှဈဦးမှာ အသကျ (၅၂) နှဈအရှယျ စောဖားပိုကေးနှငျ့ ၎င်းငျး၏ သမီး ဖွဈသူ အသကျ (၁၆)နှဈအရှယျ နျောမရေီတို့ ဖွဈကွသညျဟုလညျး အဆိုပါ ဒသေခံက ဆကျပွောသညျ။ ယငျး ဒသေခံ ကြေးရှာသားနှဈဦး လကျနကျကွီးထိမှနျပွီး ကမမောငျး ဆေးရုံသို့ လာရောကျပို့ဆောငျကုသခဲ့ ကွောငျး ကမမောငျးဆေးရုံတှငျ တာဝနျကနြေ သညျ့ အမညျမဖျောလိုသူ ကနျြးမာရေး ဝနျထမျးတဈဦးကလညျး ကအေိုငျစီသို့ အတညျပွုပွောဆိုသညျ။ ၎င်းငျးက “မိုငျး အစထိ တာ။ ရှာသားပဲ၊ သူ့အဖနေဲ့ သမီးနဲ့။ သူ့အဖကေ ခွထေောကျမှာထိတာ၊ သူ့သမီးက လကျမှာထိတာ။ သိပျတော့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး မဖွဈဘူး။ ဒီနမေ့နကျ ဆေးရုံကတောငျ ဆငျးသှားပွီး။ ရပေူရှာက လို့တော့ ပွောတယျ။ ကလေးမလေးက ၁၃ နှဈပဲရှိသေး တယျ”ဟု ပွောသညျ။
အဆိုပါ ပဈခတျမှုနှငျ့ ဒသေခံ ထိခိုကျခံရမှုနှငျ့ပတျသကျပွီး ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး-KNU တပျမဟာ (၅)၊ မူတရျော (ဖာပှနျ)ခရိုငျမှ မွပွေငျသတငျးမတကျလာသေးသောကွောငျ့ တစုံတရာမသိရှိရသေးကွောငျးပွောဆိုသလို တပျမတျော တာဝနျရှိ သူဘကျကိုလညျး ဆကျသှယျမေးမွနျး၍ မရရှိပေ။ လတျတလောကာလတှငျလညျး KNU တပျမဟာ (၅) လကျ အောကျခံ တပျရငျးတပျဖှဲ့မြားနှငျ့ မွနျမာတပျမတျော လကျအောကျခံတပျရငျးတို့အကွား ပဈခတျတိုကျခိုကျမှု မကွာခဏ ဆကျလကျဖွဈပှားနပွေီး ပွီးခဲ့သညျ့ လ တှငျလညျး အရပျသားထိခိုကျမှု ထှကျပွေးတိမျးရှောငျရမှုရှိခဲ့ကွောငျး ဒသေတှငျး သတငျးအရငျး အမွဈမြားထံမှ သိရသညျ။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80%90%e1%80%95%e1%80% b9%e1%80%99%e1%80%b1%e1%
ပလကျဝမွို့နယျမှာ နထေိုငျကွတဲ့ ဒသေခံအမြားစုဟာ တောငျယာလုပျငနျးကို လုပျကိုငျကွတာဖွဈပွီး ရခိုငျပွညျနယျ ကြောကျတျောမွို့နယျနဲ့ ဆကျသှယျထားတဲ့ ကုလားတနျရလေမျးကွောငျးကို အသုံးပွုကာ ကုနျပစ်စညျးတှေ ဖလှယျပွီး စားဝတျနရေေးတှကေို ဖွရှေငျးနရေတာလညျး ဖွဈပါတယျ။
လကျရှိအခြိနျမှာ ကြောကျတျောမွို့နယျကို သှားတဲ့ရလေမျးကွောငျးမှာ လကျနကျကိုငျတပျဖှဲ့တှကေ ချေါယူစဈဆေးတာတှေ ပဈခတျတာတှေ ရှိနတောကွောငျ့ ကုနျစညျစီးဆငျးမှုမရှိဘဲ ပလကျဝမွို့ပျေါမှာ စာနပျရိက်ခာတှေ ပွတျလပျနတေယျလို့ ပလကျဝ ဒသေခံ ဆလိုငျးခငျမောငျက ပွောပါတယျ။ “ဖဖေျောဝါရီလ ၉ ရကျလောကျကတညျးက မသှားရတာဗြ။ မသှားရ ဘူးဆိုတာကလညျး ဘယျသူမှတားမွဈထားတာမြိုး မဟုတျဘူး။ ဒါပမေဲ့ သှားရငျ ကြောကျတျောမွို့နယျ တငျးမရှာ နား လောကျ မွနျမာ့တပျမတျောသားတှကေ ပဈခတျတာတှရှေိတယျ။ လှပေျေါက လူတှကေိုချေါတယျ မေးမွနျးတယျ၊ သတျဖွတျ တယျ။ ပဈခတျတာတှရှေိတယျ တခြို့ဆိုရငျ ဒဏျရာ ရသှားတာတှရှေိတယျ။ ဟိုတဈလောကဆိုရငျ သသှေားတဲ့ သူတှေ တောငျရှိတယျ။ ကနြျောတို့မှာ လမျးကွောငျးက ဒီရလေမျးကွောငျးတဈခုပဲ ရှိတာပေါ့နျော။ ရခိုငျပွညျနယျနဲ့ ဆကျသှယျထား တာပေါ့။ အခုက ကားလမျးကတော့ ပေါကျနပွေီ သှားလို့မရဘူး။ ကုနျးလမျးကသှားရငျလညျး ပဈတယျ၊ ရလေမျးကသှားရငျ လညျးပဈတယျ ဘယျကမှ သှားလို့မရဘူးအခုက။” လကျရှိအခြိနျထိ ပလကျဝမွို့ဘကျမှာ စားနပျရိက်ခာတှေ ရှားပါးနသေလို ကုနျးဈေးနှုနျးတှလေညျး ဆကျလကျမွငျ့တကျနတေယျလို့ သူကဆကျပွောပါတယျ။
ပလကျဝဒသေခံတှေ ကွုံတှနေ့ရေတဲ့ စားနပျရိက်ခာပွတျလပျတာတှကေို သကျဆိုငျရာဌာနဆိုငျရာတှကေို အခြိနျနဲ့ တပွေးညီ တငျပွထားပမေဲ့ လကျရှိအခြိနျထိ ဒသေခံတှေ စားနပျရိက်ခာပွတျလပျတာတှကေို ရငျဆိုငျနရေတုနျးပဲလို့ ခငျြးပွညျနယျ အမြိုးသားလှတျတျောအမတျ ဆလိုငျမြိုးထိုကျက ပွောပါတယျ။ “အခကျအခဲရှိတယျဆိုတာက မွို့ပျေါမှာနတေဲ့ သူတှရေော ပွီးတော့အနီးအနားကြေးရှာတှမှော နတေဲ့သူတှရေော ကြေးရှာတှမှော တိုကျပှဲရှောငျတဲ့အနနေဲ့ နတေဲ့ တခြို့ မွို့ပွငျပ ကြေးရှာတှမှော ရှိတယျလေ။ သူတို့မှာ စားဖို့မရှိဘူးဆိုပွီးတော့ ကနြျော့ကိုလှမျးပွီးတော့ ဖုနျးနဲ့ အကွောငျးကွားတာ တှေ ရှိတယျ။ ကုနျဈေးနှုနျးက ရိက်ခာပွတျတယျဆိုတော့ တကျမှာပဲလေ။ ကနြျောကတော့ သိပျပွောစရာ မရှိဘူး။ ကနြျောကတော့ သကျဆိုငျရာ တှကေို အကွောငျးကွားပေးတယျ။ လူထုတှေ လှမျးပွီးတော့ အကူအညီတောငျးတာတှကေို ခငျြးပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ကိုရောကျ အခြိနျနဲ့ တပွေးညီအကွောငျးကွားပေးပါတယျ။”
ပွီးခဲ့လပိုငျးလောကျကလညျး ပလကျဝနယျကို စားနပျရိက်ခာတှေ ထောကျပံ့ပေးဖို့ သှားတဲ့ ကမ်ဘာ့စားနပျရိက်ခာအဖှဲ့ WFP ယာဉျတနျးက လကျနကျကိုငျအဖှဲ့တှကေ ပဈခတျခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။ လကျရှိအခြိနျထိလညျး ပလကျဝမွို့နယျတှမှော ကွိုကွားကွိုကွား ပဈခတျမှုတှေ ဆကျလကျရှိနသေေးလို့ ပလကျဝဒသေခံတှကေ ပွောဆိုကွပါတယျ။ https://burmese .voanews.com/a/chin-pa-lat-wa/5447344.html
တနိုငျငံလုံး ပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေး သဘောတူစာခြုပျမှာ လကျမှတျထိုးထားတဲ့ ရခိုငျပွညျလှတျမွောကျရေးပါတီ/ ရခိုငျ လှတျမွောကျရေးတပျမတျော (ALP/ALA) ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗိုလျမှူးကွီးခိုငျစိုးမွက သူတို့အဖှဲ့ဝငျတခြို့ကို ရက်ခိုငျ့တပျတျော AA က ဖမျးဆီး သတျဖွတျနတေယျလို့ ပွောပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ မလေ ၃၁ ရကျနကေ့ တောငျကုတျမွို့နယျမှာနထေိုငျတဲ့ ခိုငျဝငျးလှိုငျကို AA အဖှဲ့က ဖမျးဆီးသှားတယျလို့ ဗိုလျမှူး ကွီး ခိုငျစိုးမွက ပွောပါတယျ။“ကြှနျတျောတို့ ဖမျးသှားတဲ့ဟာကတော့ AA အဖှဲ့ကလို့တဈထဈခပြွောနိုငျတယျ။ သူ့ကို မဖမျး ခငျ သုံးရကျလောကျက ခွိမျးခွောကျမှုတဈခု AA ကလုပျခဲ့တယျလို့ ကြှနျတျောတို့ကို အကွောငျးကွားခဲ့တယျ။ ကြှနျတျောတို့ လလေ့ာကွညျ့တော့ AA ကဖမျးသှားတယျလို့ သိရတယျ။ ဖမျးသှားပွီးနောကျပိုငျးမှာ တောငျကုတျမွို့နယျလုံးဆိုငျရာ အမြိုး သားလုံခွုံရေးအဖှဲ့ဆိုပွီး သူတို့က ခေါငျးရောငျး၊ ခေါငျးဝယျနဲ့ သတျပဈလိုကျပွီလို့ ထုတျပွနျခကျြစာတမျး ထှကျပျေါလာတာ တှရေ့တယျ”ပေါကျတော့မွို့နယျ ဗရကျခြိုငျကြေးရှာက ရဲဘျောခိုငျမောငျခငျဝငျးနဲ့ ခိုငျမောငျလုံးတို့ကို မလေ ၂၃ ရကျနကေ့ AA အဖှဲ့ဝငျ ၁၅ ဦးလောကျက လာရောကျဖမျးဆီးသှားတာကွောငျ့ AA အဖှဲ့ရဲ့ သကျဆိုငျရာ ကွားခံတာဝနျရှိသူတှကေ တဆငျ့ အကွိမျကွိမျ ဆကျသှယျညှိနှိုငျးခဲ့ပမေယျ့ လကျရှိအခြိနျအထိ အောငျမွငျမှုရခဲ့ဘူးလို့လညျး ဆိုပါတယျ။
ဇှနျလ ၁ ရကျနေ့ တောငျကုတျမွို့နယျလုံးဆိုငျရာ အမြိုးသားလုံခွုံရေး အဖှဲ့အစညျးက ထုတျပွနျတဲ့ ကွညောခကျြမှာတော့ အမြားအကြိုးကို နဈနာဆုံးရှုံးစရေနျ ရညျရှယျလုပျဆောငျခဲ့တဲ့ ခိုငျဝငျးလှိုငျကို အဲဒီ နညေ့နပေိုငျး ခေါငျးရောငျး၊ ခေါငျးဝယျ စနဈနဲ့ သုတျသငျလိုကျပွီဖွဈကွောငျး ဖျောပွထားပါတယျ။ အဲဒီ အဖှဲ့အစညျးနဲ့ AA တို့ ဘယျလို ပတျသကျနလေဲဆိုတာ အဖွရှောနဆေဲဖွဈပွီး ခိုငျဝငျးလှိုငျကို သတျလိုကျတာဟာ ဘယျသူ့လကျခကျြလဲဆိုတာ လလေ့ာနဆေဲဖွဈတယျလို့ ဗိုလျမှူး ကွီး ခိုငျစိုးမွက ပွောပါတယျ။ AA ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ခိုငျသုခကတော့ ရခိုငျပွညျလှတျမွောကျရေးပါတီဝငျတှေ သတျဖွတျ ခံရတာဟာ AA အဖှဲ့နဲ့ သကျဆိုငျခွငျးမရှိအကွောငျး ငွငျးဆိုပါတယျ။AA အဖှဲ့နဲ့ ALP ကွား ပွဿနာဟာ အခုမှစတဲ့ ပွဿနာမဟုတျသလို တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ အဖှဲ့အစညျးတှကွေား သဘောထားမတူ ကှဲပွားလာတဲ့အခါ တဈခြို့ပွဿနာတှမှော အငျအားသုံး ဖွရှေငျးတာတှေ တှရေ့ပွီး ပွညျတှငျးစဈအတှငျး မှာ လကျနကျကိုငျအဖှဲ့တှကွေား တှရေ့တဲ့ ပွဿနာဖွဈတာကွောငျ့ သိပျထူးဆနျးတဲ့ ဖွဈရပျတော့ မဟုတျဘူးလို့ နိုငျငံရေးနဲ့ တိုငျးရငျးသားအရေး လလေ့ာသုံးသပျသူ ဦးမောငျမောငျစိုးက ပွောပါတယျ။ တောငျကုတျမွို့နယျလုံးဆိုငျရာ အမြိုးသားလုံခွုံ ရေးအဖှဲ့လို့ အမညျပေးထားတဲ့ အဖှဲ့က ဘယျသူတှနေဲ့ ဆကျနှယျသလညျးဆိုတာ ခနျ့မှနျးဖို့ မလှယျဘူးလို့ ရခိုငျပွညျနယျနဲ့ ပတျသကျတဲ့ နာမညျကြျော မွောကျဦးစဈတမျး စာအုပျကိုလညျး ရေးသားပွုစုထားတဲ့ ဦးမောငျမောငျစိုးက ပွောပါတယျ။
“ALP ကို ၁၉၆၇ ခုနှဈမှာ တညျထောငျခဲ့တာဖွဈပွီး ဦးသိနျးစိနျ အစိုးရလကျထကျ တနိုငျငံလုံးပဈခတျတိုကျခိုကျမှု ရပျစဲရေး သဘောတူစာခြုပျမှာ ပါဝငျလကျမှတျထိုးထားတဲ့အဖှဲ့ ဖွဈပါတယျ။ AA အဖှဲ့ကတော့ ၂၀ဝ၈ ခုနှဈမှာ ပျေါပေါကျလာတာဖွဈပွီး ပွီးခဲ့တဲ့နှဈနဲ့ ဒီနှဈမှာ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး အစိုးရတပျမတျောနဲ့ အဆကျမပွတျတိုကျခိုကျမှုတှေ ရှိနတေဲ့ အဖှဲ့ဖွဈပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/aa-alp-06032020200944.html
ရနျကုနျ – စဈတှေ ကားလမျးမပျေါ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့အဝငျ ကငျးခြောငျးတံတားထိပျသို့ လမျးလုံခွုံရေး ကငျးလှညျ့သညျ့ တပျမ တျော စဈကွောငျးတခု ရောကျရှိလာစဉျ ရီမုမိုငျး ၂ လုံး ပေါကျကှဲသဖွငျ့ တပျမတျောသားတခြို့ ကဆြုံးပွီး ဒဏျရာ ရရှိမြား လညျးရှိကွောငျး တပျမတျောမှ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက ပွောသညျ။ ယငျးပေါကျကှဲမှု ဖွဈစဉျ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့ ဘကျမှ စဈတှဘေကျသို့ ဆိုငျကယျ စီးနငျးလာသူ အရပျသား ၂ ဦးကိုလညျး ထိခိုကျမိပွီး ၁ ဦး သဆေုံးသှား ခဲ့သညျ။ ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက“တပျမတျောက ရနျကုနျ-စဈတှေ လမျးမကွီး လုံခွုံရေးအတှကျ ကငျးလှညျ့လညျဖို့ အတှကျ လမျးလြှောကျသှားနတော ဖွဈတယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာပဲ အရပျသား ၂ ဦးကလညျး ဆိုငျကယျနဲ့ ဖွတျမောငျးလာတယျ။ အဲဒီမှာ ဖွဈတာ”ဟု ရှငျးပွသညျ။
ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျတှငျ မိုငျးပေါကျကှဲသညျ့ ဖွဈစဉျမြားမှာ မွို့ပျေါတှငျ ဖွဈလနေ့ညျးပွီး နယျဘကျတှငျသာ ဖွဈပျေါလရှေိ့ ကွောငျး၊ ယခုအခါ မွို့အဝငျအထိ ရောကျရှိလာသဖွငျ့ ယခုလို မဖွဈပှားစခေငျြကွောငျး ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျ ပွညျနညျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးအောငျသနျးတငျက ပွောသညျ။“မိုငျးဖွဈစဉျကတော့မှနျတယျ။ အရပျသားတယောကျ ဒဏျရာ ရတယျ။ တယောကျက ဆုံးသှားပွီ။ တပျမတျောသားတှေ ကြ၊ မကတြော့ မသိဘူး။ ဒဏျရာရတဲ့ အရပျသား တယောကျကို တော့ စဈတှကေို ချေါသှားပွီ။ မိုငျးကတော့ ဘယျက ထောငျမှနျးလညျး မသိဘူး။ ဘယျက လုပျလိုကျမှနျး မသိဘူး”ဟု ဦးအောငျသနျးတငျက ပွောသညျ။
တပျမတျောကမူ ရက်ခိုငျ့ တပျမတျော (AA) အဖှဲ့၏ လကျခကျြဟု စှပျစှဲထားပွီး ယခုနောကျပိုငျးတှငျ ကွီးမားသညျ့ မိုငျးအမြိုး အစားမြားကို တငျဆငျ အသုံးပွုလာ၍ လူ၊ ယာဉျမြားကိုပါ ထိခိုကျပကျြစီးမှု ကွီးမားလာကွောငျး ပွောသညျ။“သူတို့ အရငျ ကတညျးက ရခိုငျဝနျကွီးခြုပျရဲ့ ယာဉျတနျးကို ရီမုနဲ့ တိုကျခိုကျဖူးပါတယျ။ အခု နောကျပိုငျးမှာ အိန်ဒိယ တပျမတျောက ဒီဘကျ ကို သတငျးပေးတဲ့အခါမှာ အိန်ဒိယ သတငျးစာတခြို့မှာလညျး ရေးခဲ့တာ ရှိတယျ။ AA အနနေဲ့ ရီမု နညျးပညာနဲ့ ပတျသကျပွီး တော့ကြ နညျးပညာမွငျ့တဲ့ဆီက အထောကျအပံ့ ရရှိထားတယျ”ဟု ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောမငျးထှနျး က ပွောသညျ။ယခု ဖွဈစဉျနှငျ့ ပတျသကျ၍ AA အဖှဲ့ထံမှ လှတျလပျသညျ့ သဘောထား ရရှိနိုငျခွငျး မရှိသေးပါ။ သို့သျော ယခငျ မိုငျးဖွဈစဉျ မြားတှငျ AA က ၎င်းငျးတို့အဖှဲ့၏ လကျခကျြဖွဈကွောငျး ဝနျခံပွောဆိုလေ့ ရှိသညျ။ မိုငျးအန်တရာယျ အသိပညာပေး လုပျငနျးအဖှဲ့ ၏ စာရငျးပွုစုခကျြမြားအရ ၂၀၁၉ ခုနှဈအတှငျး ရခိုငျပွညျနယျ မွောကျပိုငျးတှငျ မိုငျးနငျးမိသညျ့ အရပျသား ၅၈ ဦး ရှိပွီး ထိုအထဲမှ ၁၉ ဦးမှာ အသကျသဆေုံးခဲ့သညျ။ ၂၀၂၀ ခုနှဈထဲတှငျ မိုငျးနငျး မိသူ မညျမြှရှိကွောငျး မသိရှိရသေးပါ။ လကျရှိ အခြိနျအထိ အစိုးရနှငျ့ AA တို့ကွားတှငျလညျး ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ သဘောတူညီမှု တစုံတရာမရရှိသညျ့ အပွငျ AA ကို အစိုးရက အကွမျးဖကျအဖှဲ့အဖွဈ သတျမှတျလိုကျသဖွငျ့ ရခိုငျမွောကျပိုငျးတှငျ တိုကျပှဲမြား ပိုမိုပွငျးထနျလကျြရှိသလို အရပျသား သဆေုံး ထိခိုကျမှုမြားမှာလညျး နစေ့ဉျ ဆကျတိုကျ ဖွဈပှားနသေညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news /2020/06/03/223941.html
မွနျမာ့တပျမတျောနှငျ့ ကခငျြလှတျလပျရေးတပျမတျော KIA တို့၏ ကခငျြဒသေတဈကြော့ပွနျ တိုကျပှဲ ၉ နှဈပွညျ့ ဇှနျလ ၉ ရကျနတှေ့ငျ အထိမျးအမှတျကြောကျတိုငျမြားကို စဈရှောငျစခနျးမြားတှငျ စိုကျထူသှားမညျဟု သိရသညျ။ ‘ANHTE GALOI N MALAP NA GA AI’ (ကြှနိုပျတို့ ဘယျတော့မှ မမေ့ညျမဟုတျ) ဆိုသညျ့ စာတမျးထိုး ကြောကျတိုငျကို မွဈကွီးနားမွို့တှငျး တပျကုနျး (COC) စခနျး၊ ဂနျြမိုငျကောငျ (RC) နှငျ့ လယျကုနျး (ဗကျလငျ) စဈရှောငျစခနျး စသညျ့ ၃ နရောတှငျ စိုကျထူ မညျဖွဈသညျ။
“တကယျတမျးတော့ ဦးဆုံးရောကျတဲ့ စခနျးနဲ့ နောကျဆုံးရောကျတဲ့ စခနျးတှမှော အရငျစိုကျထူဖို့ စီစဉျထားတာ။ ဒါပမေယျ့ တဈခြို့စခနျးတှမှောက နရောအခကျအခဲရှိနတေယျ။ အဲကွောငျ့ ဒီ ၃ နရောတှငျမှာ သာပွုလုပျနိုငျသေးတာပေါ့။ အခုလိုလုပျ ဆောငျတာကလညျး ရှငျးရှငျးလေးဘဲ။ စဈရှောငျစခနျးပွုလုပျခဲ့တဲ့ နရောတှကေို ဘယျတော့မှမမဖေို့ အမွဲတမျးအမှတျရနဖေို့ ဖွဈတယျ။ ကနျြတဲ့စခနျးတှမှောလဲနောကျနောငျပွုလုပျသှားဖို့ရှိတယျ”ဟုကခငျြလူငယျခေါငျးဆောငျတဈဦး မဆှတျဆိုငျးထှယျ က ပွောသညျ။ နရောအခကျအခဲကွောငျ့ စဈရှောငျစခနျးတခြို့တှငျ ယခုနှဈကြောကျတိုငျ စိုကျထူနိုငျခွငျးမရှိခဲ့သျောလညျး လာမညျ့နှဈမြားတှငျ ဆကျလကျစိုကျထူသှားမညျဟု သိရသညျ။ ထို့အပွငျ စဈရှောငျမြား၏ ခံစားခကျြမြားနှငျ့ စဈရှောငျမြား၏ အခွအေနကေို ဆှေးနှေးမညျ့အစီစဉျကိုလညျး ကခငျြလူငယျမြားဦးဆောငျကာ ဇှနျလ ၆ ရကျနမှေ့ ၈ ရကျနအေ့ထိ အှနျလိုငျး မှတဆငျ့ ၃ ရကျသာ ထုတျလှငျ့သှားမညျဟု ပွောသညျ။
“လူငယျတှကေ စဈရှောငျ ၉ နှဈပွညျ့ အခမျးအနားကို ၃ ရကျပွုလုပျဖို့ စီစဉျထားတယျ။ အဲ့မှာက စဈရှောငျတှနေဲ့ ပတျသကျ ပွီး စကားဝိုငျးဆှေးနှေးမှုတှပွေုလုပျသှားမယျ။ အဓိကတော့ စဈရှောငျတှကေ သူတို့ရဲ့ ၉ နှဈတာဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ အတှေ့ အကွုံတှေ ပွောပွမယျ။ ပွီးရငျသူတို့ရဲ့ အနာဂတျနဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတှကေို ဆှေးနှေးမယျ” ဟု ပွောသညျ။ အဆိုပါ ၃ ရကျ စကားဝိုငျးတှငျ စဈရှောငျမြား၏ ၉ နှဈတာကွုံတှခေဲ့ရသညျ့ အခကျအခဲမြား၊ အနာဂတျမြှျောလငျ့ခကျြမြားနှငျ့ အစိုးရ၏ ပွနျလညျထူထောငျရေးနှငျ့ပတျသကျသော ဆောငျရှကျမှုမြားကို စကားဝိုငျးအဖွဈ ဆှေးနှေးသှားမညျဖွဈသညျဟု သိရသညျ။
အဆိုပါဆှေးနှေးမှုတှငျ ကခငျြပွညျနယျလူမှုရေးဝနျကွီး အပါအဝငျ Kachin Humanitarian Concern Committee KHCC တာဝနျရှိသူမြားနှငျ့ စဈရှောငျပွညျသူမြာက အဓိက ပါဝငျဆှေးနှေးသှားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ ကခငျြတဈကြော့ပွနျ တိုကျပှဲ ၉ နှဈပွညျ့သညျ့ ဇှနျလ ၉ ရကျနတှေ့ငျ ကခငျြအမြိုးသားအတိုငျပငျခံအဖှဲ့ WMR မှလညျး ဝတျပွုအစီစဉျမြားကို အှနျလိုငျးမှတဆငျ့ ထုတျလှငျ့သှားမညျဟု ပွောသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/06/03/%e1%80% 80%e1%80%81%e1%80%bb%e1
၈။ ကြောငျးအပျခြိနျ တိုငျးရငျးသားအမညျ ထညျ့သှငျးရေးအကွောငျးကွားစာ ပွညျနယျ ကရငျစာ/ ယဉျမှ လကျခံရရှိခွငျး မ ရှိသေး
ပညာရေးဝနျကွီးဌာန၊ အခွခေံပညာဦးစီးဌာနက ညှနျကွားထားသညျ့ ကြောငျးအပျခြိနျ၌ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးစုမြား၏ အမညျ မြားထညျ့သှငျးလကျခံပေးနိုငျရေး အကွောငျးကွားစာကို ကရငျပွညျနယျ စာပနှေငျ့ယဉျကြေးမှုတိုး တကျပွနျ့ပှားရေး အသငျး အနဖွေငျ့ လကျခံရရှိခွငျး မရှိသေးကွောငျး သိရသညျ။
ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ မှနျပွညျနယျရှိ ကရငျစာပနှေငျ့ယဉျကြေးမှုကျောမတီမြားထံသို့ အဆိုပါ အကွောငျးကွား စာမြား လကျခံရရှိပွီဖွဈသျောလညျး မိမိတို့အနဖွေငျ့ လကျခံရရှိခွငျးမရှိသေးကွောငျး ကရငျပွညျနယျ၊ စာ/ယဉျအသငျး အတှငျးရေး မှူး နနျးမွငျ့တငျက ယခုလိုပွောသညျ။ “ အကွောငျးကွားစာတှရေောကျလာတာတော့ တဈခုမှ မရှိပါဘူး။ တရားဝငျမှုအနနေဲ့ စာထုတျရငျ ပို တော့ကောငျးတာ ပေါ့နျော။ မှနျပွညျနယျဆို လဝကလညျးထုတျတယျ။ အောငျမွငျ့ခိုငျ(ကရငျရေးရာဝနျကွီး) လညျးထုတျတယျလေ။”ဟု ယနေ့(ဇှနျ ၃ ရကျ)တှငျ ကအေိုငျစီသို့ပွောသညျ။ အဆိုပါ တိုငျးရငျးသားအမညျ ကိစ်စကို ကရငျ ပွညျနယျအတှငျးရှိ ကရငျ၊ မှနျ၊ ပအိုဝျး၊ ရှမျး စသညျ့ စာ/ယဉျ ကျောမတီ အသငျးအဖှဲ့မြားထံသို့ တိုငျးရငျးသားရေးရာဝနျကွီး ဌာန၊ ကရငျပွညျနယျ ညှနျကွားရေးမှူးရုံးအနဖွေငျ့ အကွောငျးကွားစာမြား ပေးပို့ထုတျပွနျသှားမညျဖွဈကွောငျး ညှနျကွား ရေးမှူးရုံး တာဝနျရှိသူမြားက ကအေိုငျစီသို့ ယနတှေ့ငျပွောသညျ။
၂၀၂၀-၂၁ ပညာသငျနှဈမှစတငျ၍ အခွခေံပညာဦးစီးဌာနက ဧပွီလ ၁ ရကျနမှေ့စတငျကာ တိုငျးရငျးသား လူမြိုးစုမြား၏ အမညျရှတှေ့ငျ ၎င်းငျးတို့ကိုကိုယျစားပွုသညျ့ အမှတျသင်ျကတေ စကားလုံးမြား ထညျ့သှငျး လကျခံပေးနိုငျရေး ညှနျကွားထား မှုမြား ရှိခဲ့သညျဟုလညျး သိရသညျ။ အဆိုပါညှနျကွားမှုအတိုငျး ကရငျပွညျနယျ၊ ပညာရေးမှူးရုံးမှ ဧပွီလ ၂ ရကျနစှေဲ့ဖွငျ့
သကျဆိုငျရာ၊ ခရိုငျ၊ မွို့နယျပညာ ရေးမှူးရုံးအသီးသီးထံသို့ စာထုတျပေးပို့ခဲ့ပွီး ကြောငျးအဆငျ့အထိစာမြား ရောကျရှိနပွေီ ဖွဈကွောငျး ပွညျနယျပညာရေးမှူးရုံး ဒုတိယ ညှနျကွားရေးမှူး ဦးစိုးဝငျးက ပွောသညျ။ “ကြောငျးသှားအပျတဲ့အခါ မိဘ အုပျထိနျးသူတှအေနနေဲ့ ကရငျလူမြိုးဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ စောထညျ့ ပေးပါ၊ နနျး ထညျ့ပေးပါ။ နျော ထညျ့ပေးပါလို့ ပွောရ မယျပေါ့။ ဆရာမတှကေလညျး ကြောငျးသား လကျခံတဲ့အခါ မေးရမယျပေါ့။ အဲလို နှဈဦးနှဈဖကျ ပွောကွပါ။ ဒါက အရေးကွီး တာကိုး။ ဒီနှဈ ကတော့ တရားဝငျစာထုတျတော့ မှနျမှနျကနျကနျလေးဖွဈလာ တယျပေါ့။” ဟု ပွောသညျ။
ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီးအတှငျးရှိ ကရငျလူမြိုးမြားအနဖွေငျ့ မိမိတို့၏ကလေးမြားကို ကြောငျးအပျခြိနျတှငျ နာမညျအစ၌ ကရငျ အမညျမြားဖွဈသညျ့ (စော၊ စ၊ နနျ့၊ နျော) မြားထညျ့သှငျးရနျ ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး ကရငျစာနှငျ့ယဉျကြေးမှု ကျောမတီက မေ ၁၈ ရကျနတှေ့ငျ မွို့နယျစာယဉျ အသီးသီးသို့ စာထုတျတိုကျတှနျးခဲ့သညျ။ အလားတူ မှနျပွညျနယျအတှငျး နထေိုငျကွသညျ့ ကရငျတိုငျးရငျးသားမြားအနဖွေငျ့ လာမညျ့ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသငျနှဈ တှငျ စော၊ နနျး၊ နျော တို့ကို ထညျ့ သှငျး အပျနှံသှားကွရေး မှနျပွညျနယျ ကရငျတိုငျးရငျးသားလူမြိုးရေးရာဝနျကွီး စောအောငျမွငျ့ခိုငျက မလေ ၂၆ ရကျနေ့ ရကျစှဲဖွငျ့ ကရငျ စာ/ယဉျ ကျောမတီအပါအဝငျ သကျဆိုငျရာသို့ အကွောငျးကွား စာပေးပို့ကာ တိုကျတှနျးခဲ့သေးသညျ။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%84%e1%8
ရခိုငျပွညျနယျမွောကျပိုငျး မငျးပွားမွို့နယျတှငျ ရက်ခိုငျစဈတပျ (AA) ၏ ဖမျးဆီးမှုခံခဲ့ရပွီး ပွနျလှတျလာသညျ့နောကျ သဆေုံး သှားသညျ့ အမြိုးသမီး၏ ဖွဈစဉျကို လူ့အခှငျ့အရေးအဖှဲ့မြားထံ စာပို့ အကွောငျးကွားသှားမညျဟု ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးရှိ ခငျြးတက်ကသိုလျကြောငျးသား/သူမြားအဖှဲ့ (CUSR) က ပွောသညျ။
သဆေုံးသှားသညျ့ အမြိုးသမီးမှာ အသကျ ၄၈ နှဈအရှယျ ဒျေါစိနျမဦး ဖွဈပွီး မငျးပွားမွို့နယျ သိုငျးကပျြကြေးရှာမှ ခငျြး အမြိုးသမီးတဦး ဖွဈသညျ။ ၎င်းငျးသညျ မေ ၃ ရကျက အခွားအမြိုးသား ၃ ဦးနှငျ့ အတူ ဖမျးဆီးခံခဲ့ရပွီး ဇှနျ ၁ ရကျတှငျ ပွနျ လှတျပေးလိုကျသဖွငျ့ လှတျမွောကျလာခွငျး ဖွဈသညျ။ လှတျလာပွီးနောကျ စိတျကယောငျခွောကျခွား ဖွဈခွငျး၊ ကွောကျ လနျ့ ခွငျးမြား၊ အသကျရှုမဝခွငျးမြား ဖွဈနသေဖွငျ့ မငျးပွားမွို့နယျ ဆေးရုံသို့ မိသားစုဝငျမြားက ပို့ဆောငျပွီး ဇှနျ ၂ ရကျ မနကျပိုငျး၌ သဆေုံးသှားခွငျး ဖွဈသညျဟု သိရသညျ။ CUSR ၏ ဥက်ကဋ်ဌ ဆလိုငျးထှနျးလှကြျောက “အဓိက ကတော့ အခု ဖွဈနတော သူတယောကျတညျး မဟုတျဘူး။ ရခိုငျပွညျနယျမှာ တိုငျးရငျးသား လူမြိုးစုဖွဈတဲ့ ကနြျောတို့ ခငျြးတှေ လူ့အခှငျ့ အရေး ခြိုးဖောကျခံရတာ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ ပွနျလှတျလာတယျ၊ မပွောရဲဘူး။ တခြို့လုံးဝကို ပြောကျသှားတယျ။ ဒါကို ကနြျောတို့က ရခိုငျပွညျနယျထဲက ခငျြးတှေ လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျခံနရေပါတယျဆိုတာကို တငျပွမယျလို့ စီစဉျထားပါ တယျ” ဟု ပွောသညျ။
ခငျြးလူ့အခှငျ့အရေး အဖှဲ့သညျ ၁၉၉၅ ခုနှဈက စတငျဖှဲ့စညျးထားခွငျးဖွဈကာ အမရေိကနျနှငျ့ ကနဒေါတှငျ တရားဝငျ မှတျပုံ တငျထားပွီး အစိုးရ မဟုတျသညျ့ အဖှဲ့အစညျး ဖွဈသညျ။ မွနျမာနိုငျငံတှငျး ခငျြးလူမြိုးမြား၏ လူ့အခှငျ့အရေး အခွအေနေ မြားကို စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာခွငျး၊ မှတျတမျးပွုလုပျခွငျးမြားအပွငျ ဒသေတှငျး အခွအေနမြေားကိုလညျး နိုငျငံတကာ လူ့ အခှငျ့အရေး အဖှဲ့မြားသို့ ပေးပို့ကာ ခြိတျဆကျ ဆောငျရှကျနသေညျ့ အဖှဲ့ ဖွဈသညျ။
ဆလိုငျး ထှနျးလှကြျောက သဆေုံးသှားသညျ့ ဒျေါစိနျမဦးမှာလညျး အဖမျးမခံရခငျက ကနျြးမာရေး ကောငျးမှနျသူဖွဈပွီး ၁ လကွာ ဖမျးခံရပွီး ပွနျလှတျလာသညျ့အခြိနျတှငျ စိတျကယောငျခွောကျခွားဖွဈကာ ကွောကျလနျ့နသေဖွငျ့ ဖမျးခံရစဉျ ညှငျးပနျးနှိပျစကျခံခဲ့ရကွောငျး သံသယရှိပါသညျဟု ဆိုသညျ။
ဒျေါစိနျမဦးနှငျ့အတူ ပွနျလှတျလာသူမြားကလညျး AA နှငျ့ ပတျသကျသညျ့ အကွောငျးအရာမြားကို ဖွဆေိုရနျ ငွငျးဆိုပွီး ရှောငျတိမျးနကွေသညျဟု ဆလိုငျးထှနျးလှကြျောက ပွော သညျ။ ခငျြး လူ့အခှငျ့အရေးအဖှဲ့ (CHRO) မှ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဆလိုငျးလနျြက “ကနြျောတို့ မွနျမာနိုငျငံက တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု လုံးဝမရှိတော့ ဒီစနဈကွီးမှာ ပွောငျးလဲမှုမရှိသရှတေ့ော့ တရားမြှတမှု ရဖို့ကတော့ မလှယျပါဘူး။ ပထမဆုံး လိုအပျ တာကတော့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးရှိဖို့ လိုပါတယျ။ သူ့အတှကျ ဟိုအတှကျ Justice ကို တဦးတယောကျခငျြးစီ အတှကျ လုပျပေးနိုငျတာ မရှိပါဘူး”ဟု ပွောသညျ။ သို့သျော မွပွေငျမှ စုဆောငျးထားသညျ့ အခကျြအလကျမြား၊ လူ့အခှငျ့အရေး မှတျတမျးမြားက တခြိနျခြိနျတှငျ တရားမြှတမှု ရနိုငျရေးအတှကျ အသုံးဝငျလာမညျကို ယုံကွညျပါသညျဟု ဆလိုငျးလနျြက ဆိုသညျ။
တပျမတျောဘကျမှလညျး ပဋိပက်ခကာလအတှငျး ရခိုငျပွညျနယျမွောကျပိုငျးတှငျ အရပျသား ၂၀ဝ နှငျ့ အထကျကို ဖမျးဆီး စဈဆေးခွငျး၊ ရိုကျနှကျခွငျးမြား ပွုလုပျသဖွငျ့ လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျမှုမြား ကြူးလှနျကွောငျး ရခိုငျနိုငျငံရေး အသိုငျး အဝိုငျးတှငျ ဝဖေနျခံနရေသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/06/03/223950.html
KNU-ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး ထိနျးခြုပျနယျမွေ ညောငျလေးပငျခရိုငျ (တပျမဟာ ၃) ဆောထီး(ရှကေငျြ) မွို့နယျ ခလိနျ-ခြောငျးဝလမျးဆုံရှိ ဆောကျလုပျပွီးခါစ KNU ၏ Covid-19 ကာကှယျရေးဂိတျတဈခု ဇှနျလ ၂ ရကျနကေ့ ဖကျြဆီးခံ လိုကျရကွောငျး KNU ညောငျလေးပငျခရိုငျတာဝနျရှိသူမြားထံမှ သိရသညျ။
အဆိုပါ ရောဂါကွိုတငျကာကှယျတားဆီးရေးဂိတျကို Covid -19 ကာလ တောငျပျေါဒသေရှိ လူဝငျထှကျသှား လာမှုမြား စဈဆေးနိုငျရနျ ဒသေအတှငျးရှိ ရောဂါ ကာကှယျရေးကျောမတီမှ ဇှနျလ ၂ ရကျနေ့ မနကျပိုငျးတှငျ စတငျဆောကျလုပျခဲ့ပွီး နောကျ ညနပေိုငျးတှငျ ထိုသို့ဖကျြဆီးခံလိုကျရခွငျးဖွဈသညျဟု KNU ညောငျလေး ပငျခရိုငျ Covid -19 ရောဂါကာကှယျ ထိနျးခြုပျရေးကျောမတီ ဆကျသှယျရေးတာဝနျခံ ပဒိုစောကလယျမူထူးက ပွောသညျ။ “သူတို့က ဘယျလိုပွောလဲဆိုတော့ ညှနျကွားခကျြမရှိဘူးတဲ့။ ကနြျောတို့ကလညျး ရောဂါအတှကျ မဖွဈမနေ လုပျဖို့လိုတယျ ပွောတော့ ပထမတော့ ဈေးဆိုငျထဲ မှာသှားလုပျပါ။ အဲမှာသှားလုပျရငျ သူတို့ သှားကူနပေေး မယျပွောတယျ။ သူမြားဆိုငျထဲမှာ ကနြျောတို့က သှားလုပျလို့အဆငျ မပွဘေူးလေ။ ကနြျောတို့ဆောကျမှာက ဂိတျတဈလုံးဘဲ မနကျ ၁၁နာရီလောကျမှာ ဂိတျဆောကျပွီးတယျ။ ထမငျးပွနျစားတဲ့ အခြိနျ နလေ့ညျ ၂ နာရီ လောကျတော့ တပျမတျောဘကျက ကနြျောတို့ဂိတျကို လာဖကျြလိုကျတယျ” ဟု ကအေိုငျစီသို့ပွော သညျ။
အဆိုပါ KNU ဆောကျလကျစ Covid -19 ရောဂါကာကှယျရေးဂိတျကို အထကျက ညှနျကွားခကျြ မရရှိသညျ့ အကွောငျးပွ ခကျြဖွငျ့ ဒသေအတှငျးရှိ တပျမတျော ခမရ ၂၀ တပျရငျးမှ တပျရငျးမှူး ၁ ဦး အပါအဝငျအငျအား ၅ဦးမှ သှားရောကျဖကျြ လိုကျခွငျးလညျး ဖွဈသညျဟုလညျး KNU ညောငျလေးပငျခရိုငျတာဝနျရှိသူမြား၏ ပွောပွခကျြအရ သိရသညျ။ ထို့အပွငျ ၎င်းငျးဂိတျကို လကျရှိနရောမှ နောကျဆုတျပွီး ဆောကျလုပျပေးရနျ ဒသေတှငျးအခွစေိုကျသညျ့ တပျမတျောဘကျက ပွောဆိုမှု မြားရှိခဲ့သလို လတျတလောဖွဈပှားခဲ့သညျ့ အဆိုပါကိစ်စမြားနှငျ့ပတျသကျပွီး KNU ဗဟို နှငျ့ ကျောသူးလေ ကနျြးမာရေးနှငျ့ ကယျဆယျရေးဌာန – KDHW ထံသို့ တငျပွထားပွီးဖွဈသညျဟု လညျး ပဒို စောကလယျမူထူးက ဖွညျ့စှကျပွောသညျ။
KNU တပျမဟာ ၃ ညောငျလေးပငျခရိုငျတှငျ ဒသေတှငျးဝငျထှကျသှားလာမှုမြားကို စဈဆေးနိုငျရနျနှငျ့ Covid-19 ကာကှယျ ထိနျးခြုပျနိုငျရေးရညျရှယျကာ ယခုဖကျြဆီးခံလိုကျရသညျ့ဂိတျအပါအဝငျ ဂိတျပေါငျး ၁၄ ဂိတျဖှငျ့ လှဈထားရှိကွောငျးသိရပွီး ယခုဂိတျမှာ KNU ညောငျလေးပငျခရိုငျအတှငျး ပထမဦးဆုံး ဖကျြဆီးခံရသညျ ဂိတျဖွဈသညျဟု လညျးသိရသညျ။http://kicnews.org/2020/06/knu%e1%80%b1%e1%80%8a%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1
၁၁။ ၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲကို နိုဝငျဘာလအတှငျးကငျြးပမညျဖွဈပွီး COVID-19 ရောဂါကွောငျ့ မဲဆှယျစညျးရုံး မှုနှငျ့ ပတျသကျ၍ စညျးကမျးခကျြ အသဈမြား ရှိလာမညျဟု ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ အဖှဲ့ဝငျ ပွောကွား
၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲကို နိုဝငျဘာလအတှငျး ကငျြးပမညျဖွဈပွီး COVID-19 ရောဂါကွောငျ့ မဲဆှယျစညျးရုံးမှုနှငျ့ ပတျသကျ၍ လိုကျနာရမညျ့ စညျးကမျးခကျြအသဈမြား ရှိလာမညျဖွဈကွောငျး ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ဝငျ ဦးမွငျ့နိုငျက ပွောကွားသညျ။ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ ရုံးတှငျ ဇှနျ ၄ ရကျက ပွုလုပျသညျ့ သတငျးစာရှငျး လငျးပှဲ၌ သတငျးထောကျမြား၏မေးမွနျးမှုကို ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျအဖှဲ့ဝငျ ဦးမွငျ့နိုငျက အထကျပါကဲ့ သို့ ထညျ့ သှငျးပွောကွားခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
“ရှေးကောကျပှဲရကျကတော့ အရငျတုနျးက ပထမတုနျးက နှဈလနဲ့ ၂၄ ရကျ။ နောကျတဈခါမှာ လေးလကွိုကွညောတယျ။ အဲဒီအတိုငျးပဲမပွောငျးလဲပါဘူး။ နဂိုကငျြးပတဲ့အတိုငျး နိုဝငျဘာလထဲမှာပဲ ကြှနျတျောတို့ ဖွဈမှာပါ။ နိုဝငျဘာ ၇ ရကျနေ့ ကငျြးပတော့ လေးလအလိုအကွိုကွညောတာပေါ့။ နှဈ လ နဲ့ ၂၄ ရကျ အလိုကွညောတာရှိတာပေါ့။ ဘယျနသေ့ငျ့တျော သလဲ။ အမြားအတှကျ သငျ့တျောမယျ့။ ကောငျးမယျ့ရကျကိုယူပွီး ကွညောမှာပေါ့။ ပါတီအမြားအတှကျ စညျးရုံးနိုငျမယျ့ အားလုံးအတှကျ အဆငျပွမေယျ့ရကျ ကို ရှေးပွီး ကွညောမှာပါ။ ဒါဆိုခနျ့မှနျးလို့ရပါတယျ” ဟု ဦးမွငျ့နိုငျက ပွောကွားသညျ။
COVID-19 ရောဂါကွောငျ့ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးနှငျ့ မဲပေးသညျ့လုပျငနျးမြား အဆငျပွခြေောမှစေ့ရေေးအတှကျ ယခငျ ရှေး ကောကျ မြားကဲ့သို့ ဖှဲ့စညျးခဲ့သညျ့ အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့မတူဘဲ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာန အပါအဝငျ ဌာနအဖှဲ့ရှဈဖှဲ့ဖွငျ့ သီးသနျ့ ဖှဲ့စညျးသှားရနျရှိကွောငျးသိရသညျ။“မဲဆှယျတာနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ စညျးကမျးခကျြတှရှေိလာနိုငျသလားဆိုတော့ ရှိလာ နိုငျတာပေါ့။ အဲဒါကွောငျ့ ဘယျလို ကငျြးပမလဲ။ ဘယျလိုမဲဆှယျခှငျ့လုပျမလဲ။ COVID ကာလလညျး ရှိနတေယျဆိုတော့ ဒါကိုအဆငျပွခြေောမောအောငျ ရှဈဖှဲ့လောကျနဲ့ သပျသပျအဖှဲ့တဈဖှဲ့ဖှဲ့မယျ။ ဖှဲ့ပွီးတော့မှ ဘယျလိုအခွအေနဆေိုရငျ ဘယျလို ဘယျလို စညျးကမျးခကျြတှေ လိုကျနာမလဲ။ အဓိက တော့ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာန ရှိမှာပေါ့။ သူတို့ စညျးကမျးခကျြတှနေဲ့ ခမြှတျပွီးတော့ သကျဆိုငျရာနိုငျငံရေးမဲဆန်ဒရှငျတှေ အကုနျအသိပေးမှာပေါ့။ စညျးကမျးခကျြ အသဈတှေ ရှိလာနိုငျပါတယျ”ဟု ဦးမွငျ့နိုငျက ပွောကွားသညျ။
COVID-19 ရောဂါကွောငျ့ ပွညျပမှ ပွနျလညျဝငျရောကျလာသညျ့ မွနျမာနိုငျငံသားမြားအား မဲပေးခှငျ့ရှိ မရှိအပျေါ စိစဈ ဆောငျရှကျမှုမြား လုပျဆောငျနပွေီး မဲစာရငျးတှငျ အားလုံးပါဝငျရနျအတှကျ ဆောငျရှကျနကွေောငျး ဦးမွငျ့နိုငျက ပွောကွား သညျ။ https://news-eleven.com/article/176906
ကရငျပွညျနယျ ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျရှိ KNU- ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး ဝငျးရေးမွို့နယျအတှငျး စိုကျပြိုးထားသညျ့ ဘိနျးစာပငျမြားကို တပတျအတှငျး ခုတျထှငျရှငျးလငျးမှုမရှိပါက ကျောသူးလေ မူးယဈဥပဒဖွေငျ့ အရေးယူမညျဟု မလေ ၃၁ ရကျ နတှေ့ငျ ကရငျအမြိုးသားရဲတပျဖှဲ့က စာထုတျပွနျခဲ့သညျ။ ဘိနျးစာပငျစိုကျပြိုးခွငျးကို KNU အဖှဲ့အနဖွေငျ့ လုံးဝခှငျ့ပွု မညျမဟုတျဘဲ အရေးယူဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈပွီး ကြေးရှာအတှငျး စိုကျပြိုးထားမှုရှိခဲ့လြှငျလညျး ဇှနျလ ၇ ရကျနေ့ နောကျ ဆုံးထား၍ ဖကျြဆီးရမညျဟု KNFP ၏ ထုတျပွနျစာထဲတှငျ ဖျောပွထား သညျ။
KNPF ဝငျးရေးမွို့နယျ အမှတျ(၄) စခနျးမှူးစောငွိမျးခမျြးက “ မူးယဈဆေးပွားအစား ဘိနျးစာရှကျတှကေို အစားထိုးသုံးစှဲလာ ကွတယျ။ ဒသေအတှငျးမှာ ဆကျရှိနမေယျဆိုရငျ အနာဂတျလူငယျတှေ မူးယဈသားကောငျဖွဈသှားနိုငျတယျ။ တိုငျးပွညျ အရေးအရာ အမြိုးသားအရေးအရာတှမှော လုပျနိုငျတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ လူထုတှလေညျး ဝိုငျးဝနျးပူးပေါငျးတိုကျဖကျြကွဖို့ တိုကျ တှနျးခငျြတယျ” ဟု ဇှနျလ ၁ ရကျနကေ့ ကအေိုငျစီ သို့ပွောသညျ။
မလေ ၂ဝ ရကျနှငျ့ ၂၄ ရကျနတှေ့ငျ ဝငျးရေးမွို့နယျအတှငျး ဘိနျးစာပငျ ၆,၅ဝဝ ကြျောကို KNU နှငျ့ အစိုးရတို့ ပူးပေါငျးကာ မီးရှို့ဖကျြဆီးနိုငျခဲ့ကွပွီး စိုကျပြိုးသူမြားကိုလညျး ကျောသူးလေ မူးယဈအထူးအကျဥပဒအေရ အရေးယူမညျဖွဈသလို ကနျြရှိ မညျ့ အပငျမြားကိုလညျး ဖကျြဆီးမှုမပွုလုပျလြှငျ ဒသေတညျငွိမျရေးနှငျ့အမြိုးသားလုံခွုံရေးအကျဥပဒအေရ အရေးယူမညျဟု လညျး ကရငျအမြိုးသားရဲတပျဖှဲ့တာဝနျရှိသူမြားထံမှသိရသညျ။ “ဈေးကောငျးရတယျဆိုပွီးသူမြားစိုကျကွတော့ ရှာမှာလိုကျ စိုကျကွတယျ။ ဆိုးကြိုးတှေ ပွဈမှုပွဈဒဏျတှေ ဥပဒတှေေ သူတို့ နားမလညျကွဘူး။ ကိုကာကိုလာအခြိုရညျ၊ ခြောငျးဆိုး ပြောကျဆေးတှနေဲ့ ရောသောကျတယျ။ ကွာရငျစှဲတာပါပဲ။ ဘိနျးစာပငျ မရှိရငျကောငျးတယျ။ လူငယျတှေ အနာဂတျ မထိ ခိုကျဘူးပေါ့နျော”ဟု ဝငျးရေးမွို့နယျ ဒသေခံ စောထှနျ့ဖောငျက ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီး၊ ကရငျပွညျနယျ၊ မှနျပွညျနယျတို့တှငျ ဘိနျးစာပငျစိုကျပြိုးမှုအမြားဆုံးရှိပွီး စိတျကိုပွောငျးလဲစေ သော မူးယဈဆေးဝါးမြားဆိုငျရာ ဥပဒအေရ နိုငျငံတျောအစိုးရက ဥပဒအေရ တားမွဈထားလကျြရှိသညျ။ KNU အနဖွေငျ့ လညျး ၁/၂ဝ၁၄ ကျောသူးလေ မူးယဈဆေးဝါးမြား အထူးအကျဥပဒအေရ တားမွဈထားသညျဟု ကရငျအမြိုးသားရဲတပျဖှဲ့ တာဝနျရှိ သူမြားထံမှ သိရသညျ။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%94%e1% 80%b9%e1%80%b8%e1%8
ရခိုငျပွညျနယျမွောကျပိုငျး၊ မွပေုံမွို့နယျက ကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူး နှဈယောကျကို ရက်ခိုငျ့တပျတျော AA နဲ့ ပတျသကျမှု ရှိတယျဆိုပွီး အကွမျးဖကျမှုတိုကျဖကျြရေး ဥပဒေ နဲ့ အာဏာပိုငျတှကေ တရားစှဲဆို ဆိုထားပါတယျ။ မွပေုံမွို့နယျ အငူသဈ ကြေးရှာ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးမောငျဇျော၊ ရှာသဈကကြေေးရှာ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးကြျောမွငျ့တို့ကို တပျမတျောနဲ့ ရဲတပျဖှဲ့က မလေ ၃၀ ရကျနမှေ့ာ အစညျးအဝေးရှိတယျလို့ ချေါယူသှားရာကနေ ပွနျမလှတျပေးဘဲ အခုလို တရားစှဲခံရတာဖွဈတယျလို့ မိသားစုဝငျတှကေ ပွောပါတယျ။ ဒီအုပျခြုပျရေးမှူးနှဈယောကျကို AA အဖှဲ့နဲ့ ဆကျသှယျတယျဆိုတဲ့ သံသယနဲ့ အကွမျးဖကျ မှုတိုကျဖကျြရေး ဥပဒေ ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (ခ) စတဲ့ပုဒျမတှနေဲ့ အမှုဖှငျ့ထားတယျလို့ မွပေုံမွို့နယျ ပွညျသူ့လှတျတျော ကိုယျစား လှယျ ဦးဖသေနျးက RFA ကို ပွောပါတယျ။
သူတို့ကို မွပေုံမွို့မရဲစခနျးမှာ ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးထားပွီး မနတေု့နျးကတော့ ရဲက ဆကျပွီးဖမျးထားဖို့အတှကျ တရားရုံးခှငျ့ပွု ခကျြ ယူခဲ့ကွောငျး၊ နအေိမျတှကေိုလညျး ရဲနဲ့ စဈသားတှကေ ဝငျရောကျရှာဖှခေဲ့ကွောငျး မိသားစုဝငျတှကေ ပွောပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ ဖမျးတယျဆိုတာ မသိရသေးဘူးလို့ ရှာသဈကေ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးကြျောမွငျ့ဇနီး ဒျေါလှသိနျးကွညျက ပွောပါ တယျ။ ကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူး နှဈဦး ဖမျးဆီးထားတဲ့ကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး မွပေုံမွို့မရဲစခနျးမှူး ဒုရဲမှူး အောငျသနျးဇျောကို ဆကျသှယျမေးမွနျးတဲ့အခါ စခနျးမှူး အပွငျသှားတယျဆိုပွီး ဆကျသှယျလို့ မရခဲ့ပါဘူး။ မွပေုံမွို့နယျ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးဇာနညျကြျော ကိုလညျး RFA က ဖုနျးနဲ့ အကွိမျကွိမျ ဆကျသှယျမေးမွနျးပမေယျ့ လကျခံဖွကွေားမှု မရှိခဲ့ပါဘူး။ မွပေုံမွို့ နယျမှာ အရငျက တပျမတျောက တပျစှဲတာမရှိပမေယျ့ ပွီးခဲ့တဲ့ တဈလလောကျက စလို့ မွပေုံမွို့မရဲစခနျးမှာ တပျမတျောက စခနျးခပြွီး ရှာဖှစေဈဆေးတာတှေ လုပျနတေယျလို့ ဒသေခံတှကေ ပွောပါတယျ။ လကျရှိ အုပျခြုပျရေးမှူးနှဈဦးကို ဖမျးဆီး တရားစှဲဆိုတာကွောငျ့ အခွားအုပျခြုပျရေးမှူးတှဟောလညျး စိုးရိမျပွီး နုတျထှကျဖို့ ပွငျဆငျနသေူ တခြို့လညျး ရှိပါတယျ။ အမညျမဖျောလိုတဲ့ အုပျခြုပျရေးမှူး တဈဦးကတော့ ခုရကျပိုငျးအတှငျး နုတျထှကျစာတငျသှားမယျလို့ ပွောပါတယျ။
အုပျခြုပျရေးမှူးတှဆေိုတာ နှဈဘကျကွားမှာ ကွားညပျတတျတာကွောငျ့ အစိုးရနဲ့တပျမတျောအနနေဲ့ နားလညျပေးသငျ့တယျ လို့ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးဖသေနျးက ပွောပါတယျ။ တပျမတျောသတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့မှ ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောမငျးထှနျး ကတော့ လကျရှိတရားစှဲဆိုခံထားရတဲ့ ကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူးနှဈဦးကို စဈဆေးခကျြတှအေရ AA နဲ့ ပတျသကျမှု ရှိတယျဆိုတာကို တှရေ့တယျလို့ ပွောပါတယျ။ အကွမျးဖကျဥပဒပေုဒျမနဲ့ တရားစှဲဆိုတာကတော့ စဈဆေးတှေ့ ရှိခကျြအပျေါမှာ အစိုးရ ရှနေ့တှေကေ ဆုံးဖွတျတာဖွဈတယျလို့ RFA ကို ပွောဆိုပါတယျ။
AA ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ခိုငျသုခကတော့ ဒီအုပျခြုပျရေးမှူး နှဈဦးဟာ AA နဲ့ လုံးဝ ပတျသကျမှုမရှိဘူးလို့ RFA ကို ပွောပါ တယျ။ သူတို့ဟာ သာမနျဒသေခံပွညျသူတှသောဖွဈပွီး၊ အရငျက မွနျမာစဈတပျကနေ တောကျလြှောကျ အသုံးပွုလာတဲ့ ဒီရှာလူကွီးတှကေို အခုလို အကွမျးဖကျဥပဒပေုဒျမတှနေဲ့ တရားစှဲတာဟာ မဖွဈသငျ့တဲ့ ကိစ်စလို့လညျး ခိုငျသုခက ပွောပါ တယျ။ ရခိုငျပွညျနယျမှာ တပျမတျောနဲ့ AA တိုကျပှဲတှဖွေဈပွီး နောကျပိုငျး အုပျခြုပျရေးမှူးတှဟော ဖမျးဆီးခံရတာတှေ ရှိတာကွောငျ့ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈအတှငျး ကြောကျတျော၊ ရသတေ့ောငျ၊ မွောကျဦးနဲ့ မငျးပွားမွို့နယျတှမှော အုပျခြုပျရေးမှူး တာဝနျ တှကေနေ နုတျထှကျခှငျ့ပွုဖို့ စာတငျတာတှေ ရှိခဲ့ပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/myaypon-two-villa ge-administrators-being-sued-06032020085107.html
ကရငျပွညျနယျ မွဝတီမွို့ အမှတျ ၄ ရပျကှကျ မွနေီကုနျးရပျ အနောကျဘကျ မွဝတီသဈတောကွိုးဝိုငျး ကွိုးပွငျ ကာကှယျ တော အတှငျးရှိမွကေို ခွံကှကျမြားရိုကျ၍ ရောငျးခြ ရောငျးခနြသေူမြားအား စုံစမျးဖျောထုတျပွီး ဥပဒကွေောငျးအရ အရေး ယူသှားမညျဖွဈကွောငျး မွဝတီမွို့နယျသဈတောဦးစီးဌာနမှဦးစီးအရာရှိ ဦးကြျောမြိုးသူက ပွောသညျ။
မွဝတီသဈတောကွိုးဝိုငျး ကွိုးပွငျကာကှယျတောအတှငျးရှိ မွဧေက ၅၀ ခနျ့အား ခွံကှကျမြား ရိုကျ၍ ရောငျးခမြှုမြားရှိ ကွောငျး သတငျးအရ ဇှနျလ ၁ ရကျ နံနကျ ၁ဝ နာရီအခြိနျက မွဝတီမွို့နယျ သဈတောဦး စီးဌာနမှ တာဝနျ ရှိသူမြား၊ အမှတျ ၄ ရပျကှကျရှိ ဆယျအိမျမှူး ရာအိမျမှူးမြားနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားက ကှငျးဆငျးစဈဆေးမှုမြားပွု လုပျခဲ့စဉျ မွို့နယျ သဈတော ဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးကြျောမြိုးသူက ယခုလို ပွောသညျ။ “သဈတောပိုငျမွထေဲမှာ ခွံကှကျတှရေိုကျပွီး ရောငျးခနြေ ကွောငျးသိရလို့ ကနြျောတို့ မွို့နယျ သဈတောဦး စီးဌာနအနဖွေငျ့ လာရောကျကွညျ့ရှုစဈဆေးရာမှာ အမှနျတကယျပဲ ခွံကှကျတှရေိုကျထားတာကို တှရှေိ့ရပါတယျ။ ဒီခွံကှကျတှကေို ဘယျသူတှကေ ရိုကျပွီး တရားမဝငျအရောငျးအဝယျ လုပျနေ သလဲဆိုတာ စုံစမျးဖျောထုတျ ရပါ မယျ။ ယခုလို သဈတောပိုငျမွပေျေါမှာ ကြူးကြျောပွီး ခွံကှကျရိုကျတဲ့သူတှကေို သိရရငျ တော့ ၂ဝ၁၈ သဈ တော ဥပဒပေုဒျမ ၄ဝ နဲ့ မွဝတီမွို့မရဲစခနျးမှာ အမှုဖှငျ့အရေးယူသှားမှာဖွဈပါတယျ” ဟု ဦးကြျောမြိုးသူက ပွောသညျ။
မွဝတီမွို့နေ ပွညျသူတဈဦးက “မွဝတီမွို့မှာက ယခုလို သဈတောမွေ (သို့မဟုတျ)အစိုးရ စီမံခနျ့ခှဲခှငျ့ရ မွပေျေါမှာ တရား ဝငျခှငျ့ပွုခကျြဖွငျ့ မဟုတျဘဲ တရားမဝငျ ခွံကှကျရိုကျကာ မွအေရောငျးအဝယျမြား ပွုလုပျလကျြရှိနပေါတယျ။ ဒါတှေ ကို သကျဆိုငျရာဌာနမြားအနဖွေငျ့ အခြိနျမှီတားဆီးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ တရားမ ဝငျခွံကှကျရိုကျပွီး တရားဝငျသဖှယျ လိမျလညျ ရောငျးခနြသေူမြား၏ စကားကိုယုံ၍ ရှိစုမဲ့စုခြှေးနညျးစာမြားဖွငျ့ ဝယျယူခဲ့သူတှလေညျး မြားစှာရှိနပွေီး နောကျပိုငျး လူနအေိမျ တှဖွေဈလာမှ ထိုးဖွိုဖယျရှားမှုတှေ ပွုလုပျနခွေငျးဟာ ပွညျသူတှရေဲ့ အိုးအိမျစညျစိမျတှကေို မြားစှာထိခိုကျစသေလို အစိုးရဲ့ ပုံရိပျလညျး ကဆြငျးစတေယျ”ဟု ပွောသညျ။
၎င်းငျးအပွငျ မွဝတီမွို့ တိုးခြဲ့ ရပျကှကျ၆/၇ မွနေရော၌ ယခငျ ၂၀၁၅ ခုနှဈအစောပိုငျးကာလမြားက တရားမဝငျ မွကှေကျရိုကျ ရောငျးခသြူမြားထံမှ ပွညျသူမြားဝယျယူ၍ အိမျဆောကျနထေိုငျခဲ့ကွသညျ။ ယခုအခါ ထိုနရောအား အစိုးရစီမံခနျ့ခှဲခှငျ့ရ မွဟေုသတျမှတျပွီးနောကျ ၂၀၁၉ ခုနှဈမှစ၍ ယနေ့ ၂၀၂၀ခုနှဈ ဇှနျလ ၂ ရကျနထေိ့ တိုငျ အောငျနအေိမျမြားအား ဖယျရှား ရှငျးလငျးမှုမြားပွုလုပျနပွေီး မွကှေကျဝယျယူထားသော ပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ ဆုံးရှုံးမှုမြားစှာကွုံနရေကွောငျး ပွောဆိုကွ သညျ။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%9d%e1%80%90%e1%80%ae
၁၅။ နိုငျငံရေးအကြိုးအမွတျအတှကျ COVID-19 ကို လကျနကျအဖွဈအသုံးခဟြု ရှပွေ့ေးအသံအဖှဲ့ အစီရငျခံစာ ထုတျပွနျ
မွနျမာစဈတပျသညျ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျ(NLD) ပါတီဦးဆောငျသညျ့ အစိုးရ၏ ထောကျခံအားပေးမှု ဖွငျ့ နိုငျငံရေး အကြိုးအမွတျအတှကျ လကျရှိ ဖွဈပှားနသေညျ့ COVID-19 ကပျရောဂါကို လကျနကျသဖှယျ အသုံးခနြေ ကွောငျး အရှပွေ့ေးအသံ(Progressive Voice) အဖှဲ့က ယနေ့ ဇှနျလ ၂ ရကျနတှေ့ငျ အစီရငျခံစာ ထုတျပွနျပွော ဆိုလိုကျသညျ။ “နောကျကကြနျြခဲ့သော တိုငျးပွညျ- မွနျမာနိုငျငံမှ COVID-19 ကို လကျနကျအဖွဈအသုံးခခြွငျး ” အမညျဖွငျ့ ထုတျပွနျသညျ့ ၎င်းငျးအစီရငျခံစာတှငျ မွနျမာစဈတပျနှငျ့ အစိုးရတို့သညျ တိုငျးရငျးသားလူထုအသိုငျးအဝိုငျးမြား၊ လူ့အခှငျ့အရေး ကာကှယျ စောငျ့ရှောကျသူမြားနှငျ့ သတငျးမီဒီယာသမား မြားအပျေါ ဖိနှိပျမှုမြား တိုးမွှငျ့လုပျ ဆောငျရနျနှငျ့ နိုငျငံရေး အကြိုးအမွတျ အတှကျ ကပျရောဂါကို လကျနကျသဖှယျ အသုံးပွုနကွေောငျး ဖျောပွ ထားသညျ။
ရှပွေ့ေး အသံအဖှဲ့၏ အကွံပေး ဘုတျအဖှဲ့ ဥက်ကဋ်ဌ ခငျဥမ်မာက “အစိုးရရဲ့ “မညျသူမြှ ဖယျခနျြမထားရေး” ဆိုတဲ့ မူကို မွနျမာ စဈတပျက ပကျြရယျပွုလိုကျတာပဲဖွဈတယျ။ သူတို့က တိုငျးရငျးသား ဒသေတှမှော ရာနဲ့ခြီပွီး နှိပျစကျသတျဖွတျတာကို ခံနရေတဲ့ ရခိုငျပွညျနယျက လူထုတှအေပေး ဆကျလကျကြူးလှနျးနတေဲ့ စဈရာ ဇဝတျမှုနဲ့ လူသားမြိုးနှယျကို ဆနျ့ကငျြတဲ့ ရာဇဝတျမှုတှကေို ဖုံးကှယျဖို့အတှကျ COVID-19 ကို အကာအကှယျအနနေဲ့ သုံးနတေယျ”ဟု အစီရငျခံစာ၏ သတငျးထုတျ ပွနျခကျြ၌ ပွောဆိုထားသညျ။ အဆိုပါ အစီရငျခံစာသညျ သတငျးမီဒီယာမြား၏ သတငျးတငျပွမှုမြား၊ မတျလ ၂၃ ရကျနမှေ့ မလေ ၁၀ ရကျအထိ အစိုးရ၊ အရပျဖကျနှငျ့တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျ အဖှဲ့အစညျးမြား (EAOs) စသညျ့ အဖှဲ့အစညျးမြား ထုတျပွနျခကျြမြားအပျေါ အခွခေံ၍ ပွနျလညျဆနျးစဈသုံးသပျပွီး ကပျရောဂါ ကာလတှငျး လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျမှုမြား ဆကျလကျဖွဈပျေါနကွေောငျး မီးမောငျးထိုးပွသညျ့ အစီရငျခံစားဖွဈသညျဟု အဆိုပါ အဖှဲ့က ဆိုသညျ။
ထိုအစီရငျခံစာ၌ ကပျရောဂါ ကာလအတှငျး ရခိုငျနှငျ့ခငျြးပွညျနယျတို့တှငျ မွနျမာစဈတပျ၏ ထိုးစဈဆငျမှုမြား ပိုမိုလုပျဆောငျ လာခွငျးနှငျ့အတူ အစိုးရ၏ အငျတာနကျ ဖွတျတောကျမှုကို အခှငျ့ကောငျးယူ၍ အကွမျးဖကျ လုပျဆောငျမှုမြားကို တိုးမွှငျ့ လုပျဆောငျနခွေငျးကွောငျ့ ဒသေခံအရပျသားပွညျသူမြားမှာ ၎င်းငျးအကွမျးဖကျမှုကို အဓိက ခံစားနရေကွောငျး ဖျောပွထား သညျ။ ထို့အပွငျ COVID-19 ကပျရောဂါအပျေါ အစိုးရ နှငျ့ EAOs အဖှဲ့မြား၏ တုနျ့ပွနျဆောငျရှကျမှုအပျေါ သုံးသပျထား သလို မွနျမာစဈတပျမှ အပဈရပျလကျမှတျရေးထိုးထားသညျ့ ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး-KNU၊ သြှမျးပွညျ ပွနျလညျ ထူထောငျရေးကျောစီ -RCSS တို့လို အဖှဲ့အစညျးမြား၏ ကပျရောဂါ တုနျ့ပွနျတားဆီးဆောငျရှကျမှုအပျေါ မွနျမာ စဈတပျ၏ နှောငျ့ယှကျဟနျ့တားမှုမြားကိုပါ ဖျောပွထားပွီး တိုငျးရငျးသား ပွညျသူမြားအား ကပျရောဂါ ကူးစကျမှုဖွဈပှားမညျ့အပျေါ မွနျမာစဈတပျအနဖွေငျ့ ဂရုမစိုကျကွောငျးပွသနေ သညျဟု ဆနျးစဈဝဖေနျထားသညျ။
“NLD အစိုးရက ဗိုငျးရပျဈပွနျ့ပှားမှု ကာကှယျရေးအတှကျ EAO တှနေဲ့ လကျတှဲလုပျဆောငျဖို့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး ကျောမတီ တဈရပျ ဖှဲ့စညျးကွောငျး ထုတျပွနျကွညောခဲ့ပမေဲ့ လကျတှမှေ့ာ တိုငျးရငျးသားကနျြးမာရေး ဝနျဆောငျမှုတှကေ ဖယျကဉျြခံထားရပွီး တမငျသကျသကျ ဖကျြဆီးတာကို ခံနရေတယျ။ ဒသေခံ ကနျြးမာရေး ဝနျဆောငျမှု ပေးသူတှအေပျေါ ဘာကနျ့သတျခကျြမှ မထားဖို့နဲ့ သူတို့ဆီကို လူသားခငျြး စာနာထောကျထားတဲ့ အကူအညီတှေ တိုကျရိုကျရောကျရှိဖို့က အရမျးအရေးကွီးတယျ”ဟု ခငျဥမ်မာက အစီရငျခံစာ သတငျးထုတျပွနျခကျြ၌ ပွောဆိုထားသညျ။
ရှပွေ့ေး အသံ (Progressive Voice) သညျ မွနျမာနိုငျငံ လူ့အခှငျ့အရေး နှငျ့ ဒီမိုကရစေီအရေးအတှကျ စညျးရုံး လှုံ့ဆျောရေး လုပျဆောငျ နသေညျ့ အာရှ-ပစိဖိတျဒသေတှငျးမှ အဖှဲ့မြားဖွငျ့ ၂၀ဝ၆ ခုနှဈတှငျ ကှနျရကျအဖွဈ ခြိတျဆကျ ဖှဲ့စညျးခဲ့သညျ့ မွနျမာ့အရေး ပူးပေါငျးဆောငျရှကျသူမြားအဖှဲ့ (Burma Partnership) မှ အခွခေံ ပေါကျဖှားလာသညျ့ အဖှဲ့အစညျးဖွဈသညျ။ http:/ /kicnews.org/2020/06/%e1%82%8f%e1%80%af%e1%80%ad%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80
ကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး နာဂ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေ ဒုံဟီးမွို့နယျအတှငျးရှိ တောငျယာမြားတှငျ စိုကျပြိုးထားသော ပွောငျးခငျးမြား ပိုးကမြှုကွောငျ့ ပကျြစီးမှုရှိနပွေီး ဒသေခံမြားအနနှေငျ့ လာမညျ့နှဈ စားနပျရိက်ခာအတှကျ အခကျအခဲမြား ဖွဈလာနိုငျသညျဟု တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ဦးစိမျးမောငျ၏ ပွောကွားခကျြအရ သိရသညျ။“ပွောငျးက အထူးသဖွငျ့ ဒုံဟီးမွို့နယျအတှငျးမှာ တောငျယာအနနေဲ့ စိုကျပြိုးကွတာ မြားပါတယျ။ သူတို့က တောငျယာကို အလကြေ့ စိုကျပြိုးတဲ့စနဈနဲ့ စိုကျတယျ။ သူတို့ရဲ့ အဓိက အစားအစာကလညျး ပွောငျးပဲ။ ပွောငျးက အခွခေံအစားအစာ ဖွဈတယျ။ ပွောငျး၊ ဖှဲမီး၊ လူး၊ ဆပျ၊ ပီလောပီနံတို့ကို စိုကျပွီး အသကျမှေးကွတယျ။ ပွောငျးတှမှော ပိုးကတြော့ တောငျယာတှမှော ကြှနျတျောကိုယျတိုငျ ကှငျးဆငျးကွညျ့တယျ။ ကှငျးဆငျးကွညျ့တော့ အရှကျနုထှကျတော့ ရှကျနုက ကနျတော့ပုံရှိတယျ။ အဲဒီ ထဲက ဝငျပွီးတော့အညှနျ့တှပေါ စားတယျ။ ပိုးတှကေတော့ စိမျးနုရောငျလေးတှေ။ ပွောငျးပငျရဲ့ အဆဈရောကျရငျ ဆကျစား လို့ မရတော့ဘူး။ ဆကျမစားတော့ပမေယျ့ ပွောငျးပငျက သသှေားပွီ။ အခု အနအေထားက ပွောငျးပငျတဈပငျနဲ့ တဈပငျကူး စကျမှုက တကယျမွနျတယျ။ အဲဒီလိုဖွဈနတေော့ စိုကျပြိုးရေးပညာရှငျနဲ့ မေးကွညျ့တော့ ဒီပိုးက မြိုးဆကျသဈပိုးတှေ ဖွဈ တယျ။ မြိုးဟောငျးမဟုတျဘူး။ ဒီဟာကို ဘယျလိုသတျလို့ရသလဲ နညျးလမျးတှေ ရှာကွညျ့တယျ။ ကြှနျတျောတို့ကလညျး တဈပတျဆို တဈပတျအတှငျးမှာ မကယျနိုငျတော့ ကွာလာရငျ ပွောငျးပငျတှကေ ထှားမလာဘဲ သသှေားတယျ။ ဒီလိုပိုးကြ တာက ဒုံဟီးနယျတဈနယျလုံးက ပွောငျးစိုကျတာဆိုတော့ ဒုံဟီးမွို့နယျအတှငျးမှာ အကုနျဖွဈတယျ။ နနျးယှနျးဘကျက ပွောငျးက သိပျမစိုကျဘူး။ ပိုးလညျးမကဘြူး။ အခွခေံအစားအစာ မဟုတျဘူး။ အဓိက ဒုံဟီးနယျမှာ ဖွဈတယျ။ အဲဒီဘကျက တောငျယာအကုနျက ပွောငျးတှပေဲမြားတယျ” ဟု ဦးစိမျးမောငျက ပွောကွားသညျ။
နာဂ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေ ဒုံဟီးမွို့တှငျ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈအတှငျး မိုးရာသီ အစထေု့တျပွောငျးစိုကျဧက ၆၈၄ ဧက စိုကျပြိုးခဲ့ပွီး ငမွှောငျတောငျပိုး ကရြောကျသဖွငျ့ စိုကျဧက ၂၀ဝ ကြျော ထိခိုကျခဲ့သညျဟု နနျးယှနျးမွို့ စိုကျပြိုးရေးဦးစီးဌာန ၏ မှတျတမျးမြားအရ သိရသညျ။ ပိုးကရြောကျခဲ့သညျ့ ပွောငျးခငျးမြားသို့ စိုကျပြိုးရေးဌာနမှ ပိုးသတျဆေးမြားကို ဆေးဖနျြးပုံး မြားဖွငျ့ နှိမျနငျးပေးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
“ပွောငျးက သူတို့ နှဈစဉျပမျြးမြှ ဘယျလောကျရသလဲ။ ဒီနှဈ ဘယျလောကျထှကျသလဲ ဆိုတာကိုရမှ ရာခိုငျနှုနျးကို တှကျ ခကျြလို့ရမှာ။ ဒီအခြိနျမှာ စားနပျရိက်ခာ ဘယျလောကျ လိုအပျတယျမလိုအပျဘူးတော့ ပွောမရသေးဘူး။ ပွောငျးကတော့ သူတို့ အခွခေံ အစားအစာဆိုတော့ အခုလို အခွအေနမြေိုးဆိုရငျ သူတို့ရဲ့ စားနပျရိက်ခာ အခကျအခဲဖွဈမှာ သခြောပါတယျ။ အစားအစာပွတျလပျမှု ဖွဈနိုငျဖို့အတှကျ သခြောပါတယျ။ လာမယျ့နှဈမှာ စားနပျရိက်ခာထူထောငျရေးမှာ လြော့သှားမယျ။ ပကျြစီးသှားတဲ့ဟာကို စိုကျပြိုးရေးဌာနက ထောကျပံ့မှုပေးမယျဆိုရငျလညျး အလုပျမဖွဈဘူးဗြ။ အခုဟာက ပိုးကတြာကို ပိုးသတျဆေးဖနျြးလို့ ရသလောကျ ဖနျြးမယျ။ ဘယျလောကျကောငျးမလဲ ဘယျလောကျပကျြသလဲ သုံးသပျမယျ။ ခငျြ့ခြိနျပွီး အခြိုးကြ တှကျခကျြပွီး ဘယျနှလစာလောကျတော့ စားနပျရိက်ခာ ပွတျနိုငျတယျဆိုတာ တှကျခကျြပွီး အစိုးရကို တငျပွမယျ” ဟု ဦးစိမျးမောငျက ဆကျလကျပွောကွားသညျ။ https://news-eleven.com/article/176669
ကယားပွညျနယျအတှငျး စိုကျပြိုးထားတဲ့ ပွောငျးစိုကျခငျးတှမှော ငမွှောငျတောငျပိုးကရြောကျနပွေီး ဖကျြဆီးထားမှုကိုလညျး ပွောငျးစိုကျတောငျသူတှေ ရငျဆိုငျနရေပါတယျ။ ဒီမော့ဆိုမွို့နယျ သေးဆူလဲကြေးရှာအုပျစုမှာလညျး ပွောငျးစိုကျခငျးတှမှော ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈကစပွီး ငမွှောငျတောငျပိုး အမြားအပွားကရြောကျခဲ့ပွီး အထှကျနှုနျးကဆြငျး မှုနဲ့ရငျဆိုငျခဲ့ရသလို ဒီနှဈမှာလညျး စိုကျခငျးမှာ ပိုးကရြောကျမှုကို ဆကျလကျရငျဆိုငျနရေပါတယျ။ ပွောငျးစိုကျဧက ၅၀ဝ ကြျောမှာ ပိုးကနြတောကွောငျ့ ပိုး သတျဆေးကို ဖွနျးနရေသလို ပိုးသတျဆေးလညျး ဈေးမြားတာကွောငျ့ မတတျနိုငျဘူးလို့ သေးဆူလဲကြေးရှာမှ တောငျသူ ဖွဈတဲ့ ညားရယျကပွောပါတယျ။“တခြို့ခငျးတှတေောငျမှ ဆေးမနိုငျတော့ဘူး။ ဆေးနိုငျတဲ့တောငျသူတှကေတြော့ ဆေးနိုငျ တယျ သုံးလေးခေါကျဖွနျးရတာပေါ့နော။ အဲဒါကုနျကစြရိတျမြားသှားတယျ။ မတတျနိုငျတဲ့သူတှကေတြော့ အရှုံးခံတဲ့သဘော ပေါ့ အထှကျကတော့ တဈဝကျလောကျကတြယျ”လို့ သူက ပွောပါတယျ။ ပိုးကနြတေဲ့အပွငျ မိုးခေါငျတာကွောငျ့ သီးနှံကို နှဈခါပွနျစိုကျနရေတယျလို့ ၎င်းငျးက ဆကျပွောပါတယျ။
ပိုးမကမြှီနှဈတှကေ ပွောငျးတဈဧကမှာ ၂၅ ပိဿာဆနျ့တဲ့ အိတျ ၈၀ နဲ့ ၁၂၀ ကွားရရှိပွီး ပိုးကတြဲ့အခါမှာတော့ အိတျ ၈၀ အောကျသာ ထှကျရှိတော့တာကွောငျ့ ပွောငျးစိုကျတောငျသူတှေ အရှုံးပျေါနကွေတယျလို့ သိရပါတယျ။ တောငျသူတှကေို ပိုးကရြောကျမှုသကျသာအောငျ အသိပညာပေးမှုတှဆေောငျရှကျနပွေီး လကျရှိမှာလညျး COVID-19 ကွောငျ့ လူစုလူဝေး မလုပျရတာကွောငျ့ အသိပညာပေးမှုကို မလုပျရသေးဘူးလို့ ဒီမော့ဆိုမွို့နယျ စိုကျပြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ လကျထောကျဦးစီးမှူး ဒျေါရို့ဈထူးဒေးမွာက ဆိုပါတယျ။“ကူညီဆောငျရှကျပေးတာကတော့ တောငျသူပညာပေးတို့ ဘာတို့ရှိတာပေါ့နော။ ဒါပမေယျ့ အခု COVID ကွောငျ့ပေါ့နော အခု လူစုလူဝေးမလုပျရဘူးဆိုတော့ အခုတောငျသူပညာပေးတော့ မလုပျဖွဈသေး ဘူးပေါ့။ လုပျဖို့ကတော့ အစီအစဉျရှိပွီနော ရှိထားပွီးသား ဒါပမေယျ့ လူစုလူဝေးမလုပျရဘူးဆိုတော့လေ”လို့ ၎င်းငျးက ပွောပါတယျ။ ပိုးသတျဆေးကလညျး ဈေးမြားတာကွောငျ့ ငှကွေေးမတတျနိုငျတဲ့တောငျသူတှအေနနေဲ့ ပိုးကမြှုသကျသာ အောငျ သဘာဝနညျးလမျး ပိုးသတျဆေးကို အသိပညာပေးနတေယျလို့ ဒျေါရိုဈ့ထူးဒေးမွာက ပွောပါတယျ။“အရငျနှဈက သေးဆူ လဲအုပျစု ကုနျးသာကြေးရှာမှာလုပျတာပေါ့နော သူတို့ကို ဘယျလိုနညျးစနဈပေးလဲဆိုရငျ ဂငျြးရယျ ကွကျသှနျရယျ ငရုပျသီးရယျ အဲဒါကိုဖြျောစပျပွီးတော့မှ ရနေဲ့လေးဆတဈဆ အဲလိုဖြျောပွီးမှ ဖွနျးခိုငျးတယျ သူ့ကိုထိထိမိမိဖွနျးခိုငျးတယျ။ ပိုးကို အမွတျပွတျအောငျတော့မဟုတျဘူး သူတို့ကိုခွကြေိုးလကျကြိုးဖွဈသှားအောငျ အဲလိုပဲလုပျရတာပေါ့။”လို့ ဒျေါရိုဈ့ထူး ဒေးမွာ က ဆကျပွောပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှဈကတညျးက ဖယျခုံမွို့နယျအတှငျးက ပွောငျးစိုကျခငျးတှမှော ငမွှောငျတောငျပိုးကရြောကျခဲ့ပွီး စိုကျခငျး အမြားအပွားကို မီးရှို့ဖကျြဆီးခဲ့ရသလို လကျရှိ ကယားပွညျနယျမှာလညျး ငမွှောငျတောငျပိုးကရြောကျ ဖကျြဆီးမှုကို ခံနရေ တယျလို့ တောငျသူတှကေ ပွောကွပါတယျ။ ငမွှောငျတောငျပိုးကတြာက တဈပွညျနယျလုံးဖွဈနပွေီး ပွောငျးနဲ့ အခွားသီးနှံ တှဖွေဈတဲ့ စပါး၊ မွပေဲ၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျအပါအဝငျ သီးနှံအမြိုးပေါငျး (၈၀)ကြျောကို စားသောကျဖကျြဆီးနိုငျတဲ့အပွငျ တဈ ညအတှငျးကီလိုမီတာ(၁၀ဝ)အထိ ပြံသနျးနိုငျစှမျးရှိတဲ့ဖကျြပိုးဖွဈပါတယျ။ https://www.bnionline.net/mm/news73200
သြှမျးပွညျ အရှပေို့ငျး ကြိုငျးတုံမွို့နယျ တုံတာမွို့ အနီးရှိ ခြောကျထဲသို့ မဟာဓာတျအားလိုငျးသှယျတနျးသညျ့ အလုပျသမား ၃၀ ဦး စီးလာသညျ့ ဒိုငျးနာကားသညျ ခြောကျထဲသို့ကကြာ ၂ ဦးသဆေုံသှားကွောငျး ရှိသညျ။ မနကျ ၁၁ နာရီခှဲတှငျ မဟာ ဓာတျ အားလိုငျး သှယျတနျးသညျ့ လုပျသား ၃၀ စီးလာသညျ့ ဒိုငျနာကားသညျ တုံတာမွို့အဝငျ ပေ ၅၀ ရှိသညျ့ ခြောကျထဲ သို့ ကကြာ ၂ ဦးသဆေုံးပွီး၊ လကျရှိ ဒဏျရာ ပွငျးထနျသညျ့ သူ ၈ ဦးကို ကြိုငျးတုံ ဆေးရုံသို့ ပို့ ဆောငျထားကွောငျး လူမှုကူ ညီရေးအသငျးမှ တာဝနျရှိသူ တဦးက ပွောသညျ။
“ ဒဏျရာ ပွငျးထနျတဲ့ သူ ၁၀ ဦးကိုတော့ ကြိုငျးတုံ ဆေးရုံပို့လိုကျတယျ။ အဲ့ထဲမှာ ၂ ဦးဆုံးသှားတယျ။ ကနျြတဲ့ သူတှေ ကတော့ အနညျးငယျပဲထိတယျ။ မိုငျးပဉျြး ဆေးရုံမှာ တကျနတေယျ”ဟု ၎င်းငျး ကပွောသညျ။ အဆိုပါ ကား ခြောကျထဲကရြ ခွငျးသညျ ကားဘရိတျပေါကျမှုကွောငျ့ ဖွဈသှားသညျဟုလညျး စုံစမျးသိရသညျ။ ထိုကား ခြောကျထဲသို့ ကသြှားသူမြားကို တုံတာ လူမှုကူညီရေး အသငျး နှငျ့ တပျမတျောတို့က သှားရောကျ ကယျထုတျခဲ့ကွောငျးသိ ရသညျ။
လှနျခဲ့သညျ့ မေ ၁၂ ရကျ တှငျလညျး မိုငျးပဉျြးမွို့နယျအတှငျး ခရီးသညျယာဉျ အသေးတစီးသညျ ခြောကျထဲကကြာ ခရီး သညျ ၅ ဦး သဆေုံးခဲ့သညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/16951
ရခိုငျပွညျနယျ သံတှဲခရိုငျ တောငျကုတျမွို့နယျ ပနျးတငျ (ငမောကျခြောငျး) တိုကျနယျဆေးရုံတှငျ လတျတလော၌ တာဝနျ ကြ ကနျြးမာရေးဝနျထမျး တဈယောကျမှမရှိနဘေဲ ပိတျထားရသညျ့အတှကျ ကနျြးမာရေးနှငျ့ပတျသကျပွီး စိုးရိမျကွောငျး ဒသေခံမြားက ပွောကွားသညျ။ ထိုသို့ ပိတျထားရခွငျးအကွောငျးအရငျးမှာ တာဝနျခံဆရာဝနျမှာ အထူးကုတကျရောကျရနျ ထှကျခှာသှားခဲ့ရပွီး ကနျြရှိသညျ့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးမြားဖွငျ့ ဒသေနပွေညျသူမြားအား ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှု ဆောငျ ရှကျနစေဉျ သားဖှားဆရာမနှဈဦးမှာလညျး ကြောကျဖွူမွို့နယျသို့ ပွောငျးရှသှေ့ားခဲ့ကွောငျးနှငျ့ (၃၀. ၅. ၂၀၂၀) ရကျတှငျ ကနျြရှိသညျ့ အထကျတနျးသူနာပွုနှဈဦးစလုံးကို မွို့နယျဆရာဝနျက လိုအပျခကျြအရဟုဆိုကာ ချေါယူသှားခဲ့ခွငျးကွောငျ့ ဖွဈသညျဟု အဆိုပါ တိုကျနယျဆေးရုံ၏ ဒသေခံ ကနျြးမာရေးအထောကျအကူပွု ကျောမတီ ဥက်ကဋ်ဌထံမှ သိရသညျ။
ဒသေခံ ကနျြးမာရေး အထောကျအကူပွု ကျောမတီဥက်ကဋ်ဌ ဦးခဈြကြျောက “ကြှနျတျောက ဆေးရုံရဲ့လိုအပျခကျြတှကေိုလညျး ထဲထဲဝငျဝငျ ကူညီဖွညျ့စှကျထားတဲ့အတှကျ ဝနျထမျးကိစ်စတှကေလှဲရငျ တခွားကိစ်စတခြို့ကို သိနတေယျ။ ကြှနျတျောတို့ ဘကျက ဆေးရုံမှာ လိုအပျတဲ့ပစ်စညျးတှေ ကူညီထောကျပံ့မှုတှလေညျးအမြားကွီး လုပျထားတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခုက ဝနျထမျး တှကေို တဈယောကျပွီးတဈယောကျ ပွောငျးတာတှလေုပျတော့ ပိတျထားရတဲ့အဆငျ့ ရှိပါတယျ။ ကနျြးမာရေးဝနျထမျး တဈ ယောကျမှမရှိတဲ့အတှကျ တိုကျနယျဆေးရုံကို ပိတျထားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သကျဆိုငျသူတှကေို ပွောခငျြတာကတော့ ပွနျ လညျဖှငျ့ပေးဖို့ တောငျးဆိုခငျြတယျ။ ဒသေခံတှရေဲ့ ကနျြးမာရေးအတှကျ ကြှနျတျောတို့ စိုးရိမျမိပါတယျ။ တဈခုခုဖွဈရငျ မွို့ပျေါကိုသှားဖို့က ရမေိုငျ ၁၃ မိုငျကြောကျလောကျကို စကျလှနေဲ့သှားရတဲ့ ခရီးမို့လိုပါ။ ပွနျလညျဖှငျ့ပေးစခေငျြပါတယျ” ဟု ပွောကွားသညျ။
အဆိုပါကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျပွီး ရခိုငျပွညျနယျ ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာနမှ ပွညျနယျမှူး ဒေါကျတာစိုငျးဝငျးဇျောလှိုငျက “ဆေးရုံမှာ လူမရှိတာတော့ မဟုတျဘူး။ လူနညျးနတော၊ သတျမှတျထားတဲ့ ဝနျထမျးနညျးနတော။ အခုက တောငျကုတျမှာ COVID Positive တဈယောကျတှထေ့ားလို့ ကနျြးမာရေးနဲ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနက တရားဝငျခှငျ့ပွုထားလို့ လိုအပျတဲ့လူအငျအား ကို ကြှနျတျောတို့ကထညျ့ပွီး အလှညျ့ကသြုံးနတော။ ဆေးရုံပိတျထားတာ မဟုတျဘူး။ သူနာပွုရော ဆရာဝနျရော လိုအပျတဲ့ အငျအားထကျ နညျးနတေယျ။ ဆေးရုံပိတျထားတာ မဟုတျဘူး၊ ခွံတံခါးပိတျထားတာက လူနာမရှိလို့ ပိတျထားတာ။ အဲဒီ ဆေးရုံမှာက ဆရာဝနျမရှိတာ ကွာနပွေီ၊ ပွနျဖွညျ့လို့ မရသေးဘူး။ ရခိုငျတဈပွညျနယျလုံးမှာ ဆရာဝနျတှေ အမြားကွီးက လဈလပျနတော” ဟု ပွောကွားသညျ။
အဆိုပါ တိုကျနယျဆေးရုံအား ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာန၏ (၂၈. ၃. ၂၀၁၅) ရကျစှဲပါ စာအမှတျ ကမဘ/ဃ ၁၃၇၂/၄၆ ဖွငျ့ ဖှငျ့လှဈခှငျ့ပွုခဲ့ပွီး (၂၃. ၃. ၂၀၁၆) ရကျတှငျ အဆောကျအအုံမြား ဆောကျလုပျပွီးစီးကာ (၂၅. ၅. ၂၀၁၉) ရကျတှငျ တာဝနျခံ ဆရာဝနျတဈဦး၊ အထကျတနျး သူနာပွုနှဈဦး၊ သားဖှားဆရာမနှဈဦးနှငျ့ အထှထှေလေုပျသား လေးဦး၊ စုစုပေါငျးကိုးဦး ခနျ့ထားပေးပွီး ဆေးရုံလုပျငနျးနှငျ့ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှု စတငျလညျပတျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ https://ne ws-eleven.com/article/176672
သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး ခိုလမျမွို့နယျအတှငျး ကြှနျးသဈ တငျဆောငျသညျ့ မျောတျောယာဉျ (၁၃) စီး ဖမျးဆီးမိရာ၊ တရားခံ တဦးသာ ဖမျးဆီးရမိကွောငျး စုံစမျးသိရသညျ။
လှိုငျလငျမွို့နယျ ခိုလမျမွို့နယျအတှငျး ခိုလမျ- ကှနျဟိနျး ပွညျထောငျစုလမျးမကွီးပျေါတှငျ ဇှနျ ၁ရကျ နလေ့ညျ ၁၁ နာရီ ၌ ရပျတနျ့ထားသညျ့ စူပါကာစတနျ အမြိုးအစား ယာဉျငယျ ၁၃ စီးကို စဈဆေးရာ ကြှနျးခှဲသားပေါငျး (၈၃၇)ခြောငျး (၁၅)တနျ ကို ဖမျးဆီးရမိခဲ့သျောလညျး ထိုထဲတှငျ ကားသမား တဦးသာ ဖမျးဆီးရမိပွီး ကနျြ ၁၂ ဦး မှာ ထှကျပွေးလှတျမွောကျ နေ ကွောငျး လှိုငျလငျမွို့နယျ သဈတော ဦးစီးအရာရှိ ဦးပွညျ့ဟိနျး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကို ပွောသညျ။“ယာဉျ ၁၃ စီးမှာ တဈစီးက တရားခံ မိတယျ။ ၁၂ စီးက ပိုငျရှငျ မတှရှေိ့ရပဲ ဖမျးဆီး ရမိတယျ” ဟု လှိုငျလငျမွို့နယျ သဈတော ဦးစီးအရာရှိ ဦးပွညျ့ဟိနျး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကိုပွောသညျ။
တရားခံကို ဆကျလကျရှာဖှနေပွေီး၊ လကျရှိ ဖမျးဆီးရမိသူကို ခိုလမျရဲစခနျးတှငျ သဈတော ဥပဒေ ပုဒျမ (၄၃) (က) နှငျ့ အမှုဖှငျ့ထားကွောငျး ဦးပွညျ့ဟိနျး က ဆိုသညျ။ ထိုနညျးတူ သြှမျးပွညျ တောငျပိုငျး ကြိုငျးတောငျးမွို့နယျတှငျ ဇှနျ ၂ ရကျ မနကျ ၁၁ နာရီ ၌ တရားမဝငျ ပိတောကျသဈခှဲသားဆိုဒျစုံ ၁၀တနျ နှငျ့ ကြှနျးသဈခှဲသားဆိုဒျ စုံ ၂၀ တနျ နှငျ့ အတူ လိုငျစငျမဲ့ ယာဉျ ၅ စီး ကို သိမျးဆညျးရမိကွောငျးသိရသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/16923
၂၁။ မခေမွဈပျေါကရကောတာ ၆ ခု၏အခကျြအလကျမသိရသဖွငျ့ ဧရာဝတီမွဈရအေတကျအကခြနျ့မှနျးရနျခကျခဲနဟေုဆို
မခေ မွဈပျေါရှိ ရကောတာ ၆ ခု၏ ရစေီးဆငျးမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ အခကျြလကျမရရှိသေးသရှေ့ ဧရာဝတီမွဈရအေတကျ အကအြခွအေနကေို ကွိုတငျခနျ့မှနျးရနျခကျခဲနသေညျဟု သိရသညျ။
မလိခအထကျပိုငျး ရကောတာ ၂ ခု၏ ရစေီးဆငျးမှုအခကျြအလကျကို လှယျကူစှာရရှိနိုငျသျောလညျး မခေမွဈပျေါရှိ ရေ ကာတာ ၆ ခု ၏ ရစေီးဆငျးမှုအခကျြအလကျကိုရရှိရနျ မဖွဈနိုငျသညျ့အတှကျ ဧရာဝတီမွဈရအေတကျကြ ကွိုခနျ့မှနျးရနျ အခကျခဲရှိနကွေောငျး ကခငျြပွညျနယျမိုးလဝေသနဲ့ ဇလဗသေဦးစီးအရာရှိ ဦးနိုငျလငျးထှေး က ပွောသညျ။ “အဓိကသညျ မွဈကွီးနား အတှကျဆိုရငျ မွဈနှဈသှယျဖွဈတဲ့ အပျေါက မခေနဲ့ မလိခပေါငျးပွီးမှ Focus လုပျရတာ ဖွဈတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကနြျောတို့ မခေဘကျက Information မရှိဘူး။ အခကျြလကျရယူဖို့တှကျ အားနညျးတယျ။ အပျေါမှာရှိနတေဲ့ တရုတျက လုပျထားတဲ့ရကောတာ ၆ ခုက ကနြျောတို့ ပိုငျတာမဟုတျတဲ့အတှကျ အဲဒီကနရေလှေတျခွငျး မလှတျခွငျးကို မသိနိုငျတဲ့ တှကျ မခေမွဈပျေါကဆငျးလာတဲ့ရကေို ကနြျောတို့ကမသိနိုငျဘူး။ အဲကွောငျ့ အဲကနဆေငျးလာတဲ့ ရအေခွနေပေျေါမှာဘဲ မူတညျပွီးတော့ အခကျြလကျတှေ ထုတျပွနျနိုငျပါသေးတယျ။” ဟု ပွောသညျ။
လကျရှိ မလိခမွဈပျေါတှငျ မခမျြးဘောရအေားလြှပျစဈနှငျ့ဆှမျပရာဘှမျရအေားလြှပျစဈ ၂ ခုရှိနပွေီး မခေမွဈပျေါတှငျမူ ခြီဖှေ ငယျရကောတာအပါအဝငျ တရုတျနိုငျငံဘကျခွမျးမှ ရကောတာ ၆ ခု ရှိကွောငျး ၎င်းငျးကဆကျပွောသညျ။ “ဥပမာ ခြီဖှငေယျ ရကောတာဆိုလို့ရှိရငျ ဘယျခြိနျမှာရကောတာဆေးမယျ၊ ဘယျခြိနျမှာတော့ရလှေတျမယျဘယျနထေိ့တော့ ရကောတာဆေး မယျ၊ ရကေိုဘယျခြိနျမှလှတျမယျ၊ အဲလိုအခကျြလကျတှထေုတျပွနျပေးရငျတော့ကနြျောတို့က ကွိုတငျပွငျဆငျလို့ရမယျ။ ဒါဆိုရငျတော့ရဘေယျလောကျတကျလာနိုငျတယျ၊ ရုတျတရကျတကျလာတာမြိုးဆိုရငျ ဒီ Dam ကွောငျ့ ဖွဈတယျဆိုပွီး ကနြျောတို့ကတဈခါတညျးတနျးတှကျလို့ရတယျ။” ဟု ကခငျြပွညျနယျမိုးလဝေသနဲ့ဇလဗသေဦးစီးအရာရှိ ဦးနိုငျလငျးထှေးက ပွောသညျ။
သမိုငျးတဈလြှောကျ ကခငျြပွညျနယျ ဧရာဝတီမွဈရေ၏ စိုးရိမျရအေမှတျသညျ ၁၉၇၉ ခုနှဈတှငျ (၁၄၁၄) ၊ ၂၀ဝ၄ ခုနှဈတှငျ (၁၄၀၈) နှငျ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈတှငျ (၁၂၂၉) အထိရှိခဲ့သညျ။
မိုးလဝေသနဲ့ပတျသကျသညျ့ သတငျးအခကျြလကျမြားအား စောလြှငျစှာပွညျသူမြားထံ သတငျးပေးပို့နိုငျရနျတှကျလညျး သကျဆိုငျရာမွို့နယျအတှငျးရှိ ကြေးရှာ၊ ရပျကှကျမှူးမြား၏ ဖုနျးနံပါတျမြား တောငျးဆိုထားပွီး သတငျးခကျြလကျမွနျဆနျစှာ ပေးပို့ နိုငျရနျ Viber Group ဖှဲ့ထားမညျ့အစီစဉျ စတငျဆောငျရှကျနပွေီဖွဈကွောငျး ၎င်းငျးကဆကျပွောသညျ။ မိုးလဝေသနှငျ့ သကျဆိုငျသညျ့သတငျးမြားကို နစေ့ဉျမနကျ ၇နာရီ နလေ့ညျ ၂နာရီ ည ၇နာရီ ပုံမှနျထုတျပွနျပေးနကွေောငျး ၎င်းငျးက ဆကျပွောသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/06/02/%e1%80%99%e1%80%b1%e1%80%81% e1%80%99%e1
COVID-19 လူနာသဈ Case-231 သညျ မူဆယျမွို့နယျ မုံးပျေါတိုကျနယျကနျြးမာရေးဌာနမှ အသကျ ၃၀ နှဈအရှယျ အမြိုးသမီး ကနျြးမာရေးမှူးဖွဈပွီး မူဆယျဆေးရုံကွီးတှငျ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးမြားကို COVID -19 ပိုးရှိ မရှိစဈဆေးရာမှ ပိုးတှခွေ့ငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာန၏ ဇှနျ ၂ ရကျ ညပိုငျးထုတျပွနျခကျြအရ Case-231 လူနာသညျ COVID-19 အတညျပွုလူနာနှငျ့ ထိတှမှေု့မရှိ၊ ပွညျပသို့ ခရီးသှားရာဇဝငျမရှိနှငျ့ အသှားအလာ ကနျ့သတျခံထားရခွငျး မရှိသူဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ Case-231 သညျ မူဆယျဆေးရုံသို့ လပတျအစညျးအဝေးနှငျ့ လစာထုတျရကျမြားသာ လာရောကျ တကျသူဖွဈကာ မူဆယျပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးတှငျ ကနျြးမာရေး ဝနျထမျးမြားအား COVID-19 ရောဂါပိုးစဈဆေးရနျ မေ ၂၉ က ဓါတျခှဲနမူနာမြား ရယူခဲ့ပွီး ဓါတျခှဲအဖွအေရ ပိုးတှရှေိ့ခဲ့သူဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ လကျရှိတှငျ Case-231 နှငျ့ ၎င်းငျး၏ ခငျပှနျးအား မူဆယျခရိုငျ ပွညျသူ့ဆေးရုံသဈကွီးသို့ ပို့ဆောငျကာ ဆေးဝါးကုသ ပေးလကျြရှိကွောငျး သိရသညျ။
ပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ ကနျြးမာရေးဌာနမှ ထုတျပွနျခကျြမြားကို အဓိကလိုကျနာနထေိုငျရနျလိုအပျကွောငျး ရှမျးပွညျနယျ (မွောကျပိုငျး) ပွညျနယျကနျြးမာရေးမှူး ဒေါကျတာတငျမောငျညှနျ့က တိုကျတှနျးပွောကွားသညျ။“Social Distancing ကို ခရိုငျ COVID-19 ကာကှယျကုသ ထိနျခြုပျရေးကျောမတီက ဆကျလကျ လုပျဆောငျသှားပါမယျ။ ပွညျနယျကနျြးမာရေးဌာန အနနေဲ့ကတော့ သူနဲ့ထိတှတေဲ့ contact ရှိသူတှနေဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ Contact Treating တှလေိုကျပွီးလုပျနတေယျ၊ Positive လူနာကိုလညျး ကုသဖို့လညျး လုပျနပေါတယျ။ ကနျြးမာရေးဌာနက ဖွလြှေော့တာတှကေလှဲလို့ ကနျြတာတှေ Social Distancing ကော၊ Mask တကျတာတှကေော၊ စားသောကျဆိုငျတှကေအစ ကြှနျတျောတို့ ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစား ဝနျကွီးဌာနက သကျမှတျထားတဲ့ ပုံစံအတိုငျး နထေိုငျဖို့သတျမှတျထားပွီးသား။ ဒါကွောငျ့ အဓိကကတော့ ထုတျပွနျခကျြတှေ ကို ပွညျသူတှကေ လိုကျနာဖို့ဘဲ အရေးကွီးပါတယျ”ဟု ပွညျနယျကနျြးမာရေးမှူး ဒေါကျတာတငျ‌မောငျညှနျ့က ပွောကွား သညျ။
ရှမျးပွညျနယျအတှငျး Social Distancing အတှကျ ကနျ့သတျမှုမြား ဖွလြှေော့ပေးနခြေိနျ မူဆယျမွို့တှငျ ပွညျသူမြား သတိရှိ ပွီး ပေါ့ဆရနျမသငျ့ကွောငျး၊ ကနျြးမာရေး အသိရှိပွီး အပွငျထှကျတိုငျး Mask တပျကာ လူခှဲနရေနျ လိုအပျကွောငျး ကရုဏာ လူမှုကူညီရေး အသငျးဥက်ကဋ်ဌ ဦးသောငျးထှနျးက ပွောကွားသညျ။ https://news-eleven.com/article/176761
သြှမျးပွညျအတှငျးရှိ Covid-19 ကူးစကျရောဂါ စဈဆေးဂိတျမြားအားလုံး ပိတျသိမျးလိုကျပွီ ဖွဈကွောငျး စုံစမျးသိရှိရသညျ။ ဇှနျလ ၁ ရကျနကေ့ လဆေိပျဂိတျ ၅ ခု နှငျ့ နယျစပျ ဝငျ/ထှကျ ဂိတျမြားမှ အပ ကနျြရှိသညျ့ သြှမျးပွညျတှငျးရှိ ဂိတျမြား အားလုံး ပိတျသိမျးလိုကျပွီ ဖွဈသညျ။ “အခုလကျရှိမှာတော့ လဆေိပျ နဲ့ နယျစပျ ဂိတျတှမှောပဲ စဈဆေးရေး ဂိတျထားတော့ တယျ။ အကုနျလုံး နီးပါး ပိတျသိမျးလိုကျပွီ” ဟု လူမှုရေး ဝနျကွီး ဒေါကျတာမြိုးထှနျး ကပွောသညျ။
လဆေိပျဂိတျ ၅ ခု ဖွဈသော ဟဲဟိုးလဆေိပျ၊ လားရှိုးလဆေိပျ၊ ကြိုငျးတုံလဆေိပျ၊တာခြီလိတျလဆေိပျနှငျ့ မိုငျးဆတျ လဆေိပျတို့ ဆကျလကျ စဈဆေးထားကွောငျး သိရသညျ။“မနကေ့ စပွီး ပိတျလိုကျတယျ။ တောငျကွီးက ကနျြးမာရေး စဈဆေးတဲ့ ဂိတျ ၄ ဂိတျ စလုံး ပိတျလိုကျပွီ။”ဟု တောငျကွီး စဈဆေးရေးဂိတျမှာ စဈဆေးနသေညျ့ စတေနာ့ဝနျထမျး တဈဦး ကပွောသညျ။ နယျစပျ ဝငျထှကျ ဂိတျမြားဖွဈသညျ့ နမျ့ခမျး၊ မူဆယျ၊ လောကျကိုငျ၊ ခငျြးရှဟေျော၊ တာခြီလိတျ၊ မိုငျးယု၊ ဝမျပုံ ရှိ ဂိတျမြားတှငျ ကနျြးမာရေးစဈဆေးမှုမြား ဆကျလကျ ပွုလုပျထားကွောငျး သိရသညျ။ Covid-19 ကူးစကျ ရောဂါ မပွနျ့ပှားရေးအတှကျ သြှမျးပွညျတှငျးရှိ မွို့အဝငျအထှကျတိုငျးမှာ ကနျြးမာရေး စဈဆေးဂိတျမြား ကို မလေ ၂၄ ရကျ ဝနျးကငျြမှ စပွီးဖှငျ့လှဈကာ ဖွတျသနျးသှားလားသူမြားကို ကနျြးမာရေး စဈဆေးပေးခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။ https://burmese.s hannews.org/archives/16895
သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး တောငျကွီးမွို့တှငျ ထိုငျးပွညျတျောပွနျ ၆၀ဝ ကြျော Quarantine ပွုလုပျထားကွောငျး စုံစမျးသိရှိရ သညျ။ ထိုငျး – မွနျမာ နယျစပျ ကရငျပွညျနယျ မွဝတီ အမှတျ(၂) ခဈြကွညျရေး တံတားမှ ပွနျလညျဝငျရောကျလာသူဖွဈပွီး သြှမျးပွညျသို့ပွနျလာမညျ့ ပွညျတျောပွနျမြားကို တောငျကွီးခရိုငျအတှငျးရှိ မွို့နယျမြားကို Quarantine ထားရှိခွငျးဖွဈသညျ။
“သူတို့ကို ပိုးစဈပွီးမှ ဘယျနှရကျ ထားမယျဆိုတာ ပွောလို့ရပါ့မယျ။ လောလောဆယျတော့ ၁၀ ရကျလောကျ ထားမယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။”ဟု စတေနာ့ဝနျထမျး ကိုဝငျးနိုငျစိုး ကပွောသညျ။ မလေ ၂၇ ရကျမှ ဇှနျ ၃ ရကျနထေိ့ ပွညျတျောပွနျ ၆၀ဝ ကြျော ရောကျရှိထားကွောငျး သိရသညျ။“Quarantine ဝငျတဲ့သူ အားလုံးကို ဓါတျခှဲနမူနာ စဈမယျ။ တဈခြို့ တဈဝကျ စဈပွီးတာလဲ ရှိပါတယျ။ နစေ့ဉျ ဝငျရောကျနပေါတယျ။ ၂၀ဝဝ ကြျော ဝငျလာမယျလို့ သိရပါတယျ”ဟု ကိုဝငျးနိုငျစိုး ကပွော သညျ။
ထိုငျးပွညျတျောပွနျမြားသညျ တောငျကွီးမွို့နယျရှိ မိုးကုတျဝိပဿနာ ရိပျသာ၊ ညောငျရှေ တညျးခိုရေး စခနျး၊ ပငျးတယမွို့ရှိ မိုးကုတျဝိပဿနာ၊ ညောငျရှမွေို့နယျ သကျမှေး သငျတနျးကြောငျး၊ ညောငျရှမွေို့ရှိ ခတျေဆနျးယဉျ၊ ကလောမွို့နယျ ဟဲဟိုးမွို့စိုကျ သိပ်ပံကြောငျး၊ တောငျကွီး ကှနျဗြူတာ တက်ကသိုလျတို့မှာ ထိုငျးပွညျတျောပွနျမြား ထားရှိကွောငျး သိရသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/16927